ကိုယ်ရေးကိုယ်တာထိခိုက်မှုဥပဒေကိုရည်ညွှန်းသည်ဥပဒေရေးရာကုစားနှင့်ကာကွယ်ရေးအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ပြည်တွင်းတရားစွဲဆောင်၏ရလဒ်တစ်ခုအဖြစ်ပ်ာ္ရႊင္တဲ့။ တကယ်တော့၊အဆိုပါစကားလုံး"ထိန်းချုပ်လုပ်ဆောင်"မှကြွလာလက်တင်ဝေါဟာရကိုအနက်အဓိပ္ပာယ်ကျစ်၊အမှား၊သို့မဟုတ်ထိခိုက်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အတွက်ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေ၊ထိန်းချုပ်အရေးယူပါဝင်ပတ်သက်ပါဘူးအစိုးရကတရားစွဲဆိုအ ။ ယင်းအစား၊ဤအမှုများပါဝင်တဲ့ပုဂ္ဂလိကပါင္ၾရှာကြံလျော်ကြေးများ(ငွေ)သည်ဖြစ်ပေါ်လာသောထိခိုက်မှုကိုအားဖြင့်အပြုအမူ။ ချီးရှငျဘုရငျကိုတည်ထောင်ခဲ့သည် နှင့်ကာကိုချီး ၁၉၈၅။ ထိုကတည်းက၊ဒါကြောင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အတည်အဖြစ်ဦးဆောင်လွတ်လပ်သောအပြည့်အဝဝန်ဆောင်မှုဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောနှင့်အတူတပ်ဆင်ထားပြီးဟောင်ကောင်အသိပညာနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရောက်ရှိ။ ပွတ်နဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်၊ကုမ္ပဏီ၏သင်း၏။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ် တည်ထောင် ၂၀၁၄၊ အပေါင်းအသင်းများအကည္မႈျနှင့်ကုန်သွယ်မှုဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီရှန်ကျန်းတွင်အခြေစိုက်၊တရုတ်နိုင်ငံ။အပေါင်းအသင်းရှိပေါအတွေ့အကြုံနှင့်အသိပညာအတွက်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှု၊နှင့်အသိပညာဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ။အဖွဲ့နိုင်စွမ်းသည်စကားပြော၏။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ်ဆောင်းပါးများအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးအရေးပေါ်အကြေးခရက်ဒစ်ကတ်များကို ဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောပေးပြည့်စုံသောဥပဒေန္ေဆာင္မႈရံုးမ်ားကိုုနှင့်ရှန်ကျန်း။ ကျွန်တော်တို့လိုက်နာဖို့အစဉ်အလာနှင့်အခြေစိုက်စခန်းကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများအပေါ်အခြေခံမူသမာဓိ၊သာလွန်ကောင်းမွန်မှု၊ပူးပေါင်းဆောင်၊နှင့်တာဝန်။ ဥပဒေရေးရာဌာန၏ ဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောင္သည္စိုးရကဥပဒေကြောင်းအရ။ အခြားရုံးများ:၊ရှန်ကျန်းဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ်အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးအရေးပေါ်အကြေးခရက်ဒစ်ကတ်များဖြစ်ပါ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီတွင်တည်ရှိပြီးဖြစ်ပါကြောင်း၊တရုတ်နိုင်ငံ။ ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင့်မားတဲ့အရည်အချင်းထောက်ပံ့ပေးအပ်ပြီးဥပဒေရေးရာဝန်ဆောင်မှုထောင်ပေါင်းများစွာ၏အဘို့အ၊ဖောက်သည်အထိနိုင်ငံစုံကော်ပိုရေးရှင်းများ၊ဓာတ်ငွေ့နှင့်ရေနံစီမံကိန်း၊နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အကျိုးအမြတ်မ အဖွဲ့အစည်းများ၊အစိုးရ။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ်ဆောင်းပါးများအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးအရေးပေါ်အခကြေးငွေ အပြည့်အဝဝန်ဆောင်မှု၊အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောနှင့်အတူ၊၎င်း၏ဌာနချုပ်တွင်တည်ရှိသည်။ တည်ထောင်အတွက် ၂၀၀၁၊ ဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောလုံးအဂုဏ်သတင်း၌တရုတ်ဥပဒေဝန်ဆောင်မှုများကိုစျေးကွက်။ ထက်ပိုပြီးနှင့်အတူ ၂၀၀၀ ရှေ့နေများ၊ကျနော်တို့အခု၏အကြီးဆုံးဥပဒေကိုကုမ္ပဏီများအတွက်အာရှနှင့်။ အခြားရုံးများ:ပတ္သက္သူဖြစ်ပါကဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီရဲ့ဆြးေႏြးခရက်ဒစ်ကတ်များတရုတ်နိုင်ငံဥပဒေဝန်ဆောင်မှုကန့်သတ်သည်တစ်ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ဥပေဒလိုင်စင်ရကုမ္ပဏီများကိုဥပဒေနှင့်အကြံပေးခြင်းန်ဆောင်မှုများအတွက်တရုတ်နိုင်ငံ။ ကျွန်ုပ်တို့၏တရားဝင်အသင်းအတွက်-တိမ်အနက်ကိုနားလည်မှုကိုနှင့်အသိပညာနှင့်ဒေသဆိုင်ရာဥပဒေယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဈေးကွက်ဒိုင်းနမစ်။ ထက်ပိုပြီးနှင့်အတူအနှစ်နှစ်ဆယ်၏အကျင့်ဥပေဒတရုတ်နိုင်ငံအတွက်၊ကျွန်ုပ်တို့၏။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ်အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးအရေးပေါ်အခကြေးငွေချစ်ဝမ်္။ ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု-အာရုံအလေ့အကျင့်နှင့်အတူရုံးတွင်ဟောင်ကောင်နှင့်ရှန်ဟိုင်း။ ကျနော်တို့ပေးကိုမှန်ကန်တရားဝင်စွမ်းဆောင်ရည်အဘို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာနှစ်သက်ဖွယ်အကုန်ကျစရိတ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ကရှေ့နေများချမှတ်ဖန်တီးမှုနှင့်လက်တွေ့ကျဖြေရှင်းနည်းများ မကြာခဏရှုပ်ထွေးသောကိစ္စရပ်များ။ ကျနော်တို့ကယူမှညွှန်ကြားချက်ပည္တြင္းႏွ။ အခြားရုံးများ:ရှန်ဟိုင်းဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောရဲ့ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ရေးဆောင်းပါးများ ဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောအခြေခံသည်သာအုိလည်းယခင်ကကဲ့သို့ ဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသော။ အဆိုပါကုမ္ပဏီတွင်တည်ထောင်ဖြစ်ပါတယ်အုိ ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှစပံ့ပိုးထားပြီးအများဆုံးကျယ်ပြန့်အကွာအဝေး၏တရားဝင်ဝန်ဆောင်မှုများမှဒေသခံနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများအဖုံးဒေသများကဲ့သို့ဘဏ်ဘဏ္ဍာရေး၊စီးပွား။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ်ႏအတွက်ဟောင်ကောင်နှင့်ရှန်ဟိုင်းသည္ထိပ်တန်းအရည်အသွေးအခွန်နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အကြံဉာဏ်များကော်ပိုရေးရှင်းများ၊ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီ။ ကျွန်တော်တို့နှင့်အတူအကြံဉာဏ်တစ်ခုကျယ်ပြန့်အတွက်အခွန်နှင့်စီးပွားဒေသများအပါအဝင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ၊အရောင်း၊အိမ်ခြံမြေများ၊လွှဲပြောင်း။ အခြားရုံးများ:ရှန်ဟိုင်းဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောရဲ့ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ဆောင်းပါးဗီဒီယိုများပေါလု ။ ။ ခ်မ္းေမိတ်ဖက်တွင်တည်ရှိသည်ဟောင်ကောင်၊တရုတ်နှင့်အမျိုးမျိုးပေးဥပဒေကြောင်းအရ။ ကျောင်းအုပ်ကြီးဒေသများ၏အလေ့အကျင့်င္သည္ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ကုန်သွယ်ရေးအငြင်းပွားမှုများ၊ကော်ပိုရိတ်နှင့်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေ၊ဥာဏ်သတ္တိ၊ကော်ပိုရိတ် ဘဏ္ဍာရေးနှင့်လုံခြုံရေး၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ်ရှန်ဟိုင်းသည်တရုတ်နိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးမြို့နှင့်အလယ်ဗဟိုျပန္ၾ။ အမ်း ပြီတရုတ်နိုင်ငံတွင် ၁၉၉၄ ခုႏွစ္က။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ် လိမ့်မည် ဟာဗျူညိွေ နှင့်အတူတရုတ်နိုင်ငံဥပဒေရုံးများကိုအပြည့်အဝအကွာအဝေး၏တရားဝင်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်စီးပွားရေးအကြံဥာဏ်ကိုတရုတ်ကုမ္ပဏီနှင့်နိုင်ငံစုံကော်ပိုရေးရှင်းများစီးပွားရေးလုပ်နေအတွက်တရုတ်နိုင်ငံ။ ကနေရှန်ဟိုင်းရုံး၊ တရုတ်နိုင်ငံဥပဒေကမ်းလှမ်းကွဲပြားလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ်တသမတ်တည်းအသိအမှတ်ပြုခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအဖြစ်ဒေသတွင်းအမွေး၊မုန့်ဖုတ်သမား ပြီစီးပွားရေးလုပ်နေအတွက်ဟောင်ကောင်အတွက်နီးပါးအနှစ်လေးဆယ်။ အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းကုမ္ပဏီ၏ကျော်ကြားသောတရုတ်အလေ့အကျင့်၊ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ထက်ပိုသုံးရာရှေ့နေများအနက်ဒေသခံမြစ်နှင့်ပေါင်းစည်းင္ငံတကာရောက်ရှိဖို့အကူအညီျပည္တြင္းႏွ။ အခြားရုံးများ:ဘေဂျင်း၊ရှန်ဟိုင်းဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောရဲ့ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ထည့္ပါအေပၚဘေဂျင်းအတွက်ရုံးအစောပိုင်း ၂၀၁၄ များကိုဥပဒေကြောင်းအဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုဖောက်သည်များလည်ပတ်သို့မဟုတ်တည်ရှိပြီးတရုတ်နိုင်ငံနှင့်အရှေ့အာရှ။ေဘေဂျင်းရုံးနိတ်နီးနီးကပ်ကပ်အတူကုမ္ပဏီ၏အခြားရုံး၌အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ဥရောပနိုင်ငံများ၊လက်တင်အမေရိက၊အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသနှင့်အလယ်ပိုင်း။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ်နံေခ်ာင္း ရဲ့ရုံးကမ်းလှမ်း၊အပြည့်အဝအကွာအဝေး၏တရားဝင်ဝန်ဆောင်မှုနည်းပညာကုမ္ပဏီများနှင့်ပုဂ္ဂလိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီ။ ရှုပ်ထွေးသောမှဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအရေးပါတျမူပိုင်ခွင့်၊မူပိုင်ခွင့်၊ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ကုန်သွယ်ရေးလျှို့ဝှက်ချက်အငြင်းပွားမှုများအတွက်ဆော့ဖ်ဝဲ၊ဟာ့ဒ်ဝဲ၊ကြန္ပ်ဴတာ၊လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား၊ေဖ်ာ္ေျဖေရး။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ်ဖရိဘိဓါန္မ်ားရဲ့ေဟာင္ေကာင္ရုံးအပေါ်အလေးပေးနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရောင်းအဖြစ်ကော်ပိုရိတ်လိုက်နာမှု၊စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု။ ဟောင်ကောင်ရုံးများနှင့်အတူကုမ္ပဏီရဲ့စင်ကာပူရုံး၊စွမ်းရည်မြှင့်ထားပြီးကိုင်တွယ်ရန်အများဆုံးစိန်ခေါ်မှုနှင့်သိသိသာသာအရောင်းအ။ အခြားရုံးများ:ဘေဂျင်းဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောရဲ့ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် ရှေ့နေများအတွက်ဟောင်ကောင်များကိုရလဒ်များ-အတြက္ဦးဥပဒေရေးရာနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြေရှင်းနည်းများကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်ရန်ပုံငွေအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတရုတ်နိုင်ငံမှတရုတ်အဖွဲ့အစည်းစီမံကိန္းဟာဗျူဟာမြောက်အပြင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ။ ဖောက်သည်အပေါ်မှီခိုအားကျွန်ုပ်တို့နက်ရှိုင်းစွာနားလည်မှုဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအလေ့အကျင့်အတွက်တရုတ်နိုင်ငံ။ အခြားရုံးများ:ဘေဂျင်းဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောရဲ့ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် သည်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအကြားနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုကုမ္ပဏီများ၊စီးပွားရေးဥပဒေအကြံဉာဏ်၏အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးတစ်လျှောက်လုံးဥရောပ၊အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊အာရှနှင့်အမေရိကန်။ ကျော်နှင့်အတူ ၂၊ငါးရာရှေ့နေများအတွက်နှစ်ဆယ်ခုနစ်ဓိကစီးပွားရေးစင်တာများကမ္ဘာအဝှမ်းများကိုပြည့်စုံ။ အျခားရုံးခန္း:ေဟာင္ေကာင္၊ရှန်ဟိုင်းဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောရဲ့ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ဝမ်၊၊ ၊။ ၊အတွေ့အကြုံဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောအခြေခံတွင် ၊ကယ်လီဖိုးနီးယား။ ကျနော်တို့နောက်ထပ်ရုံးတွင်ထိုင်ဝမ်၊ဘေဂျင်း၊ေတာင္တန္း၊ကယ်လီဖိုးနီးယား။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်များကိုလက်တွေ့ကျတဲ့နှင့်ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောဖြေရှင်းနည်းများအံဝင်ခွင်ကျဖို့ဥပဒေကြောင်းအရလိုအပ်ချက်များကိုနှစ်ဦးစလုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ်ဟေ ဟုတ္ သည္နှိုင်းဥပဒေရေးရာအကြံဥာဏ်နှင့်ကိုယ်စားပြုမှုအပေါ်အချို့၏အကြီးဆုံးနှင့်အရှုပ်ထွေးဆုံး နှင့်တရားစွဲဆိုခြင်းအတွက်အရေးပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုိင္မ်ားအတွက်ရုံးခန်း နယူးယောက်မြို့အတွက်အလုပ်တာ္ထဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နှင့်အတူရုံးအတွက်ဘေဂျင်း၊ဟောင်ကောင်၊လန်ဒန်၊လော့စ်။ အျခားရုံးခန္း:ေဟာင္ေကာင္ဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောရဲ့ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် ကြွေးဟာသူ့ရဲ့ဂုဏ်သတင်းနှင့်ဇာတ်ကောင်၊သိက္ခာ၊စွမ်းရည်များ၊နှင့်ရှင်စိတ်ဓါတ်ကို၎င်း၏ရှေ့နေနှင့်ဝန်ထမ်းများ၊နှင့်အတူစတင်တည်ထောင်သူ ၊၊၊၊နှင့်ဆက်လက်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုအများပြည်သူအတွက်ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ကော်ပိုရိတ်ဥပဒေကိုအဓိက ။ အျခားရုံးခန္း:ေဟာင္ေကာင္၊ရှန်ဟိုင်းဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောရဲ့ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီအဖြစ်အပြည့်အဝဝန်ဆောင်မှုတရုတ်ကော်ပိုရိတ်နှင့်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောနှင့်အတူဆယ်ရုံးပတ်ပတ်လည်တရုတ်၊နေရာများအတွက်အဓိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစင်တာ၏ဘေဂျင်း၊ရှန်ဟိုင်း၊ရှန်ကျန်း၊ကိုလူကိုု၊တိုုင္းမေဖြစ်ပါက၊၊ နှင့် ၊အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်။ အခြားရုံးများ:ဘေဂျင်း၊၊၊၊ကိုလူက်ာ္စြာ၊၊ရှန်ကျန်း၊ဖြစ်ပါကဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ်တည်ထောင်အတွက် ၁၉၈၃၊ လက်ရှိထက်ပို ၁၃၀ ရှေ့နေနှစ်ဦးနှင့်အတူရုံးတွင်ပဲရစ်နှင့်ဟောင်ကောင်။ ရှေ့နေ'ကျွမ်းကျင်သူအသိပညာအ အရေအထူးကုဒေသများဖို့သူတို့ကိုနိုငျလိပ်စာအပြည့်အဝအကွာအဝေးသူတို့ရဲ့ဖောက်သည်များ၏'လိုအပ်ချက်များကို။ ၏အဓိကနယ်ပယ်များ၏လှုပ်ရှားမှုများပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုများမှာ။ အခြားရုံးများ:ကိုု၊ရှန်ဟိုင်းဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောရဲ့ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် ဦးဆောင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီကော်ပိုရေးရှင်းများ၊ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အစိုးရ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှာအတွက်ကော်ပိုရိတ်၊ဘဏ္ဍာရေး၊ဓာတ္ပံု၊နှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု၏ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦကဏ္ဍများ။ အခြားရုံးများ:ရှန်ဟိုင်းဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ်အပြင်ဖြစ်ခြင်းမှအသိအမှတ်ပြုအဖြစ်ဈေးကွက်ထဲမှာစျေးကွက်ထဲခေါင်းဆောင်အာရှပစိဖိတ်၊၁၃ အကြီးဆုံးဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အတွက်ကမ္ဘာနှင့်အဓိကသော့ချက်တစ်ခုအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်မှဦးဆောင် နှင့်ကံဇာငါးရာကုမ္ပဏီ၊မိမိတို့အလူငယ္ဟာအသိအမှတ်ပြုအကြားကမ္ဘာရဲ့အကြို-မဲရှေ့နေ။ သူတို့ရဲ့အောင်မြင်။ အခြားရုံးများ:ရှန်ဟိုင်းဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ်.
ရှန်ဟိုင်းသည်တရုတ်ရဲ့အကြီးဆုံးမြို့၏အလယ်ဗဟိုျပန္ၾ။ အမ်း ပြီတရုတ်နိုင်ငံတွင် ၁၉၉၄ ခုႏွစ္က။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ် လိမ့်မည် ဟာဗျူညိွေ နှင့်အတူတရုတ်နိုင်ငံဥပဒေရုံးများကိုအပြည့်အဝအကွာအဝေး၏တရားဝင်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်စီးပွားရေးအကြံဥာဏ်ကိုတရုတ်ကုမ္ပဏီနှင့်နိုင်ငံစုံကော်ပိုရေးရှင်းများစီးပွားရေးလုပ်နေအတွက်တရုတ်နိုင်ငံ။ ကနေရှန်ဟိုင်းရုံး၊ တရုတ်နိုင်ငံဥပဒေကမ်းလှမ်းကွဲပြားလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ်ငါတို့ရှန်ဟိုင်းရုံး၊၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္၊ခဲ့တသမတ်တည်းအသိအမှတ်ပြုအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်တွင်ဆုချီးမြှင့်-အနိုင်ရများတွင်ငွေပေးချေ။ အများစုကအထူး၊ကျွန်တော်အကြံပေးဖောက်သည်များအပေါ်အရေးပါပါဝင်သောဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦစီမံကိန်းများ၊လုံခြုံရေး၊နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ၊ပူးတွဲလုပ်ဆောင်ခြင်းဝယ်ယူ၊။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ်တည်ထောင်အတွက် ၁၉၈၃၊ လက်ရှိထက်ပို ၁၃၀ ရှေ့နေနှစ်ဦးနှင့်အတူရုံးတွင်ပဲရစ်နှင့်ဟောင်ကောင်။ ရှေ့နေ'ကျွမ်းကျင်သူအသိပညာ၏တစ်အရေအထူးကုဒေသများဖို့သူတို့ကိုနိုငျလိပ်စာအပြည့်အဝအကွာအဝေးသူတို့ရဲ့ဖောက်သည်များ၏'လိုအပ်ချက်များကို။ ၏အဓိကနယ်ပယ်များ၏လှုပ်ရှားမှုများပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုများမှာ။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ် သည့်နိုင်ငံတကာဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောနှင့်အတူထက်ပို ၆၅၀ ရှေ့နေများနှင့်လည်းရုံးမှာမြောက်အမေရိက၊ဥရောပနှင့်အာရှ။ ၁၈၉၇ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခြင်း၊ကုမ္ပဏီရဲ့အမွေအများ၏ကျယ်ပြန့်အတွေ့အကြုံ၊ခြွင်းချက်တုန့်ပြန်နှင့်အနေနဲ့ယိမ်းယိုင်ကတိကဝတ်မှဝန်ဆောင်မှုခင္သူမ်ားအားကြီးသော၊တာရှည်ရပ်တည်။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ် ငအ၊လျင်မြန်စွာချဲ့ထွင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပေးပြီးပြည့်စုံဥပဒေရေးရာဝန်ဆောင်မှုမှဖောက်သည်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကကဏ္ဍများ။ ကျွန်တော်အကြံပေးနေသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ၏စိတ်နှလုံးမှာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်စီးပွားကူးသန်းနှင့်ကုန်သွယ်ရေး။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပေါင်းစပ်၏လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု၊စီးပွားဖြစ်သဘောထားနှင့်-တိမ်အနက်ကို။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ်ဘရိုင်ယန်ဂူအလေးပေးအားလုံး၎င်း၏စွမ်းအင်နှင့်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအပေါ် အကောငျးဆုံးဥပဒေကြောင်းအရကိုယ်စားပြုမှုကိုကျွန်ုပ်တို့အကျိုးစီးပွား။ ရှန်ဟိုင်းရုံးမှ၎င်း၏တံခါးရွက်ဖွင့်လှစ် ၂၀၀၅။ နီးနီးကပ်ကပ်အလုပ်လုပ်နှင့်အတူအာရှရုံးခန္းတည္ရွိေသာေဟာင္ေကာင္၊ေဘဂ်င္း၊စင်ကာပူနှင့်ကျိုမြို့၊ရှန်ဟိုင်းရုံးကိုယ်စားပြုအမေရိကန်၊ဥရောပနှင့်အာရှကုမ္ပဏီစီးပွားရေးပို့ချသောတရုတ်နိုင်ငံတစ်လျှောက်လုံးနှင့်အာရှပစိဖိတ်ဒေသ၊တရုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ရှိပါတယ်။ ဋဌဘီလ်ဂိတ် ကိုယ်စားပြုဦးဆောင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကော်ပိုရေးရှင်းများ၊တိုးတက်မှုနှင့်အလယ်တန်းစျေးကွက်ကုမ္ပဏီများ၊အရင်းအနှီးဈေးကွက်သူများနှင့်လုပ်ငန်းရှင်တိုင်းအတွက်အဓိကလုပ်ငန်းအုပ်စုအဖြစ်ပြည်သူ့ကဏ္ဍအဖွဲ့အစည်းများ၊ပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းနှင့်လူတစ်ဦးချင်းစီ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အလေ့အကျင့်ဖြစ်ပါတယ် ။ ကျနော်တို့အနေနဲ့နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောနှင့်အတူရုံးအတွက်ဘေဂျင်း၊ဒူဘိုင်း၊ဟမ်းဘတ်၊ေဟာင္ေကာင္၊ဗ ၊လန်ဒန်၊မိုနာကို၊ပဲရစ်၊၊ရှန်ဟိုင်းနှင့်စင်္ကာပူ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များကွာအဝေးကနေအဓိကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကော်ပိုရေးရှင်းမှသေးငယ်သည့်ကုမ္ပဏီ၊ဝါးကုန်သည်များနှင့်ပုဂ္ဂလိကတစ်ဦးချင်းစီ။ ကျနော်တို့အလေ့အကျင့်။ ညို ရဲ့ ေဟာင္ေကာင္ရုံးကနေအိမ်မှအကြီးဆုံးနှင့်အရှည်ကြာဆုံးတည်ဥပဒေကိုကုမ္ပဏီဟောင်ကောင်အတွက်။ အဆင်ပြေတည်ရှိပြီးအလယ်ပိုင်း၊ကျနော်တို့ထက်ပိုပြီး ၁၇၀ ရှေ့နေအခြေစိုက်ဟောင်ကောင်၊အထူးပြုအတွက်အမျိုးမျိုးသောစက်မှုလုပ်ငန်း။ ကျနော်တို့ပေးနိုင်ဖောက်သည်များနှင့်အတူအပြည့်အဝနှင့်ဘက်ပေါင်းစုံအကွာအဝေး။ မု မိတ်ဖက်တစ်ဦးအပြည့်အဝဝန်ဆောင်မှုဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောအခြေခံအတွက်ရှန်ဟိုင်း၊တရုတ်။ အားလုံးရှေ့နေများအတွက်ကုမ္ပဏီဝေမျှမယ်အမြင်:ကတိကဝတ်မှဒေါက်တိုင်နှင့်ထူးချွန်အတွေးအလေးပေးဆာင္လိုက္ပါ။ မု မိတ်ဖက်အမြဲရှိပါတယ်၊ရည်မှန်းချက်များကိုအရည်အသွေးမြင့်မားနှင့်ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောဥပဒေရေးရာ။ ဆက္ဖတ္ရန္တဦးဖြစ်လာခဲ့သည်အကြီးဆုံးဥပဒေရေးရာဝန်ဆောင်မှုပေးအတွက်ကမ္ဘာ့ ၂၀၀၅ မှတဆင့်တစ်ဦးကုမ္ပဏီနှစ်ခုမပေါင်း၏အဖူးအတိုင်းအတာအတွက်ဥပဒေကဏ္ဍမှာပေါ့။ နေစဉ်ကြီးမားတဲ့အတွက်၊ကုမ္ပဏီနှစ်ခုမပေါင်းမဟာဗျူဟာရိုးရှင်းခဲ့ပါတယ်-ကိုဖန်တီးရန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေကျင့်ထိုက်၏၏စောင့်ရှောက်မှုယူပြီးအရေးအပါဆုံးဥပဒေကြောင်းအရလိုအပ်၏။ အော် သည်တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောနှင့်အတူ၊ခန့်မှန်းခြေအား ၁၆၀၀ ရှေ့နေများအတွက်ခုနစ်။ ကျနော်တို့၏ကျယ်ပြန့်ဥပဒေ ဝန်ဆောင်မှုမှလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းကျွန်ုပ်တို့၏ကွဲပြားခြားနားဖောက်သည်။ မဟာဗျူဟာ၏ရံုးမ်ားကိုအဓိကကော်ပိုရိတ်ဘဏ္ဍာရေးစင်တာများကမ္ဘာအကစွမ်းဆောင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကို။ ဒီတာဝန်ကိုနားလည်ခြင်းအားဖြင့်၎င်း၏ဖောက်သည်များ'တန်ဖိုးများနှင့်တောင်းဆိုချက်နှင့်အံဝင်ခွင်ဟာဗျူဟာအောင်မြင်ရန်ပန်းတိုင်။ ဒီအလမ်းအတွက်၊ ကျေနပ်ရန်လိုအပ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏သင်သည်သူတို့ယုံကြည်မှုကိုရဖို့။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များကတန်ဖိုးကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ယူသောကြောင့်တစ်မူထူးခြားသော။.
ဥပဒေရုံး၏ဗင်္ယာမိန်ဓါန္အခ်ိဳသည်ကုန်သွယ်၏နာမတော် ။ ဓါန္အခ်ိဳရဲ့အလေ့အကျင့်အဆိုပါဥပဒေ၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီဟုခေါ်သည်ရှန်ဟိုင်း ဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသော။ ၌တည်ရှိသောရှန်ဟိုင်း၊တရုတ်၊ကုမ္ပဏီအကွာအဝေးကိုထောက်ပံ့ပေးဥပဒေရေးရာဝန်ဆောင်မှုကိုပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာရှိဖောက်သည်များအဆိုပါဒေသများတွင်စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းပွား။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ်အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးအရေးပေါ်အခကြေးငွေရန္ေရှေ့နေများကအထက်တန်းကျကျဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောပေးတစခန်းနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဥပဒေရေးရာဝန်ဆောင်မှုအတွက်ဟောင်ကောင်ဥပဒေနှင့် ဥပဒေများကို။ ဥပဒေကိုကုမ္ပဏီနှစ်ခုအရုံး-တဟောင်ကောင်အတွက်လေ့ကျင့်ဟာင္ေကာင္ဥပဒေများနှင့်အခြားအတွက်ရှန်ကျန်း၊တရုတ်လေ့ကျင့် ဥပဒေများကို။ ဥပဒေအဓိကအားဖြင့်အလေ့အကျင့်အတွက်။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ် အပြည့်အဝဝန်ဆောင်မှု၊အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောနှင့်အတူ၊၎င်း၏ဌာနချုပ်တွင်တည်ရှိသည်။ တည်ထောင်အတွက် ၂၀၀၁၊ ဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောလုံးအ ဂုဏ်သတင်း၌တရုတ်ဥပဒေဝန်ဆောင်မှုများကိုစျေးကွက်။ ထက်ပိုပြီးနှင့်အတူ ၂၀၀၀ ရှေ့နေများ၊ကျနော်တို့အခု၏အကြီးဆုံးဥပဒေကိုကုမ္ပဏီများအတွက်အာရှနှင့်။ အခြားရုံးများ:ပတ္သက္သူဖြစ်ပါကဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ်ဆောင်းပါးများအခမဲ့ ကတ်များကိုပထမအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့်မူပိုင်ရုံးတွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၃။ ကျနော်တို့အတွက်အထူးပြုကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေ၊ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန္း၊မူပိုင်အခွင့်နှင့်တရုတ်ရေးရာနှင့်ဆက်စပ်သောကိစ္စများအား။ ကြောင့်အတက်ကြွသောစီးပွားရေးအပြန်အလှန်အကြားဝမ်၊ဟောင်ကောင်နှင့်ပြည်။ အျခားရုံးခန္း:ေဟာင္ေကာင္ဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောရဲ့ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်တရုတ်နိုင်ငံဥပဒေဝန်ဆောင်မှုကန့်သတ်သည်တစ်ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ဥပေဒလိုင်စင်ရကုမ္ပဏီများကိုဥပဒေနှင့်အကြံပေးခြင်းန်ဆောင်မှုများအတွက်တရုတ်နိုင်ငံ။ ကျွန်ုပ်တို့၏တရားဝင်အသင်းအတွက်-တိမ်အနက်ကိုနားလည်မှုကိုနှင့်အသိပညာနှင့်ဒေသဆိုင်ရာဥပဒေယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဈေးကွက်ဒိုင်းနမစ်။ ထက်ပိုပြီးနှင့်အတူအနှစ်နှစ်ဆယ်၏အကျင့်ဥပေဒတရုတ်နိုင်ငံအတွက်၊ကျွန်ုပ်တို့၏။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ်အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးအရေးပေါ်အခကြေးငွေချစ်ဝမ်္။ ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု-အာရုံအလေ့အကျင့်နှင့်အတူရုံးတွင်ဟောင်ကောင်နှင့်ရှန်ဟိုင်း။ မေစ်းႀကီး စွမ်းရည်များအဘို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာနှစ်သက်ဖွယ်အကုန်ကျစရိတ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ကရှေ့နေများချမှတ်ဖန်တီးမှုနှင့်လက်တွေ့ကျဖြေရှင်းနည်းများကိုမကြာခဏရှုပ်ထွေးသောကိစ္စရပ်များ။ ကျနော်တို့ကယူမှညွှန်ကြားချက်ပည္တြင္းႏွ။ အခြားရုံးများ:ရှန်ဟိုင်းဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောရဲ့ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ရေးဆောင်းပါးများပေါလု ။ ။ ခ်မ္းေမိတ်ဖက်တွင်တည်ရှိသည်ဟောင်ကောင်၊တရုတ်နှင့်အမျိုးမျိုးပေးဥပဒေကြောင်းအရ။ ကျောင်းအုပ်ကြီးဒေသများ၏အလေ့အကျင့်င္သည္ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ကုန်သွယ်ရေးအငြင်းပွားမှုများ၊ကော်ပိုရိတ်နှင့်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေ၊ဥာဏ်သတ္တိ၊ကော်ပိုရိတ်ဘဏ္ဍာရေးနှင့်လုံခြုံရေး၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ်ရှန်ဟိုင်းသည်တရုတ်နိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးမြို့နှင့်အလယ်ဗဟိုျပန္ၾ။ အမ်း ပြီတရုတ်နိုင်ငံတွင် ၁၉၉၄ ခုႏွစ္က။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ် လိမ့်မည် ဟာဗျူညိွေ နှင့်အတူတရုတ်နိုင်ငံဥပဒေရုံးများကိုအပြည့်အဝအကွာအဝေး၏တရားဝင်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်စီးပွားရေးအကြံဥာဏ်ကိုတရုတ်ကုမ္ပဏီနှင့်နိုင်ငံစုံကော်ပိုရေးရှင်းများစီးပွားရေးလုပ်နေအတွက်တရုတ်နိုင်ငံ။ ကနေရှန်ဟိုင်းရုံး၊ တရုတ်နိုင်ငံဥပဒေကမ်းလှမ်းကွဲပြားလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ်တသမတ်တည်းဖြစ်အသိအမှတ် ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အတွက်တိုင်းဒေသကြီး၊ဝန် ပြီစီးပွားရေးလုပ်နေအတွက်ဟောင်ကောင်အတွက်နီးပါးအနှစ်လေးဆယ်။ အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းကုမ္ပဏီ၏ကျော်ကြားသောတရုတ်အလေ့အကျင့်၊ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ထက်ပိုသုံးရာရှေ့နေများအနက်ဒေသခံမြစ်နှင့်ပေါင်းစည်းင္ငံတကာရောက်ရှိဖို့အကူအညီျပည္တြင္းႏွ။ အခြားရုံးများ:ဘေဂျင်း၊ရှန်ဟိုင်းဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောရဲ့ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ထည့္ပါအေပၚဘေဂျင်းအတွက်ရုံးအစောပိုင်း ၂၀၁၄ များကိုဥပဒေကြောင်းအဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုဖောက်သည်များလည်ပတ်သို့မဟုတ်တည်ရှိပြီးတရုတ်နိုင်ငံနှင့်အရှေ့အာရှ။ နိုင်ငံတော်အဆင့်ရုံးနိတ်နီးနီးကပ်ကပ်အတူကုမ္ပဏီ၏အခြားရုံး၌အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ဥရောပနိုင်ငံများ၊လက်တင်အမေရိက၊အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသနှင့်အလယ်ပိုင်း။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ်နံေခ်ာင္း ရဲ့ရုံးကမ်းလှမ်း၊အပြည့်အဝအကွာအဝေး၏တရားဝင်ဝန်ဆောင်မှုနည်းပညာကုမ္ပဏီများနှင့်ပုဂ္ဂလိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီ။ ရှုပ်ထွေးသောမှဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအရေးပါတျမူပိုင်ခွင့်၊မူပိုင်ခွင့်၊ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ကုန်သွယ်ရေးလျှို့ဝှက်ချက်အငြင်းပွားမှုများအတွက်ဆော့ဖ်ဝဲ၊ဟာ့ဒ်ဝဲ၊ကြန္ပ်ဴတာ၊လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား၊ေဖ်ာ္ေျဖေရး။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ် ရှေ့နေများအတွက်ဟောင်ကောင်များကိုရလဒ်များ-အတြက္ဦးဥပဒေရေးရာ နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြေရှင်းနည်းများကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်ရန်ပုံငွေအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတရုတ်နိုင်ငံမှတရုတ်အဖွဲ့အစည်းစီမံကိန္းဟာဗျူဟာမြောက်အပြင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ။ ဖောက်သည်အပေါ်မှီခိုအားကျွန်ုပ်တို့နက်ရှိုင်းစွာနားလည်မှုဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအလေ့အကျင့်အတွက်တရုတ်နိုင်ငံ။ အခြားရုံးများ:ဘေဂျင်းဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောရဲ့ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် သည်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအကြားနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုကုမ္ပဏီများ၊စီးပွားရေးဥပဒေအကြံဉာဏ်၏အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးတစ်လျှောက်လုံးဥရောပ၊အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊အာရှနှင့်အမေရိကန်။ ကျော်နှင့်အတူ ၂၊ငါးရာရှေ့နေများအတွက်နှစ်ဆယ်ခုနစ်ဓိကစီးပွားရေးစင်တာများကမ္ဘာအဝှမ်းများကိုပြည့်စုံ။ အျခားရုံးခန္း:ေဟာင္ေကာင္၊ရှန်ဟိုင်းဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောရဲ့ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ဟေ ဟုတ္ သည္နှိုင်းဥပဒေရေးရာအကြံဥာဏ်နှင့်ကိုယ်စားပြုမှုအပေါ်အချို့၏အကြီးဆုံးနှင့်အရှုပ်ထွေးဆုံး နှင့်တရားစွဲဆိုခြင်းအတွက်အရေးပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုိင္မ်ားရုံးတွင်နယူးယောက်မြို့အတွက်အလုပ်တာ္ထဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နှင့်အတူရုံးအတွက်ဘေဂျင်း၊ဟောင်ကောင်၊လန်ဒန်၊လော့စ်။ အျခားရုံးခန္း:ေဟာင္ေကာင္ဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောရဲ့ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် ကြွေးဟာသူ့ရဲ့ဂုဏ်သတင်းနှင့်ဇာတ်ကောင်၊ သိက္ခာ၊စွမ်းရည်များ၊နှင့်ရှင်စိတ်ဓါတ်ကို၎င်း၏ရှေ့နေနှင့်ဝန်ထမ်းများ၊နှင့်အတူစတင်တည်ထောင်သူ ၊၊၊၊နှင့်ဆက်လက်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုအများပြည်သူအတွက်ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ကော်ပိုရိတ်ဥပဒေကိုအဓိက ။ အျခားရုံးခန္း:ေဟာင္ေကာင္၊ရှန်ဟိုင်းဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ်တည်ထောင်အတွက် ၁၉၈၃၊ လက်ရှိထက်ပို ၁၃၀ ရှေ့နေနှစ်ဦးနှင့်အတူရုံးတွင်ပဲရစ်နှင့်ဟောင်ကောင်။ ရှေ့နေ'ကျွမ်းကျင်သူအသိပညာ၏တစ်အရေအထူးကုဒေသများဖို့သူတို့ကိုနိုငျလိပ်စာအပြည့်အဝအကွာအဝေးသူတို့ရဲ့ဖောက်သည်များ၏'လိုအပ်ချက်များကို။ ၏အဓိကနယ်ပယ်များ၏လှုပ်ရှားမှုများပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုများမှာ။ အခြားရုံးများ:ကိုု၊ရှန်ဟိုင်းဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောရဲ့ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် ဦးဆောင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီကော်ပိုရေးရှင်းများ၊ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အစိုးရ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှာအတွက်ကော်ပိုရိတ်၊ဘဏ္ဍာရေး၊ဓာတ္ပံု၊နှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု၏ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦကဏ္ဍများ။ အခြားရုံးများ:ရှန်ဟိုင်းဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ်အပြင်ဖြစ်ခြင်းမှအသိအမှတ်ပြုအဖြစ်ဈေးကွက်ထဲမှာစျေးကွက်ထဲခေါင်းဆောင် အာရှပစိဖိတ်၊၁၃ အကြီးဆုံးဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အတွက်ကမ္ဘာနှင့်အဓိကသော့ချက်တစ်ခုအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်မှဦးဆောင် နှင့်ကံဇာငါးရာကုမ္ပဏီ၊မိမိတို့အလူငယ္ဟာအသိအမှတ်ပြုအကြားကမ္ဘာရဲ့အကြို-မဲရှေ့နေ။ သူတို့ရဲ့အောင်မြင်။ အခြားရုံးများ:ရှန်ဟိုင်းဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောရဲ့ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ႏ ယံ-အပြည့်အဝဝန်ဆောင်မှုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ။ ဖောက်သည်များအကျိုးအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပေါင်းစပ်အလေ့အကျင့်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကတိကဝတ်ကိုအရည်အသွေးနှင့်အတူပေါင်းစပ်တစ်မူထူးခြားသောကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်။ ကျနော်တို့အလုပ်လုပ်အတူပြည်တွင်းဥပဒေကုမ္ပဏီပြည်ပရာပူဇော်သက္ကာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ထိပ်တန်းဖြေရှင်းနည်းများကိုရှုပ်ထွေးတဲ့နိုင်ငံတကာအရေးပါပါတယ်။ မှာ။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ် သည့်နိုင်ငံတကာဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောနှင့်အတူထက်ပို ၆၅၀ ရှေ့နေများနှင့်လည်းရုံးမှာမြောက်အမေရိက၊ဥရောပနှင့်အာရှ။ ၁၈၉၇ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခြင်း၊ကုမ္ပဏီရဲ့အမွေအများ၏ကျယ်ပြန့်အတွေ့အကြုံ၊ခြွင်းချက်တုန့်ပြန်နှင့်အနေနဲ့ယိမ်းယိုင်ကတိကဝတ်မှဝန်ဆောင်မှုခင္သူမ်ားအားကြီးသော၊တာရှည်ရပ်တည်။ အခြားရုံးများ:ရှန်ဟိုင်းဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောရဲ့ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမည္ရွိကုမၸ၊ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်နှင့်စီးပွားရေးဥပဒေ ကုမ္ပဏီ။ စွမ်းရည်ရှိပါတယ်ကူညီရန်ဖောက်သည်များကမ်ဘာပျေါတှငျဘယ်နေရာမှာမဆို။ ကျွန်တော်တို့၏ရှည်လျားသောသမိုင်းကြောင်းသရုပ်ဆောင်များအတွက်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီကြည့်ဖို့ဖွင့်ထားသူများအတွက်စျေးကွက်။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ်မှာရိဒ်မစ်ကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်ယုံကြည်ကြောင်း'မဖြောင့်ဖွင့်။ ဒါဟာရဲ့ကိုယ်ပိုင်။ ငါတို့သည်သင်တို့တစ်ထိပ်တန်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီအလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီအနီးတွင်မိတ်ဖက်နှင့်အတူ၎င်း၏ဖောက်သည်တလျှောက်လုံးအောင်မြင်သော ၁၂၅ နှစ်နည်းကိုစိုက်ပျိုးခံရမှသင်ဦးဆောင်အမျိုးသားဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီတစ်ခုအ ဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသော။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ်သူခိုးသူခိုးသည့်နိုင်ငံတကာဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီအပေါ်အာရုံစူးစိုက်လေးရေးကဏ္ဍများ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုံးအတွက်အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးစင်တာတစ်လျှောက်လုံးဥရောပ၊အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်အာရှ၊ကျွန်တော်အမြင်လောကကြီးကိုအမှန်ဘီလူးလေးဦး၏အရေးပါသောစက်မှုလုပ်ငန်းများ:စွမ်းအင်နှင့်အခြေခံအဆောက်အဦများ၊ဘဏ္ဍာရေး။ အခြားရုံးများ:ရှန်ဟိုင်းဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောရဲ့ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် ။ ။ ။ သည်တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောလေ့ကျင့်ပါးအားလုံးဒေသများတွင်ပြည်တွင်းဥပဒေနှင့်အချို့သောဒေသများရှိအဖြူကော်လာရာဇဝတ်မှုဥပဒေကို။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ်
အမေရိကန်နှင့်ရံဖန်ရံခါဥရောပဥပဒေကျောင်းသားများနှင့်မကြာသေးဥပဒေကျောင်းဘွဲ့ရအမြဲဆက်သွယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တရုတ်ရှေ့နေမေးမြန်းဖို့သူတို့သည်အဘယ်သို့ပြုရမည်ဖြစ်လာရန်နိုင်ငံတကာရှေ့နေများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်တရုတ်နိုင်ငံဥပဒေ။ ငါ့အကြံဥာဏ်သူတို့မှအများအားဖြင့်အတန်ငယ် စာတမ်းအပေါ်တည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သည်ဥပဒေကြောင်းအရအစိုင်အခဲအခြေခံအုတ်မြစ်စဉ်အဆက်မပြတ်အလုပ်လုပ်တိုးတက်ကောင်းမွန်အပေါ်မှာသင်၏တရုတ်ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှု။ ကျွန်တော်တော့ဘယ်လိုအကြောင်းပြောဆိုတိုင်းနီးပါးရှေ့နေသိရုံသို့ကျဆင်းပြည့်စုံစေရန်ဆက်လက်ရေးသားလေ့အကျင့်ဧရိယာပြီးနောက်အဖြစ်နှစ်ပေါင်းများစွာရှေ့နေ။ အစဉ်မပြတ်ငါသဘောရဒီအအတိအကျဘာကိုဤဥပဒေကျောင်းသားလူငယ်ရှေ့နေများကြားချင်ကြပါဘူး။ သူတို့ချင်တယ်အတိအဖြစ်ပို့ချပေးခြင်းအပေါ်အောက်တယောက်ရဲ့နှလုံး၊အမြစ်၊အခြေခံလေ့ကျင့်ရေး၊၊ကံကောင်း။ သူတို့လိုဖြစ်လာတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရှေ့နေနက်ဖြန်သူတို့ကိုပြောပြလျှင်သူတို့ဘယ်လိုလိုက်နာသည့်နောက်နှင့်ခက်ခဲနှင့် စပ္ထားလမ်းကြောင်းကိုသူတို့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်တဦးတည်းအချို့။ ဒီနေရာမှာတော့အချို့ကိုအတိအကျ၊အရာအချို့ကိုငါ့ကိုယ်ပိုင်အရင္းနှင့်အချို့သော နှင့် အခြားသူများထံမှ။ များစွာသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီအတွက်တရုတ်ပြည်မကြီးရှာရှေ့နေနှင့်အတူအမေရိကန်သို့မဟုတ်ဗြိတိသျှဥပဒေဒီဂရီနှင့်အဆင့်မြင့်တရုတ်ဘာသာစကားစြမ္းရည္မ်ား၊ဒါပေမယ့်များအတွက်အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းပြချက်၊ဒါကြောင့်ခက်ခဲသည်အပါအဝင်တရုတ်နိုင်ငံဥပဒေဈေးကွက်မရှိဘဲယခင်အတွေ့အကြုံအတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု။ ဒါဟာသတိပြုဖို့အရေးကြီး ယေဘုယျအားမလိုင်စင်ရဖြစ်လာတရုတ်ရှေ့နေများသူတို့လာမှသာနိုင်ငံခြားရေးကိုယ်စားလှယ်ရှေ့နေ။ နှင့်ရှိပါတယ်ဥပေဒနိုင်ငံခြားရေးကိုယ်စားလှယ်ရှေ့နေရှိသည်မှာအနည်းဆုံးနှစ်နှစ်အတွေ့အကြုံအခြားပြောမီသူတို့အတွက်အလုပ်လုပ်။ အများစုကရှေ့နေများဒီအပတ်ပတ်လည်ရဖို့အားဖြင့်ခွဲအချိန်အကြားနောက်ထပ်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်(အပါအဝင်ဟောင်ကောင်)။ ဖြုန်းလျှင်ခြောက်လအတွင်းတစ်ရက်မှာအခြားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်နှင့်တစ်နှစ်တာ၏ကြွင်းသောအရာအတွက်၊တရုတ်အမည်ကိုရေတွက်အဖြစ်နှစ်အတွက်နောက်ထပ်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်။ ပါက သင်ပြုရန်အဘို့အကြောင်းနှစ်နှစ်၊အကြုံးလုပ်ကိုင်ဖို့အတွက်တရုတ်အဖြစ်နိုင်ငံခြားရေးကိုယ်စားလှယ်ရှေ့နေ။ သင်ဆဲမ"အလေ့အကျင့်"ဥပေဒတရုတ်နိုင်ငံအတွက်၊ဒါပေမယ့်သင်ကအလုပ်လုပ်နိုင်။ ယေဘုယျအားဖြင့်၊အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဒီလိုလုပ်ဖို့ဖြုန်းဖို့သင်၏ပထမဦးဆုံးနှစ်အနည်းငယ်လေ့ကျင့်ဥပဒေမှာအဓိကကျွန်တော်တို့လန်ဒန်မြို့ဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောပြီးတော့သွားဖို့အစီအလေ့အကျင့်အတွက်စုံတွဲတစ်တွဲရန်အနှစ်။ ဒီနည်းလမ်းသင်အမေရိကန်သို့မဟုတ်ဗြိတိသျှဥပဒေပညာရေးနှင့်တက္ကသိုလ်ကိုအဆင့်မြင့်ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီအတွေ့အကြုံ။ ပင်လျှင်တရုတ်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ပါသည်၊သင်သည်သင်၏ထည့်သွင်းတန်ဖိုးတစ်ခုဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီအတွက်တရုတ်နိုင်ငံ၏အမေရိကန်နဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံသမိုင်းကြောင်း။ သင်တို့ထံသို့သွားလျှင်တရုတ်ချက်ချင်းဘွဲ့ရပြီးနောက်သင်သို့ဖြတ်သင်သည်အဘယ်သို့ပေးနိုင်။ ဒါဟာသတိပြုဖို့အရေးကြီးကြောင်းစဉ်းစားဖို့ကိုမှန်ကန်သော့ချက်တိုးမြှင့်သင့်ရဲ့တန်ဖိုးအဖြစ်နိုင်ငံခြားရေးရှေ့နေလုပ်နေတာတရုတ်ဥပဒေအဖြစ်ဖတ်နိုင်ရေးအတွက်တရုတ်။ နိုင်ဖြစ်ခြင်းရန်အမိန့်ဘီယာသို့မဟုတ်အတွင်းရာသီဥတုရုတ်သည်ကြီးတစ်ဦးအဖြစ်ခရီး၊ဒါပေမယ့်နီးပါးအနတ္တဖြစ်အသစ်တစ်ခုရှေ့နေအဘယ်သူ၏အချုပ်အလုပ်အကိုင်အများသောအားဖြင့်သုတေသနနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရေးဥပဒေနှင့်စာချုပ်များ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊အရာတစ်ခုခုလည်းမရှိကပြောသည်ခံရဖို့သွားရန်ညာဘက်ပြီးနောက်ဥပဒေကျောင်း။ ဆယ်ခုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းလျှင်သင်ချက်ချင်းသွားဖို့တရုတ်မရခေတ်ဖြစ်အဆုံးသတ်သင့်ရဲ့ဥပဒေကြောင်းအရအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမပြုခင်ကစတင်ခဲ့။ ကျွန်တော်သိသည်အတန်ကောင်းသူသွားဖို့ဂျပန်ကိုရီးယားသို့မဟုတ်တရုတ်နိုင်ငံနှင့်သုံးစွဲသည့်ဆယ်စုနှစ်အတွက်အဲဒီနိုင်ငံအားဖြင့်အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းဖြစ်လာလုနီးပါး ရှေ့နေအဖြစ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌။ ဇေးရှင်းဖြစ်ပြောင်းလဲဤလျင်မြန်စွာ၊ဒါပေမယ့်နေဆဲအနည်းငယ်အန္တရာယ်နှင့်ဘွင်းဘွင်းငါမသိလက်ရှိအခြေအနေကောင်းဖို့လုံလောက်တဲ့အကြံပေး။။။။။ ငါကြားရကြပြီသော်လည်းကချင်ဘူးဖြစ်ဖို့တစ်ဖက်မှာအဓိကကုမ္ပဏီဥပဒေ၊သွားရန်ပထမဦးဆုံးအဖြစ်ကောင်းကောင်း။ သို့သော်၊အဘို့ရှာကြသည်လျှင်အမေရိကန်ဥပဒေအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်၊ဒါဟာဖြစ်နိုင်နေဆဲအကောင်းဆုံးနေထိုင်ရန်အတွက်ပြည်ထောင်စုသည်အနည်းဆုံးအနှစ်စုံတွဲတစ်တွဲဘွဲ့ရပြီးနောက်ဥပဒေကျောင်း။ စကားပြော၏ဥပဒေကျောင်းတစ်ခု၏ပိုပြီးအသုံးများတဲ့အီးမေးလ်ငါတို့တရုတ်နိုင်ငံရှေ့နေရလာမှဥပဒေကျောင်းသားများနှင့်အလားအလာဥပဒေကျောင်းသားများ၊တောင်းပန်ပြီးသူတို့ဘာတွေစတင်သင့်လုပ်နေတာအခုမှ ဘို့မိမိတို့ကိုယ်ကိုပွငျဆငျအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလေ့ကျင့်တရုတ်နိုင်ငံဥပဒေ။ ငါ့အကြံဥာဏ်ကြောင်းလည်းဖြစ်နိုင်နည်းနည်းလွန်းဇင်ကဲ့သို့မိမိတို့အဘို့အရသာ၊ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာဝင်။ သို့ရရန်အကောင်းဆုံးဥပဒေကျောင်းနိုင်၊မဟုတ်တရုတ်။ အဖြစ်ယူအများအပြားကော်ပိုရိတ်နှင့်မူပိုင်နှင့်ပုဂ္ဂလိကနိုင်ငံတကာဥပဒေသင်တန်းများအဖြစ်သင်နိုင်ပါတယ်။ ရကိုအကောင်းဆုံးအဆင့်ဖြစ်သင်နိုင်ပါတယ်။ ခရီးသွားလာအဖြစ်တာသင်လုပ်နိုင်အဖြစ်။ ဖတ္ခ်က္ေတရုတ်ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုအဖြစ်တာသင်လုပ်နိုင်အဖြစ်။ ဖတ္ခ်က္ေသမျှကိုအခြားနိုင်ငံခြားဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုသင်အဖြစ်တာသင်လုပ်နိုင်အဖြစ်။ မကြာသေးမီက၊ငါဖြစ်ရပြီဆိုတော့အတော်များများအီးမေးလ်ကိုအဘယ်သူပြည်သူ့ထံမှပြီးသားအဖွဲ့တရုတ်နိုင်ငံအတွက်သာမဟုတ်-ရှေ့နေလုပ္အခြင့္အလမ္းမ်ား၊မေးရတဲ့အကြောင်းတစ်ဥပဒေမှဘွဲ့ကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဥပဒေကျောင်းအစီအစဉ်အပြန်တွင်ချည်ထားနှင့်အတူတရုတ်ဥပဒေကျောင်း။ သူတို့ကိုအကြှနျုပျတုန့်ပြန်ဖြစ်ပါတယ်မေးဖို့အဘယျသို့ဒီဂရီခွင့်ပြုပါလိမ့်မည်ဒီလိုလုပ်ဖို့သူတို့ကိုတစ်ချိန်ကသူတို့ပြည့်စုံသောကြောင့်၊ဒါကြောင့်ငါနားလည်ကြောင်းဒါကြောင့်လိမ့်မည်မဟုတ်ဖို့ခွင့်ပြုလေ့အကျင့်ဥပေဒအတွက်ဖြစ်စေတရုတ်သို့မဟုတ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု။ မည်သူမဆိုယုံကြည်ငါသည်ဤအမှားသို့မဟုတ်လျှင်မည်သူမဆိုအများသတိပြုမိတစ်နိုင်ငံကဘွဲ့ရတစ်ဦးပါမစ္ေျမ နှင့်အတူဒီဂရီအလေ့အကျင့်ဥပေဒ၊ငါ့ကိုသိကြကုန်အံ့ကျေးဇူးပြုကနေတဆင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမှတ်ချက်ပေးရန်။ ဖွေရန်တရုတ်"နိုင်ငံတကာ"ဥပဒေကျောင်း။ လေ့ကျင့်ဥပေဒအလေ့အချို့လိုအပ်ရိုက်။ လေ့ကျင့်ဥပေဒတရုတ်နိုင်ငံအတွက်သို့မဟုတ်အပင်နှင့်အတူတရုတ်လည်းလိုအပ်ပါတယ်အချို့ရိုက်။ ဝေးလွန်းများစွာသောလူသို့အရဥပေဒအခါအမတော်သည်သူတို့ကိုသူတို့မပျော်တက်အဆုံးသတ်။ သင့်မေတ္တာတရားအပြည့်ဖြစ်လာချင်ရှေ့နေတစ်ဦးသို့မဟုတ်နှောင့်အယှက်မပြု။ သင့်မေတ္တာတရားအပြည့်ချင်ဖြစ်လာတဲ့တရုတ်နိုင်ငံကရှေ့နေသို့မဟုတ်နှောင့်အယှက်မပြု။ အဆိုပါစာအုပ်၊တရုတ်နိုင်ငံဆာင္အ:အသံအတွေ့အကြုံကနေနှစ်ဆယ်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးခေါင်းဆောင်များ၊စာရင်းကိုရိုက်အီးအိုရှာသူတို့ရဲ့အတွက်ကျွမ်းကျင်သူများအဖွဲ့မန်နေဂျာများအတွက်တရုတ်နိုင်ငံနှင့်ဤစရိုက်လက္ခဏာတွေတော်တော်များများတူညီသောစရိုက်လက္ခဏာလိုအပ်အဖြစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရှေ့နေသို့မဟုတ်ကောင်းတစ်ခုတရုတ်နိုင်ငံကရှေ့နေ။ ဒီမှာစာရင်းဖြစ်ပါတယ်၊နှင့်အတူငါ့မှတ်ချက်များအတွက်စောင်း:အနည်းငယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ဥပဒေကျောင်းသားအကြှနျုပျကိုမေးလ်ပို့ပေးတဲ့လင့်ခ် မေးခွန်းနှင့်အဖြေအစည်းအဝေးအပေါ်ယူသောအရာကိုအတွက်အောင်မြင်ဖို့အတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကတရုတ်နိုင်ငံတွင်နိုင်ငံခြားသားအဖြစ်။ ဥပဒေကျောင်းသားအထူးသဖြင့်ရည်ညွှန်း ဖြေပေးသဖြင့်ဒါဝိဒ်သည်ဝံပုလွေနှင့်ရှိမရှိမေးသူတို့အားအမှုအရာလျှောက်ထားရန်တရုတ်နိုင်ငံရှေ့နေအဖြစ်ကောင်းစွာ။ သူတို့အများဆုံးဆက်ဆက်ပြုမည်။ တိကျတဲ့မေးခွန်း အပေါ်ခဲ့သည်"အရန်ကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်တဲ့အောင်မြင်ဖို့အတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကတရုတ်နိုင်ငံတွင်နိုင်ငံခြားသားအဖြစ်။"ဒါဝိဒ်သည်ဝံပုလွေရဲ့အကောင်းဆုံးအဖြေအဖြစ်နံပါတ်တစ်ကြောင်းကြောင့်အမြင့်ဆုံးအရေအတွက်ကို(အပါအဝင်တစ်အရေအထင်ရှားတရုတ်ဘလော့ဂါများ)မဲအရေအတွက်။ ဝံပုလွေရဲ့ဖြေကြားခဲ့ကြောင်း"ဖြစ်သူတစ်စုံတစ်ယောက်ငှားရမ်း၏ကိုယ်စားကြီးမားသောနှင့်အသေးစားကုမ္ပဏီမှာတရုတ်နိုင်ငံအတွက်၊ငါသည်သင်ပြောပြနိုင်အမျိုး၏လူငယ်င္ငံျရရှိသူငှါးရှိပါတယ်အများစုသို့မဟုတ်အားလုံး၏အောက်:(ငါ့မှတ်ချက်များ၌စောင်း)ဖြင့်ကိုယ်စားပြုကုမ္ပဏီစီးပွားရေးလုပ်နေအတွက်ထွန်းသစ်စစျေးကွက်။ အကြှနျုပျကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာဆောက်လုပ်ဖို့ငါ့ကွန်ယက်နှင့်ကြာအဆက်မပြတ်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ခရီးသွားဖို့ကိုထိန်းသိမ်းရန်။ ငါခဲ့သည်အဖြစ်ကွဲပြားအဖြစ်လုံခြုံရေးလွှတ်ပေးရန်၏စနစ်တကျကျင်းပရဟတ်ယာဉ်များအတွက်ပါပူအာနယူးဂီနီ၊ဥပဒေရေးရာမူဘောင်ရွှေ့ဖို့ကျောက်စိမ်းမှကနေဒါဖို့ပိုလန်ရဲ့အတွင်းပိုင်း၊အလုပ္ရွင္ရာပေါင်းများစွာ အဆိုင်းနှင့်ခုံသမာဓိအရေးပါအတွက်ကိုရီးယား၊ကူညီတစ်စုံတစ်ဦးရှောင်ရှားကြမ်းဖက်မှုစွဲချက်အတွက်ဂျပန်နိုင်ငံ၊နှင့်ရမ်းငါးထုတ်ကုန်အတွက်တရုတ်နိုင်ငံအပေါ်ကောက်ခံတဲ့ကြွေးမြီ။ ငါအမည်ရှိ၏တစ်ဦးအဖြစ်သာသုံးဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ကိုအံ့သြဖွယ်ရှေ့နေများသာနိုင်ငံတကာဥပဒေ၊ နှုန်းအားဖြင့် - ဥပေဒနာ့့(၎င်း၏အမြင့်ဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်)၊ကျွန်တော်နှုန်း ၁၀။ ၀ ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့်၊တစ်စူပါရှေ့နေ။ ငါမကြာခဏစာရေးဆရာနှင့်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌလုပ်နေတာအပေါ်စီးပွားရေးအတွက်အာရှနှင့်ကျွန်တော်အဆက်မပြတ်ခရီးသွားများအကြားအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်အာရှ။ ငါအသုံးအများဆုံးဟောပြောအပေါ်တရုတ်နိုင်ငံဥပဒေကိစ္စရပ်များနှင့်ငါအခဲစာရေးဆရာများ၏ဆုချီးမြှင့်အနိုင်ရတရုတ်နိုင်ငံဥပဒေဘလော့ဂ်။ မဂ္ဂဇင်း၊ကံဇာတာမဂ္ဂဇင်း၊အမေရိကန်စွန့်၊ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေ့စဉ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊စီးပွားရေးရက်သတ္တပတ်၊အမျိုးသားဥပဒေဂျာနယ်၊ဝါရှင်တန်ပို့စ်၊ ဂျာနယ်၊အဆိုပါပညာရှင်များ၊ထိန်းသိမ်း၊၊နယူးယောက်တိုင်းနှင့်ထဲမှာအကြံပေးတွေအားလုံးငါ့ကိုအတွေ့ဆုံမေးမြန်း၏အမျိုးမျိုးသောရှုထောင့်နှင့်ပတ်သက်။ငါ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေတွင်အလေ့အကျင့်။ ေအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေအသင်းမှာလုပ်ငန်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်တက်ပြင်ဆင်ခြင်း မှတ်ပုံတင်ကုမ္ပဏီရေခြားမြေခြား(ကနေတဆင့် ၊ကိုယ်စားလှယ်ရုံးသို့မဟုတ်ဖက်စပ်လုပ်ငန်းများ)၊စစ္တိုင္းနိုင်ငံတကာစာချုပ်(၊ထုတ္လုပ္သူသဘောတူညီချက်များ၊လိုင်စင်၊ဖြန့်ဖြူး၊စသည်တို့ကို။)၊ ကာကွယ် (မှတ်တံဆိပ်၊ကုန်သွယ်ရေးလျှို့ဝှက်ချက်များ၊မူပိုင်ခွင့်နှင့်မှတ်ပုံတင်)၊နှင့်ကြီးကြပ်လာျဖစ္ပါသည္။ ကျနော်တို့ဆွေးနွေးခြင်း၊လက်တွေ့ကဏ္ဍ၏တရုတ်ဥပဒေနှင့်မည်သို့ကြောင့်သက်ရောက်မှုရှိပါသည်။ ကျနော်တို့သင်ပြောပြဘယ်သို့သောအလုပ်ဖြစ်တယ်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ပါဘူး၊နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သင်အဖြစ် လုပ်နိုင်ဖို့အသုံးပြုအဆိုပါဥပဒေ၏အားသာချက်။ ကျွန်ုပ်တို့ရည်ရွယ်ထားသည်အထောက်အကူပြုဖို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ပြီးသားတရုတ်နိုင်ငံသိုသွားဖို့စီစဉ်တရုတ်သို့မဟုတ်၊အသစ်သောမြေပြင်ကိုချိုးဖျက်ဖို့အတွက်ဥပဒေရေးရာသီအိုရီသို့မဟုတ်မူဝါဒ။ ကျွန်ုပ်တို့၏နက်ရှိုင်းသောအသိပညာ၏တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေစနစ်အရ၊ယဉ်ကျေးမှုနှင့်စီးပွားရေးရာသီဥတုအောင်ငါတို့တရုတ်နိုင်ငံအလေ့အကျင့်တစ်ခု၏အရှုပ်ထွေးဆုံးအမေရိကန်အတွက်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများရရှိခဲ့ပြီးနိုင်ငံတကာချီးပေးဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်းဥပဒေကြောင်းအရအဖြေ-ကျွန်တော်တို့နဲ့နိုင်ငံခြားအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီစီးပွားရေးလုပ်နေအတွက်သို့မဟုတ်နှင့်အတူ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျယ်ပြန့်အတွေ့အကြုံများကိုကိုင်တွယ်တရုတ်-တိကျတဲ့ထာင္ေဖွဲ့စည်းခြင်း၊စာချုပ်၊ဥာဏ်ပညာ အမ်ိဳးအရေးပါပြီး၊အခြားပေးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လုံခြုံရေးကိုသိကြပြီအမှန်တကယ်ဝါဥပဒေရေးရာအဖွဲ့၏။
ခရက်ဒစ်ကဒ်လိမ်လည်မှုဥပဒေအခြေခံအားဖြင့်ရာဇဝတ်ပြစ်ဒဏ်များအဘို့အဖြားသို့မဟုတ်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအသုံးပြုမှု၏အခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့အကြွေးကဒ်အကောင့်အနေနဲ့ကြိုးပမ်းမှုအတွက်ခိုးယူငွေကြေးကို၊ကုန်စည်သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှု။ မလ္ဘုန္းဤအမျိုးအစားရာဇဝတ်မှုများခဲ့ကြပြဋ္ဌာန်းမှာအားလုံးအဆင့်ဆင့်၏အစိုးရ။ သူတို့ပြဌာန်းခြင်း၏အေဂျင်စီမှ ဒေသခံရဲဌာနမှအ ။။ လျှို့ဝှက်ချက်ဝန်ဆောင်မှု။ ဥပဒေရုံး၏ဗင်္ယာမိန်ဓါန္အခ်ိဳသည်ကုန်သွယ်၏နာမတော် ။ဓါန္အခ်ိဳရဲ့အလေ့အကျင့်အဆိုပါဥပဒေ၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီဟုခေါ်သည်ရှန်ဟိုင်းဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသော။ ၌တည်ရှိသောရှန်ဟိုင်း၊တရုတ်၊ကုမ္ပဏီအကွာအဝေးကိုထောက်ပံ့ပေးဥပဒေရေးရာဝန်ဆောင်မှုကိုပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာရှိဖောက်သည်များအဆိုပါဒေသများတွင်စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းပွား။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ်အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးအရေးပေါ်အခကြေးငွေရှန်ဟိုင်း ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီတစ်ခုအပြည့်အဝ-ပုဂ္ဂလိကမိတ်ဖက်အဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ဖို့အလေ့အကျင့်အတွက်ရှန်ဟိုင်း၊တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ။ ကုမ္ပဏီရဲ့အလေ့အကျင့်ဒေသများပါဝင်သည်ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ပူးတွဲလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်ရင်နှီးမြှုပ်နှံမှုများ၊လုပ်ငန်းပြန်လည်ဖွဲ့စည်း၊ဆောက်လုပ်ရေး။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ်အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးအရေးပေါ်အခကြေးငွေ လိမ္မော် သည်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့၏ဟာင္ေကာင္ဇဝတ်သားကာကွယ်ရေးရှေ့နေနှင့်အတူထိပ်တန်းအဆင့်ဂုဏ်သတင်းနှင့်ထားအားဖြင့်မိတ်ဖက်ဖာ ၊ လိမ္မော်နှင့်အဲရစ် ၊အားလုံးကိုသုံးခဲ့ကြဟောင်းမိတ်ဖက်အတွက်ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေအဖွဲ့၏ ရဲ့။ မိတ်ဖက် နှင့်အဖွဲ့တစ်ခုရှိသည်။ ဥပဒေရုံးများအဖြစ်နိုင်ငံခြားရေးဥပဒေရေးရာဝန်ဆောင်မှုပေးကိုု၊တရုတ်၊ပြည့်စုံသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု။ ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်လိုင်းအကျိုးစီးပွားကြသည်မှာအလွန်နှလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေး၊နှင့်ကျနော်တို့ကြိုးပမ်းအောင်မြင်ရန်အတွက်ထူးချွန်အရာအတွက်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိကိုယ်ကိုမိမိဂုဏ်ယူ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခဲ့ကနေတဆင့်အကြား ဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောနှင့်အမြင့်ဇုန်ဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသော။ ခုႏွစ္တြင္တည္ေထာင္သည္။ ၁၉၉၄၊ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီတစ်ခုကောင်းစွာ-အတွေ့အကြုံဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီအတွက်တရုတ်နှင့်အတူဟာအတော်လေးရှည်လျားသမိုင်း။ မြင့်ဇုန်ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၊အတည္ေထာင္ခဲ့ေသာမေ ၁၉၉၈၊အလွန်အမင်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်။ ဘေဂျင်း ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်ထိပ်တန်းအဆင့်ပေး၏ဥပဒေရေးရာအကြံဥာဏ်နှင့်ကိုယ်စားပြုမှု၊အဘယ်မှာရှိငါတို့သည်ငါတို့၏လူတို့ယုံကြည်သူတယောက်အတွက်ချဉ်းကပ်မှု-သင်ကူညီသင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေအောင်မြင်။ ဖို့အဓိကသော့ချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကတိကဝတ်အရည်အသွေး-အရည်အသွေးဆောင်မှုများ၊ငါတို့သည်ငါတို့၏လူတို့နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးသူတို့အဘို့။ ကျွန်တော်။.
တစ်ဦးအုပ်ချုပ်အဖြစ်၊ဓါးပြတိုက်သည်အဆိုပါမိဘ၏အခွင့်အများ၏မိခင်ကိုကလေးဖြစ်သူ၏ဖခင်။ ဒါပေမဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းဖို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်အများအသွားနှင့်တခြားအာဏာပိုင်အဖြစ်စိုက်နီးချင်းလျှင်၊သူတို့၏မိခင်အဲ့အလေးမပြုမီသူတို့၏မျက်စိသည်အကြောင်းတရားသူ့ကိုကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်။ အပေါ်အခြေခံပြီးလျှောက်လွှာတင်သွင်းခြင်းအားဖြင့်ဆွေမျိုးအသွားဏာပိုင်များလျှောက်ထားရန်အစိုးရရှေ့နေကြီးရဲ့ရုံးခန်းသို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်အရှုံးအမိ၏မိဘခြင့္အေ။ ဖခင်သို့မဟုတ်ဆွေမျိုးသားချင်းအဆင်သင့်ဖြစ်သင့်သည်များကိုမငြင်းနိုင်သောအချက်အလက်များ၏အရက်၊ဆေးစွဲမှု၊ လိင်ဘဝ။ ထိုကဲ့သို့သောလက်မှတ်ရရှိသောနိုင်ပါတယ်မှဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအဘယ်မှာရှိအမျိုးသမီးတစ်ဦးမှတ်ပုံတင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်၊ထိုသက်သေခံများ၏အိမ်နီးချင်းလိုအပ်သည်။ အဆိုအပိုဒ် ၆၉၏ မိသားစု၏အရုရွား၊ဆိုမိသောသူသို့ကျရောက်ဒီစာရင်းခေါ်နိုင်ပါတယ်၊အဖြေ:ယူကရိန်းတွင်၊တူညီသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြစ်ပါတယ်၊အသံုးပေါ်အခြေခံပြီးသောဆောင်းပါး ၁၆၄၊အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာမိသားစု။ ဆိုတဲ့အချက်ကိုအမိအမည်ဖြစ်၏မိဘခွင့်အရေးမပါဘူးသည်ဟုဆိုလိုသည်မှာဆက်စပ်ဖို့ကလေးသူငယ်အခ၊သူနာျစိမ်း။ သူမကသူမ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ၊အကြောင်း၊သူမပေးဆောင်ရပါမည်အကြောင်းအရာ၊အဖြစ်သင်တန်းနှင့်ကုသမှု။ တဲ့အခါမိဘတွေရဲ့ကွာရှင်းဖခင်လိုကလေးသူငယ်အနေသူနှင့်အတူကြောင့်အရက်၊မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲသို့မဟုတ်အခြားသွေဖည်သူ၏ဇနီး၊ဒါပေမယ့်နှင့်အတူတစ်ချိန်တည်းမှာစာရွက်စာတမ်းများလိုအပ်သည်မှားသောအယူရှိ၏၊သူပြိုင်နက်လွ်ာက္လႊာအတွက်ဆင်းရဲ၏မိခင်သူမ၏အခွင့်အရေး၊ယုံကြည်ဖို့ဘယ်လောက်၏မေးခွန်းကိုအရှုံးမိဘ၏အခွင့်အတစ်ခုတည်းမိခင်၊အလုံလောက်တဲ့ရှုပ်ထွေးသော။ တကယ်တော့၊ဤဒါမဖြစ်၊ထိုကဲ့သို့သောထုတ်ပြန်ချက်များစဉ်းစားနေသောအပေါ်အထွေထွေအခြေခံ။ နောက်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါသည်သိမ်းယူ၊အငယ်ကိုစေလွှတ်ရန် မိဘမဲ့ဂေဟာများ၊သို့မဟုတ်အသွားများ၏ဆွေမျိုးနီးစပ်သည်။ လျှင်အကြင်အမိအတွေး၏ပိုကောင်းကြောင့်အဆိုးျသူမ၏ကလေးသူငယ်၊ထို့နောက်ရှင်းလင်းရန်အခြေအနေကိုသူမ၏သူမလိုအပ်မှလှည့်ည့္လ်က္။ သူတို့ပြုလျှင်မပေးတိုက်ရိုက်အဖြေပါ၊ပြီးတော့သူတို့ဟာသွားဖို့တရားရုံးကတောင်းရာအရပ်သို့။
ဎ။ ကာလအချိန်အတွက်ဖို့ရှိပါတယ်ဖိုင်နှင့်အတူစာရေးပါသို့မဟုတ်သင့်လျော်အေရာကိုသူယုံကြည်သည်တရားဝင်တရားစွဲဆိုမဟုတ္။ ကာလအကြီးအကျယ်ကွာအပေါ်မူတည်ပြီးအမျိုးအစားမှုပါဝင်ပတ်သက်နေသည်ရှိမရှိ၊အကိုက်သည်ဆန့်ကျင်သောအစိုးရဖြစ်စေ၊ထိုသို့အားဖြင့်အသေးအဖွဲ၊နှင့်အရေးအကြီးဆုံးကတော့၊အဘယ်ပြည်နယ်သို့မဟုတ်ဖက်ဒရယ်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အခွင့်ဆူးသည်ထင်ရှားဖြစ်၏။ ဤသည်အများအညတ်များ၏ကန့်သတ်ချက်များ၊တိကျသောကာလအမျိုးမျိုးသောအဘို့အတောင်းဆိုမှုများအတွက်ပြည်နယ်တစ်ခုချင်းစီ။ (:ညတ်၏ကန့်သတ်)အကြောင်းအရာအားလုံးသည်ဤဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်အပါအဝင်အဘိဓါန္ဒေသာ၊စာေပ၊ပထဝီဝင်၊နှင့်အခြားကိုးကားချက်အလက်အချက်အလက်ဆိုင်ရာဆက်သွယ်ပေးပါ။ ဒီအချက်စဉ်းစားမဖြစ်သင့်၊ဖြည့်စွက်တက်မှရက်စွဲနှင့်အဖြစ်ဖို့မရည်ရွယ်ဖြစ်ပါတယ်သုံးအရပ်ဌာန၌ခရီး၊အႀကံဉာဏ္ရ၊ဒါမှမဟုတ်အကြံဥာဏ်၏တစ်ဦးဥပဒေကြောင်းအရ၊ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊သို့မဟုတ်အခြားပရော်ဖက်ရှင်နယ်။
တဦးတည်းအများဆုံးလေးစားဖွယ်၊တိုးတက်ပြီးအားကောင်းဥပဒေကိုကုမ္ပဏီမှာ ၊၊မင္းတောင်ပံဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီတစ်ခုကြာဘက်စုံချဉ်းကပ်မှု၏အလေ့အကျင့်။ ကျနော်တို့လုံးဝဘက်ပေါင်းစုံနှင့်အာရုံစိုက်အပေါ်ပေးဖောက်သည်များနှင့်အတူချောမွေ့စွာဝင်ရောက်ဖို့အတွက်-အနက်အသိပညာ၏ကွဲပြားသောအကွာအဝေးအလေ့အကျင့်ဒေသများ။ တာ့ဗ်ားမင္းတောင်ပံဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီအားဖြင့်အမျိုးသားန္ႀကီးဌာန၏တရားမျှတမှုနှင့်တရားဌာန၏တာ့ဗ်ားရင္း ၊တရုတ်နိုင်ငံတက္ကသိုလ်နိုင်ငံရေးသိပ္ပံနှင့်ဥပေဒ၏ဥပေဒ၊ပီကင်းတက္ကသိုလ် ၊အမျိုးသားမြတ်သောဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောဂွမ် ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီအကြီးတန်းဖော်များ၊ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး၊တရုတ်လူ့အဖွဲ့အစည်းဥပဒေ၊တရုတ်အကယ်ဒမီ၏စီမံခန့်ခွဲမှုသိပ္ပံ၏ သုတေသနအဖွဲ့ဝင်ကိုနိုင်ငံတော်ရှေ့နေများအသင်း၊ ဂွမ်ရှေ့နေများအသင်းပြစ်မှုဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးဌာနပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကာ္မတီ၊အဂွမ်အင္ဆႏ ဥပဒေရုံးရဲ့အဓိကအလေ့အကျင့်ဒေသများပါဝင်သည်ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေနှင့်မိသားစုဥပဒေ၊အပေါ်တစ်ဦးအလေးပေးနှင့်အတူ ၊ နှင့်ပြစ်မှုများ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရှေ့နေအလုပ်လုပ်ခဲ့သိရသည်အတွက်ဥပဒေကြောင်းအရအလုပ်အကိုင်အများအပြားတွင်စွမ်းရည်အတိုင်း၊တစ်ဦးအလုပ်သင်ဆရာဝန်များအတွက်အစိုးရရှေ့နေရုံး၏ဥပဒေတစ်ခုစာရေးအတွက်နှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးရုံးတင်စစ်ဆေးနှင့်အယူခံတရားရုံးများအတွက်လေးနှစ်အတွင်းလက်ထောက်အဖြစ်အများပြည်သူနောက်ခံလူသာ ။ အတွင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရှေ့နေရဲ့အချိန်နှင့်အတူတိုုင္း ။ ။ ။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီအတ္ႏအခြေခံဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီအားခ် နှင့်သုံးအခြားနာမည်ကျော်ရှေ့နေအပေါ်မတ်လ ၁၆၊၂၀၀၀၊စုဝေးတစ်ဦးအုပ်စုနာမည်ကြီးရှေ့နေနှင့်အတူပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရည်အချင်းနှင့်မြင့်မားသောလူမှုဂုဏ်သတင်း။ ထက်ပိုပြီးနှင့်အတူဆယ်နှစ်'မှန်မှန်နှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိပါတယ်၊တကျိပ်တပါးသောမိတ်ဖက်နှင့်အထက်ပိုပြီးခြောက်ဆယ်ရှေ့နေများအပါအဝင်ရှစ်ဆရာဝန်များ၏ဥပဒေ၊နှစ်ဆယ်-ခြောက်ရှင်များ၏ဥပေဒနှင့်အများအပြား နန်ကျင်း ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီတစ်ခုရာဇဝတ်သားကာကွယ်ရေးဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောအခြေခံတွင်နန်ကျင်း၊၊တရုတ်နိုင်ငံ။ ကို မှာပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားစီရင်ရေးစနစ်၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့နန်ကျင်းရှေ့နေရောက်တွင်၎င်းအတွက်-အနက်အသိပညာများဒေသခံနှင့်အနီးအနားမြို့ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေများကို။ အောင်မြင်သောကာကွယ်ရေးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ် အထည်ဖော်နိုင်ရဟာဗျူဟာများ၊ပန်းချီနာက္တြင္အပြုသဘောဆောင်တဲ့အလငျး၌၊နှင့်တင္ဆက္ျတင်ပြသည့်ဆင်ခြေအနိုင်ရကျော်တရားအသေက်ာင္း ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၊ထာင္ခဲ့ေသာ ၁၉၇၉၊သည်ဘက်စုံမိတ်ဖက်အဥပဒေကိုကုမ္ပဏီ။ ဒါဟာအစောဆုံး၊အဘယ်သူ၏ယခင်အ ဥပဒေရေးရာအကြံပေးရုံးနှင့် အဘယ်သူမျှမ။ တစ်ခုဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၊
တကယ်တော့မခက်ခဲသည်၊အထူးသဖြင့်အစာများမှတဆင့်သွားလိုလျှင်အ ပလက်ဖောင်း။ သို့သော်၊တရုတ်လိုအပ်ဆုံးနိုင်ငံသားတစ်ဦးရရှိရန်။ င္ငံအဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲ၊နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအေဂျင်စီပြောမည်အမျိုးမျိုးတို့၏အမှန်တရား၊ဒီတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သင်ပေးသည့်ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်အဇာစေခြင်းငှါကမ်းလှမ်း၊သို့မဟုတ်နိုင် တွေ့ဆုံစဉ်အတွင်း၊သင်သည်သင်၏နှင့်အတူတဆယ်နှစ်ကျော်ကြာများအတွက်လုပ်ကိုင်သောစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ဦးကျွမ်းကျင်သူများအဖြစ်၊ငါအတွေ့အကြုံများအပြားဗီဇာမူဝါဒအပြောင်းအလဲနှင့်ကျွန်တော်ပြောနိုင်ကြောင်းတရုတ်အစိုးရသည်တင်းကျပ်နှင့်၎င်း၏အဗီဇာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်အပြစ်မဆိုချိုးဖောက်။ အတက်နှင့်အတူအတွက်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်၊ဆောင်ရွက်ချက်များဖြစ်လာကြပါပြီပြတင်းပေါက်မှအတွေ့အကြုံအရရှေးဟောင်းနိုင်ငံမှအထူးရှုထောင့်။ အပြားဘွဲ့ရလူငယ်နှင့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအဖို့စိတ်အားထက်သန်ရှာဖွေတရုတ်နိုင်ငံနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ရန်အတွက်အဘယ်သို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိပါတယ်။ နှင့်အတူကျန်ရှိနေသောမြင့်တက်သာ၊အရွယ်ရောက်ပြီးသူအများကောက်အကျိုးစီးပွားကိုအလုပ်နှင့်အဆောက်အဦသူတို့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။ ထို့ကြောင့်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်ကျွန်တော်နားလည်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအုပ်ချုပ်သို့ဝင်ရောက်နေထိုင်မှုနဲ့တရားဝင်နေထိုင်တရုတ်နိုင်ငံအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင် ၊တရုတ်အတွက်သင်စိုးရိမ်ပူပန်ဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်လုံခြုံရေးအချိန်မှာဗီဇာများအတွက်သင့်ရဲ့အလုပ်နှင့်အစဉ်အမြဲအပြင်းအထန်တောင်းဆိုရတဲ့အပေါ်ညာဘက်အမျိုးအစား။ ဒါဟာအဘယ်သူမျှမလျှို့ဝှက်ချက်ကိုဖွင့်သောအများပြည်သူဘေးကင်းလုံခြုံရေး ဏာပိုင်တော်ရောက်အလုပ်ခွင်မှအမူတစ်ခုလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်စစ်ဆေးရေးအထူးသဖြင့် ပြီး ၂၀၁၆။ နွေရာသီ ၂၀၁၇၊ရှန်ဟိုင်းခဲ့အကြီးအကျယ်စစ်ဆေးနှင့်အချို့သောကုမ္ပဏီတွေဟာခ်။ ဤဆောင်းပါးတွင်ကူညီလိမ့်မည်သင်သည်အဘယ်သို့နားလည်ရန်လိုအပ်သည်နှင့်အဇာလီကေးရှင်းသည့်လုပ်ငန်းစဉ်။ အလုပ်အတွက်တရုတ်နိုင်ငံဇာ၊ငါပြောလိမ့်မယ်လွယ်မှရယူမယ်ဆိုရင်ရပိုင်ခွင့်အဖွဲ့အစည်းမှသင်ကူညီအားလုံးပြန်သောနေ့၌(အကြို-၂၀၁၃)၊တစ်ဧည့်-ဇာခွင့်ပြုမယ်လို့များအတွက်အခြောက်လအလုပ်၊ဒါမှမဟုတ်မ-ပေးဆောင်။ သို့သော်၊ယနေ့အသုံးအနှုန်းခွင့်ပြုမှကျောင်းသားများကိုသင်ဆရာဝန်ဖယ်ရှားပစ်ခဲ့သည်၊ထိုသို့ဖြစ်လာသည်နှင့်မီးခိုးရောင်ဧရိယာ။ တင်းကြပ်စွာကားေျပာ၊အ-ဇာကြသည်အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်-"ကြိမ်လာသွား၊ဖလှယ်မှု၊စစ်ဆေးမှု၊စသည်တို့ကို။"၊ပူဇော်ရန်ပညာရှင်များကိုဖိတ်ခေါ်သည်-ပွဲကြီး၊ယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ရေး၊စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး၊သိပ္ပံနည်းပညာပညာရေးခရီးစဉ်၊သို့မဟုတ်အားကစားနှင့်အခြားကျန်းမာရေးလှုပ်ရှားမှုများ။ အ-ဇာဖြစ်နိုင်မသုံးဘို့လုပ်၊အရာဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဘယ်ကြောင့်အများအပြားလျှောက်ထားများအတွက်လျှောက်ထားအလုပ်ခဲ့ကြသူတို့-င့္ဗီဇာေလွ်ာက္ထားငြင်းပယ်။ သို့သော်၊အဘယ်သူမျှမတာဝန်ရှိသူတဦးက"အလုပ္သင္ဗီဇာ"နှင့်ဘယ်နေရာပါဘူးဒါဟာတင်းကြပ်စွာသောပြည်နယ်တစ်ခု-ဗီဇာအတွက်သုံးနိုင်တယ်တစ်ခုလုပ်ပေမယ့်တရုတ်နိုင်ငံဗီဇာအမျိုးအစား(-ဇာ)ဆဲဖို့ကမ်းလှမ်းအလုပ္သင္တရုတ်နိုင်ငံအတွက်အချို့အလုပ်ပေး။ -ဗီဇာအကောင်းဆုံးလျှောက်ထားသည့်အခါလိုနာ့မပါဘဲလျော်ကြေး။ အလွန်သေးငယ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသောသူဥပဒေနှင့်လိုက်နာမှုဌာနခွင့်ပြုစေခြင်းငှါဤရေအာင္၊အလုပ်သင်ဆရာဝန်"သတိထား"အများဆုံးအသုံးများပူဇော်အလုပ်ဗီဇာကိုစီးပွားမီ-ဇာရာမအခွင့်အတွက်ပေးဆောင်ခံရဖို့သူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုလည်းမည်သည့်လျော်ကြေး၏ပုံစံ။ တရားဝင်၊အစား-ဗီဇာအတွက်သာ"ရေးနှင့်ကူးသန်းသို့မဟုတ်ကုန်သွယ်ရေး"၊အရာသည်အဘယ်ကြောင့်အလွန်တိုတောင်းဖြစ်ပါသည်-အခေါ်အဝေါ်နှင့်လိုအပ်ထွက်ပေါက်ထည့္သြင္းလံုး ၃၀၊၆၀၊၉၀ ရက်သို့မဟုတ်။ ဘဲတိုင်းပြည်ကိုစွန့်ခွာဖို့ပြန်လည်ဝင်တရုတ်နိုင်သိသိသာသာတိုးကုန်ကျစရိတ်၏အလုပ်ပေါ်မူတည်ပြီး၊ဘယ်မှာသင်ဆရာဝန်။ ဥပမာအားဖြင့်၊သင်ငံ့တွက်ဘေဂျင်းအတွက်နှင့်သက်တမ်းတိုးဖို့မှသင်၏ဗီဇာဟောင်ကောင်အတွက်၊သင်ဖြုန်းကြားယွမ် ၃၊၀၀၀-၅၊၀၀၀ အရပ်ဇာ(မှတ်ချက်: မရယူရှိသည်မှာအနည်းဆုံးအလုပ်ပယ်သောနေ့ရက်ကာလ)၊ဒါပေမယ့်အကယ်၍သင်၌နေထိုင်ခဲ့ရှန်ကျန်း၊သငျသညျနေဆဲအနည်းဆုံးလိုအပ်တဲ့အလုပ်ပယ်သောနေ့ရက်ကာလကို၊ဒါပေမယ့်ဖြစ်နိုင်အတူလွရဖို့ထက်လျော့နည်းယွမ် ၁၊၀၀၀။ ပေမယ့်အမီ-ဗီဇာအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ကုန်သွယ်မှုနှင့်ဘယ်နေရာပါဘူးဒါဟာတင်းကြပ်စွာသောပြည်နယ်တစ်ခု-ဗီဇာအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်အလုပ်၊ဒါပေမယ့်တရုတ်ဇာအမျိုးအစား(မီတာ-ဇာ)နေဆဲအသုံးအများဆုံးကမ်းလှမ်းဇာအလုပ္သင္တရုတ်နိုင်ငံအတွက်။ အကြောင်းရင်းအချို့ကိုလုပ်ပေးလျစ်လျူရှုဖို့ပညတ်တရားပေးနေဆဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဗီဇာအတွက်ကြောင့်စရိတ်သူတို့ဘာမှမ။ ဒါပေမယ့်အဖြစ်အလုပ်သင်ဆရာဝန်၊သင့်စိုးရိမ်ပူပန်ဖြစ်၏တရားဝင်ရပ်တည်မှုအသင့်အနေလျဉ်းအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုအတွက်။ သင်အနာဂတ်အတွက်ရည်မှန်းချက်တရုတ်၊ထို့ကြောင့်လိုအပ်ဖစ္သည္။ သင်ပေးဆောင်ခြင်းအစီအစဉ်အဖိုးဒါကြောင့်သေချာအောင်ကအညာဇာသောဤကိစ္စတွင်အတွက်အႏွင့္အမျိုးအစားအရာဖြစ်ပါသည်ဖော်ပြထားတဲ့အတွက်လာမယ့်နှစ်ပိုဒ်များအပြားကုမ္ပဏီတစ်ခုပူဇော်။၊အလုပ္အကိုင္၊ဒါပေမယ့်လိုအပ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဝင်တရုတ်နှင့်အတူင့္သာအတူပထမဦးဆုံးအတိအတိုင်း ပြောင်းလဲနေတဲ့အလုပ်ဗီဇာသို့မဟုတ်အခြားသင့်လျော်သောဇာ၊နောက်ပိုင်းတွင်။ ဤသည်အထူးသဖြင့်မှန်နှင့်အတူအချိန်ပြည့်အလုပ်အကိုင်ပေးထားပါတယ်။ သို့သော်၊ကြောင်းမှတ်မိသည်တင်းကြပ်စွာတရားမဝင်အလုပ်လုပ်ရန်တစ်ဦးအပေါ်ခရီး-ဗီဇာ(မီးခိုးရောင်ဧရိယာမှာအားလုံး)၊ကြမယ်ဆိုရင်အအေဂျင်စီများသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီရဲ့စာလုံးဝအာမခံရှိသည်လိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းကိုမည်သည့်ဝန်ထမ်းအခြင့္အေ။ အကျိုးဆက်များအပေါ်အလုပ်လုပ်နေင့္သာဖြစ်နိုင်သည့်အလုပ်ရှင်ပေးဆောင်ဖို့ငြင်းဆန်သောသူတစ်ဦးလစာ၊အပြောင်းအလဲအလုပ်လုပ်ကိုင်အခြေအနေသို့မဟုတ်အလုပ်ခပမာဏ၊သို့မဟုတ်အခြားသိက္ခာပြောင်းလဲမှုကြောင့်ကုမ္ပဏီအကြောင်းသိရှိဝန်ထမ်းအခွင့်အခါသင့်အနေဖြင့်တရားမဝင်။ အပြင်၊သူတို့သိကြလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းအစီရင်ခံမည်သူမဆိုဖို့သူတို့ကိုကြောင့်အလုပ်လုပ်နေဖြင့်တရားမဝင်သင်အန္တရာယ်ရှိတဲ့အပြုအမူအကြောင်းအတွက်ကြီးမားသောဒဏ်ငွေသို့မဟုတ်ပင်က်ာ္တိုင္း။ အကြားခြားနားချက်ကိုႏွင့္-ဗီဇာ(မကြာခဏပြိုဆင်း ၁ နှင့် ၂)-ဇာကႏွင့္-ဗီဇာအသားရှိသည်ဖို့လိုအပ်မှတ်ပုံတင်နေထိုင်။ သူကျောင်းသားများလေ့လာမှုအတွက်တရုတ်နှင့်အတူတက္ကသိုလ်တွင် ၁-ဇာခွင့်ပြု ဖျော်ဖြေဖို့အလုပ်နှင့်အခြားအလုပ်နေသမျှကာလပတ်လုံးသူတို့တင်ပြအလုပ်သင်အသုံးချဖို့သူတို့လက်ခံရရှိ။ သူတို့ယူသောခွင့်ပြုချက်စာဒေသခံကိုနှိပ်ပါရုံးမှာအများပြည်သူလုံခြုံရေးဗျူရိုနှင့်သူတို့၏နေအိမ်သို့ပါမစ်နှင့်အတူအသေးစိတ်အချက်အလက်အကြောင်းအသစ်အလုပ်ရှင်၊ကုမ္ပဏီ၏နာမည်၊တည်နေရာ၊နှင့်အလုပ်အကိုင်အရှည်။ အ ၁ ဇာခွင့်ပြုတက်နေဖို့ဖို့တစ်နှစ်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်များဖြင့်တက္ကသိုလ်နှင့်အတူ ၂၀၂။ အ ၂ ဇာသည်အများအားဖြင့်အားထုတ်သောကျောင်းသားများနေထိုင်မည်တရုတ်နိုင်ငံအတွက်အခြောက်လအထိ။ အများဆုံးအဖွဲ့အစည်းနှစ်သက် ၂ အတွက်သင်္ကေတ။ အႏွင့္ဇာဖြစ်နိုင်တိုးချဲ့နေစဉ်မှာတရုတ်ပြည်။ အချို့သောအခြေအနေလိုအပ်မည်သားမှခရီးသွားဖို့ဟောင်ကောင်မှတိုးချဲ့။ ကုမ္ပဏီထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အယက္၊ေအာ္ဒီ၊ ဟိုတယ်များ၊နှင့်အခြားအကံဇာငါးရာအဖွဲ့အစည်းနှင့်ဥပဒေရေးရာနှင့်လိုက်နာဌာနသာလက်ခံႏွင့္ဗီဇာ။ အဖြစ်အစပိုင်းမှာ ၂၀၁၆၊တစ်ခုတည်းသောအတည်ပြုဘို့ဗီဇာအလုပ်ဆိုတာမျိုးအစား။ အဆိုပါဥပဒေအပေါ်ရှင်းလင်းဖြစ်ပါတယ် လိုအပ်ရအလုပ္သင္ဥပဒေလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ မရှိဆိုခိုးရောင်ဒေသများတော့ဘူး။ ဒါဟာအချို့ပိုက်ဆံကုန်ကျမည်ရဖို့ချိတ်ဆက်ညာဘက်အဖွဲ့အစည်းများကိုသင်အမှန်ဇာမအန္တရာယ်သင့်ရဲ့အနာဂတ်၌တရုတ်နိုင်ငံနှင့်အတူအမှားအဇာအဇာအဆွေမျိုးသားချင်းများအတွက်နိုင်ငံခြားသားနေထိုင်ပြီးအလုပ်လုပ်တရုတ်နိုင်ငံအတွက်၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ရႏိုင္မွာအိမ်ထောင်ဖက်နှင့်မိဘများလာရောက်လည်ပတ်။ အဇာမ်ားကိုသာအကိုဆွေမျိုးသားချင်းများ၏ဘာသာပြန်ဆိုနှင့်ႏွင့္ဗီဇာကိုင်၊ဒါပေမယ့်ကုမ္ပဏီအတွက်ဘေဂျင်းရဲ့ သိပ္ပံပန်းခြံခွင့်အားလုံးကိုနိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေလေ့လာနေအတွက်ဘေဂျင်းအတွက်ဖြည့်စွက်ရန်အလုပ်နှင့်အတူ ၂ ဇာကတည်းက ၂(ကာလတို)ဗီဇာထိထိရောက်ရောက်အဖြစ်ဖော်ပြထားသည်"ပုဂ္ဂလိကရေးရာ"။ လိုအပ်မယ်ဆိုရင်သင်၏အသေးစိတ်စာရင်းဇာ၊တရုတ်နိုင်ငံကိစ္စများအပြင်အဘယ်အရာကိုမှဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်ထုတ်စစ်ဆေးဇာမူဝါဒများနှင့်ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာအကြောင်းစိတ်ကိုစောင့်ရှောက်သက်ဆိုင်သည့်ဗီဇာအမျိုးအစား၊အလုပ်သင်အဖြစ်ဥပဒေရေးရာအဖြစ်သူတို့အတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်အခြားနိုင်ငံများ။ ပါကကွဲပြားခြားနားသောမြို့ရှိစေခြင်းငှါလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီတချို့သောနည်းပညာ စင်တာပိုင္ငံျ-ဖော်ရွေသည့်မူဝါဒများ။ ၁။ သူတို့ပို့ပါလိမ့်မယ်သင့်ရဲ့ဇာစာရွက်စာတမ်းများအီးမေးလ်မှတဆင့်-အမှန်အလုပ္သင္ဗီဇာလိုအပ်မူရင်းစာရွက်စာတမ်းများကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါပြီသူတို့အားဖြင့်ကယ်နှုတ်တော်မူ၏မှတ်ပုံတင်ထားသောအၾကိဳက္ဆံုး(စစ္ေဆးသို့မဟုတ်)အစားထက်အအီးမေးလ်ဖို့သင်တို့အဘို့အထုတ်။ ဒီအရိပ်အယောင်အပြင်သူတို့ပူဇော်သက္ကာဘို့နေသောသင်အနေနဲ့တရားမဝင်ဇာ။ အလုပ္သင္ဗီဇာများအတွက်။ ဒီနှင့်အတူအစီအစဉျ၊သင်စားခံရစီစဉ်အဘို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဗီဇာနှင့်ဤတစ်ကြီးမားသောအနီရောင်အလံ ၃။ သူတို့ပေးပို့ဖိတ်စာတစ်စောင်ကိုအီးမေးလ်မှတဆင့်အပါအဝင်ဖတ်မိတ္တူသ၏တရုတ်ပြည်:-ဒါဟာတစ်ဦးအရိပ်ရတဲ့ဧဇာနှင့်သင်ငြင်းပယ်ကပြောင်ပြောင်တင်းတင်း။ သင့်ရဲ့အလုပ်ဗီဇာလိုကမကပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း။ ဤနည်းလမ်းအားလုံးစာရွက်စာတမ်းများမှလာကြလိမ့်မည်ကြောင့်၊သူတို့ကိုအစိုးရ၏တရုတ်နိုင်ငံဥပဒေပ်ဳိဤအင်သို့။ ဆိုက်ရောက်ပေါ်တွင်၊သင်သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်အများပြည်သူမှဖြည့်စွက်သင့်ရဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်တရားဝင်အရည်အချင်းပြည့်မှီဖို့အလုပ်သင်ဆရာဝန်တရုတ်နိုင်ငံအတွက်။ ၁။ မိတ္တူ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်မှပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ(ဒါကြောင့်အတူကြွလာတဲ့နီတံဆိပ်ခေါင်း)။ ဤစာရွက်စာတမ်းခွင့်ပြုသောအဖွဲ့အစည်းထုတ်ဗီဇာနှင့်အားလုံး၎င်းတို့၏မှတ်တမ်းများ ၃။ ဂၢဳိလ္စာရင္း(လိုအပ်သည်နိုင်ငံအားလုံးအတွက်။ တရုတ်သံရုံးတွင်တည်ရှိပြီးအနောက်နိုင်ငံများမလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဤ)ယခုၽြႏု္ပ္၏ဇာစာရွက်စာတမ်းများမှာတရုတ်လ်ွာက္ထားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါပေမယ့်သင်ပထမဦးဆုံးအပေါင်းတို့၏အလိုကိုနေရာချထားရန်တင်သွင်း။ ဤသည်ပုံမှန်လျှောက်လွှာဖြစ်စဉ်၊ဒါပေမယ့်တရုတ်အခြာရပ်ဖို့အခွင့်ရှိပါသည်ကွဲပြားခြားနား။ အားလုံးသင်လိုအပ်အရာကိုသိရန်အပိုအဆင့်ဆင့်ကိုသတင်းအချက်အလက်လိုအပ်သည်နှင့်အညီဆောင်ရွက်။ ဤအဆင့်များကိုမည်မဟုတ်စားထိုးအခြေအနေသင့်ရဲ့တိုင်းပြည်အတွက်။ အတူထိတွေ့ရမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဌာန၏တာဝန်ခံဗီဇာရမှုကိုကျွန်တော်ကူညီနိုင်လုံခြုံညာဘက်ဇာကြည့်ရှုခွင့်ပြီးနောက်သင့်ရဲ့ခြေနှင့်အတူလိုက်နာမှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏။ သင်ကနေတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဆကျသှယျနိုငျပါ သည္အလုပ္သင္ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ပြည်ပလေ့လာရေးအခွင့်အလမ်း။ ကျွန်တော်တို့အပိုဒ်ရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အပြားအဖြေမရသောမေးခွန်းများ။ ကျွန်တော်ရေးသားပြုစုခဲ့ကြကျွန်တော်တို့ရဲ့စံအလေ့အကျင့်နှင့်တုန့်ပြန်မှကျွန်ုပ်တို့ဥပဒေရေးရာအတိုင်ပင်ခံထားတူတူပဲ။ အဖြစ်ဥပဒေပြောင်း၊ကျွန်တော်တို့အောင်ပြင်ဆင်ပေမယ့်တာဝန်မဘို့အနှောင်းပိုင်းမွမ်းငါအားဖြင့်ချဉ်းကပ်လာကြပြီတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုအလုပ်သင်များအတွက်သင်တန်းကာလခြောက်လအတွင်းရဲ့။ သို့သော်၊သူတို့လိုချင်တဲ့အကြှနျုပျကိုမှစုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်များအတွက်လိုအပ်ငါ့တရုတ်ဇာ။ ငါဖြစ်၏တစ်ဦးကောလိပ်ကျောင်းသားများအိန္ဒိယနိုင်ငံသားနှင့်ခြောက်လအလုပ်သင်အစိတ်အပိုင်းအဖြစ်ငါ၏ကောလိပ်သင်ရိုး။ ကျွန်တော်သိချင်ဇာအမျိုးအစားသင့်သော်လည်းအဘို့ဤအမျိုးအစားအလုပ်လုပ်။ လျှင်နိုင်ငံအတွက်တရုတ်နိုင်ငံ၊ထို့နောက်သင်လိုအပ်ႏွင့္ဗီဇာ။ ဤအမျိုးအစားဗီဇာထုတ်ခြင်းအားဖြင့်ပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း။ သင်လိုအပ်လျှင်အကူအညီဖြင့်များအတွက်လျှောက်ထားအႏွင့္ဇာ၊ကျနော်တို့ကူညီနိုင်။ အီးမေးလ်ပို့ကျေးဇူးပြု။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ကဤအီးမေးလ်ကနေတဆင့်ကြင်ကြင်နာနာသည်သင့်ဆိုဒ်ြ၊ငါတို့သည်တုံ့ပြန်ခဲ့ကြ၏လာဒ္ႏ။ နောက်ကျောကျွန်တော်တို့ကိုရရန်လျှင်သင်နောက်ထပ်မေးခွန်းများနှင့်အကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကထောက်လှမ်းရေးဆော့ဗ်မကြာသေးမီကဖြစ်ပါသည်"လုပ်"အမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်နှိပ်ဤကိစ္စကိုအသေးစိတ်သို့၊ငါ၏အမိတ်ဆွေများနှင့်အဖမ်းခံ တွင်ရှန်ဟိုင်း၌သြဂုတ်လ ၂၀၁၈။ သူမပူးပေါင်းကာအလုပ်သင်အစီအစဉ်များထဲမှတစ်ခုနှင့်အတူအေဂျင်စီများအဘယ်သူ၏ရုံးဖြစ်သည်။ သူမရဲဘော်သုံးပြီးများအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဗီဇာအတွက်သူမ၏အလုပ်။ အခါနောက်တော်သို့လိုက်အမှု၊ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပြီး၎င်း၏သာႏွင့္ဗီဇာ(သား)အတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်၊ထိုကဲ့သို့သောရည်ရွယ်ချက်များနှင့်သူတို့သတိပြုမိကြသည်အချို့ကောက်ဂျင်စီကူညီပေးနေနေကြတယ်တိမရှိသောကျောင်းသားများအဖို့ထင္ပါ။
ကလေးအထောက်အပံ့ငွေပေးချေမှုသို့မဟုတ်ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေချ(ဆိုလိုသည်မှာ၊ငွေပေးချေမှုမပြည့်မှီအဖြစ်)အမြဲမ-နှုတ်အ နှင့်မရိတ္မ်ားျအလှတရား။ သို့သော်၊ ကွဲပြားခြားနားသည်၊နှစ်ဦးစလုံးအ တစ်ခုဖြစ်သောလိုအပ်ချက်များကိုလိုက်နာရန်အားဖြင့်အခွန်စည်းမျဉ်းသောလွတ်လပ်ရေးအားလုံး ။ ၁။ ဖက်ဒရယ်အခွန်ကုသရေး၏အ သည်ဖြင့်ညွှန်ကြားပည္တြင္းအခြန္မ်ားကုဒ္၊မကွာရှင်းသဘောတူညီချက်များသို့မဟုတ်တရားရုံးမိန့်။ ၂။ အထွေထွေဝေါဟာရများတွင်၊ ပုံမှန်ရိတ္မ်ားျဝင်ငွေအဘို့အအလှတရားနှင့်အခွန်ထုတ်ယူဆင်ခြင်ခြင်းအတွက်အ ။ ၃။ ပထမဦးဆုံး၊ရဲ့အခြေအနေကိုစဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်အ ၏အ ။ ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းအားဖြင့်ထို အတွက်ခေါင်းစဉ် ၄၅၂- ပေးဆောင်၊ အခွန်ထုတ်ယူဆင်ခြင်ခြင်းအတွက်အ လျှင်၊:၄။ သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်အလှတရား၏အ ၊သင်သတင်းပို့ရမည်ကိုအပြည့်အဝငွေပမာဏအဖြစ်ဝင်ငွေအပေါ်အခွန်ပြန်။ ပျက်ကွက်ဖို့အစီရင်ခံ အလွန်ဖွယ်ရှိသည်ရလဒ်တစ်ခု စစ္ဌာ။ သတိရ:ကတည်းကအ ပေးဆောင်အခွန်ထုတ်ယူဆင်ခြင်ခြင်းအတွက်အ ၊အ ကိုအလွယ်တကူလုပ်နိုင်မည်မျှဆုံးဖြတ်ရန် သင်လက်ခံရရှိ။ ၅။ အခါတင်သွင်းအခွန်များ၊အ ဝင်လူမှုရေးလုံခြုံရေးနံပါတ်၏အလှတရားအပေါ်ပုံစံ ၁၀၄၀၊လိုင်း ၃၁။ သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်အခွန်ထမ်းနှင့်သင်၏ခင်ပွန်းဟောင်း၏လူမှုလုံခြုံရေးနံပါတ်၊သင်သည်ဆပ်ဖို့ရှိစေခြင်းငှါတစ်ဒေါ်လာငါးဆယ်ပြစ်ဒဏ်သင့်ထုတ်ယူဆင်ခြင်စေခြင်းငှါမြစ်တား။ လျှင်သင်အ သူ၊သင်ပေးရမည် သင်၏လူမှုလုံခြုံရေးနံပါတ်။ သင်သည်မကျင့်လျှင်၊သင်တို့ကိုဆပ်ဖို့ရှိစေခြင်းငှါတစ်ဒေါ်လာငါးဆယ်ပြစ်ဒဏ်။ ၆။ အချိန်ကိုက်၏ငွေပေးချေမှုအရေးပါသည်။ သည်နိုင်ရန်အတွက်ငွေပေးချေမှုကိုစဉ်းစားခံရဖို့အဘို့အ ဝင်ငွေအခွန်ရည်ရွယ်ချက်၊သူတို့ကအစေရပါမည်ႏွရေးသားခြာသဘောတူသို့မဟုတ်ကွာရှင်း၏အမိန့်တော်ဖြင့်ထုတ်လေသည်။ မည်သည့်ငွေပေးချေမှုကိုဖန်ဆင်းမီဒီလိုမျိုးကွာရှင်း၏အမိန့်တော်သို့မဟုတ်ရေးသားခြာသေရအဘို့အ ဝင်ငွေအခွန်ရည်ရွယ်ချက်။ ၇။ အခြားနည်းလမ်းရှိပါတယ်ဖို့ ရိုးရာ ငွေပေးချေမှု၊နှင့်အသီးအသီးအခြားရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်တိကျတဲ့အခွန်သက်ရောက်မှု။ ဥပမာအားဖြင့်၊ငါ့သီးသန့်ကုမ္ပဏီကိုယ်စားပြုအမျိုးသမီး၊ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်အကြောင်းတို့တွင်အဖုစုစုပေါင်းငွေပေးချေမှု၏အစား ဟာ၊ကျယ်ပြန့်အများစုအတွက်ကိစ္စကိုဦးစားပေးရွေးချယ်လျှင်ဇနီးသည်ဖြစ်သူ၏အ ။ သို့သော်၊တစျခုလုံးကိုငွေပေးချေမှုကိုဖန်ဆင်းအားလုံးတစ်ကြိမ်မှာ၊သင်တစ်ဦးတို့တွင်စိမ်းပေါင်းလဒ်ငွေပေးချေမှုလိုအပ်သတိထား၊ရည်ရွယ်ချက်ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှု။ အစကတည်းက၊အစိမ်းပေါင်းလဒ်၊တို့တွင်ငွေပေးချေမှုများသောအားဖြင့်အဖြစ်ဖွဲ့စည်းပုံမှာ၏အစိတ်အပိုင်းအချင်းချင်းကွဲပြားခြင်း၊မရိတ္မ်ားျမှသူသို့မဟုတ်အခွန်နှုတ်ယူပြီးသားအ ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင့်ရဲ့မကြာမီ-ခံရဟောင်းခင်ပွန်းကရှုံးလိမ့်မည်သူတို့အခွန်ရှောင်ဖြတ်တောက်ခြင်း၊သူကကွက်ချင်လျှော့စျေးပမာဏကိုအဖုစုစုပေါင်းငွေပေးချေမှုကိုဖန်ဆင်းခံရဖို့(သင့်ရဲ့ကွာရှင်းဘဏ္ဍာရေးကျွမ်းကျင်သူကူညီနိုင်ပါလိမ့်မည်သင်တို့အားတွက်ချက်မှု)။ အချို့ကိစ္စများတွင်၊သေးအခြားအခြားရွေးချယ်စရာ၊အ နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုယုံကြည်(အဖြစ်လူသိများတစ်အပိုင်း ၆၈၂ ယုံကြည်မှု)သည်ဦးစားပေးဖို့ ရိုးရာ၊သတ္တု ။ တစ်ဖန်၊အဆိုပါအခွန်သက်ရောက်မှု၏အ နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုယုံကြည်မှုအပေါ်မှာမူတည်ပြီးကွဲပြားခြားနားမည်သို့ယုံကြည်ဖွဲ့စည်းပုံမှာဖြစ်ပါတယ်။ တူဤမျှလောက်များစွာသောအခြားဘဏ္ဍာရေးရုပ္ရွင္ႏကွာရှင်းခြင်း၊အခွန်သက်ရောက်မှု၏အ (အခြားရွေးချယ်စရာ)အစားရှုပ်ထွေး။
ငါ ၿဖြင့်ဖုံးလွှမ်း ခုႏွစ္မွ ၁၉၈၀ တစ်ချိုးမပါဘဲ။ မကြာသေးမီကပြီးနောက်၊ကျွန်မခင်ပွန်းအလုပ်အမျိုးမျိုး၊အယူအပေါ်များအတွက်ပေးဆောင် ကျန်းမာရေးအာမခံဖြင့်ငါ့ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ်-အခြေခံပြီးအစီအစဉ်။ ငါအခုအဖျားနှင့်အတူ ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရတယ်တစ်မိသားစုဆရာဝန်အစောပိုင်းကအတွက်အနှစ်ကအခြေအနေတော့ကတည်းကမွေးဖွားငါ၏တတိယမြောက်ကလေးအတွက် ၂၀၀၁၊ ငြင်းဖုံးအုပ်ဖို့ဘာမှမ ။ ဒီအသစ်ပါဝင်သည်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်၊သောသက်ဆိုင်တဲ့အခြားအခြေအနေ။ ငါ့မိသားစုဆရာဝန်ရှိရန်ကျမ်းစာ နှစ်ကြိမ်ကြောင်းရှင်းပြဖို့ငါ့ပစ္စုပ္ပန်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြဿနာများသွားအဖြစ်ကောင်းထက်ကျော်လွန်သည်အခြားပြဿနာ။ နောက်ကွယ်မှစိတ်ကူးသင်၏ရှိခြင်းပုဂ္ဂလိကဆေးဝါးအာမခံခဲ့မှရှောင်ရှားရန်နှောင့်အယှက်မှအလုပ်လုပ်နိုင်ခဲ့ကြရင်ဖို့သတ်မှတ်အချိန်များအတွက်မည်သည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းစေခြင်းငှါလိုအပ်သည်။ အခါ မှာမဟုတ်ဘူး၊လက်ခံသင့်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုသင်ခဲ့ရသည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်-ရန္ပံုေငြ။ နောက်နှစ်ရက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မေးမြန်း ၊လက်ခံကြောင်းသင်၏အကြို-လက်ရှိအခြေမဟုတ်ခဲ့ဆက်စပ်သောပြဿနာမှာဖက်နှင့်ငွေကြေးပေးအပ်မည်ရန်သဘောတူ။ ဒေါက်တာ ၊ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဒါရိုက်တာအ ဗြိတိန်၊ကပြောပါတယ်:"အခြေအနေများ၏သဘာဝနှင့်ဆက်စပ်ရောဂါလက္ခဏာတွေဟာအကျယ်အမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သည်၊ချင်းစီအပေါ်မူတည်။ ထိုသို့ဖြစ်ပါတယ်၊ထိုကွောငျ့၊အရေးအကဲဖြတ်ဤတောင်းဆိုမှုများများအတွက်အဖုံးအပေါ်တစ်ဦးအမှုအားဖြင့် ကိစ္စတွင်အခြေခံပြီးလက်ခံအသေးစိတ်အချက်အလက်မှဖောက်သည်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံသို့မဟုတ်မိသားစုဆရာဝန်မှအရေးကွီး၏။"ဒီဥပမာမှာကျနော်တို့လုပ်ကနဦးဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်အခြေခံပြီးအချက်အလက်တွေကျနော်တို့လက်ခံရရှိကနေဖောက်သည်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံ။ ဤအချက်မလုပ်ခဲ့ပါသူမ၏လက်ရှိအခြေအနေနှင့်မကြီး၏အစိတ်အပိုင်းအကြို-လက်ရှိအခြေအနေ၊သောဖယ်ကျဉ်အောက်သူမအလက်မူဝါဒစည်းမျဉ်းများ။"ဒေါက်တာ ကောက်ချက်ချ:"ကျွန်တော်အလွန်ဝမ်းပြဿနာများအတွက်အခဲမဆိုဒုက္ခဆင်းရဲဒီများဖြစ်ပေါ်စေကြပေမည်။"အတိုင်ပင်ခဲ့သည်သြင္း ထက်လျော့နည်းပေးဆောင်ခဲ့သည်၊အရာအဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏အချို့သောရှုပ်ထွေးရတဲ့အတွက်နောက်ကျောကသင့်ပိုက်ဆံ။ ယခုအ£၂၇၁ ဥပဒေကြမ်းအဘို့အစကင်ဖတ်စစ်ဆေးနှင့်£၁၊၃၀၂ ဥပဒေကြမ်းအပြင်ဆေးရုံအတွက်မီးယပ်ရဲ့အခကြေးငွေပြီးပြီဖုံးလွှမ်းသောအနုတ်လက္ခဏာအ£၁၀၀ ပိုလျှံအသီးအသီးအဘို့အဖြစ်ကင်နေရာယူသုံးမပြုမီရက်ပေါင်းမူဝါဒရဲ့သက်တမ်းနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပြီးနောက်။ တစ်ခုပိုလျှံနှင့်သက်ဆိုင်သည်အသီးအသီးမူဝါဒ။ အဆိုပါမေးခွန်း၏အနောက်ထပ်£၁၀၀ ဥပဒေကြမ်းခဲ့သောမှားယွင်းခဲ့သင်တို့ဆီသို့စေလွှတ်ခြင်းအားဖြင့်ဆေးရုံအခုလည္း အားဖြင့် ။ ဤအတောအတွင်း၊နှင့်အတူျပာင္းလဲထွက်လာမယ့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့အခြားဆက်စပ်နေသောကျန်းမာရေးပြဿနာများကိုဖြေရှင်းပြီးပြီ၊သင်ဝယ်ယူသင်သည်အဘယ်သို့ပြောအနည်းငယ်ပိုကောင်းနှင့်သိသိသာသာအသက်အာမခံအတွက်တခြားနေရာမှတဆင့်အကျိုးဆောင်။ ထဲကမှတ်သောသင်နှင့်သင့်မိသားစုရှိသည်နိုင်အများအတွက်ပေးဆောင်အဖုံးအောက်၊ဆှဖှေဲ့အစီအစဉ်နှင့်ဆက်စပ်သောသင့်ရဲ့ခင်ပွန်းရဲ့အလုပ်အကိုင်။ ဒီလိုရရွိကိဳ-လက်ရှိအခြေအနေများဖုံးလွှမ်း။ အဲဒီအစား၊ကွဲပြားခြားနားသော ရွေးချယ်မှုကိုယူဆောင်ခဲ့ပြန်စတုရန်းသူသည်အကြို-လက်ရှိအခြေအနေ။
ထို့အပြင်၊လူတစ်ဦးအဆပ်ဖို့ရှိစေခြင်းငှါကြက္ကေ။ အများဆုံးလေကြောင်းပျံသန်း၊သို့သော်၊သင်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှဘုတ်အမဟုတ်လျှင်အဇာစာခွင့်ရရှိထားသည်ဟုသိရသည်။ ဒါဟာလည်းအရေးကြီးကြောင်းသိရန်အဘို့အ ။။ ပြည်ကတရုတ်လိုအပ်တဲ့အလုပ္ကူးလက်မှတ်သက်တမ်းပေါ်တစ်ဦးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အရာဖြစ်ပါတယ်သင်သည်သင်၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဖြစ်ရမည်သည်သက်တမ်းမှာအနည်းဆုံးခြောက်လအတွင်း။ လျှောက်ထားရန်အတွက်ဗီဇာကိုတရုတ်နိုင်ငံ၊ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးလိုအပ်ပါလိမ့်မည်သွားဖို့တရုတ်သံရုံးသို့မဟုတ်တရုတ်ိုင္ငံေရးအတွက်ဧရိယာ။ ပါကပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအနိုင်ပေါ်လာသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဘို့ကဖြစ်နိုင်သူတို့ကိုရှိသည်ဖို့တစ်မိတ်ဆွေသို့မဟုတ်မိသားစုဝင်များအတွက်လျှောက်ထား။ ထို့အပြင်၊ခရီးသွားဗီဇာ နိုင် လျှောက်ထားသူတစ်ဦးအဖြစ်ကိုကောင်းစွာ။ များအပြားမျိုးရှိပါတယ်ဇာသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအတွက်လျှောက်ထားနိုင်ဝင်တရုတ်သို့သော်၊အချို့လိုအပ်ချက်များနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်ရမညျနိုင်ရန်အတွက်အသီးအသီးအမျိုးအစားဗီဇာရယူ။ နေသောလူများအတွက်အောက်ဖိုက်လိုရိုက်ထည့်ရန်တရုတ်နိုင်ငံ၊ရှင်းလင်းသောမိတ္တူများ၏သူတို့ရဲ့ကလေးမွေးဖွားလက်မှတ်ပေးအပ်ရပါမည်။ ဖြည့်စွက်ကာ၊သူတို့အားအောက်မှာအသက်ရှစ်နေသောခရီးသွားလာနှင့်အတူမိဘများအဖို့ရှိသည်လိမ့်မည်များကိုမူ၎င်းတို့၏မိဘ၏ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်။ လျှင်အသေးအဖွဲဖြစ်ပါသည်ခရီးသွားလာနှင့်အတူတစ်ဦးတည်းသာမိဘ၊ခွင့်ပြုချက်များအတွက်ခရီးသွားလာမှအခြားမိဘခံရဖို့ရှိပါတယ်။ အခါခရီးသွားလာနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမ၊မိဘခွင့်ပြုချက်နှစ်ဦးစလုံးမိဘများထံမှခံရဖို့ရှိပါတယ်။ နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်သွားကြဖို့အကြောင်းမှဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိပြီးတရုတ်ကိုဗီဇာလျှောက်လွှာပုံစံများသို့ဝင်သည်။ စတင်သူများအတွက်၊ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသို့သွားရောက်နိုင်သူသို့မဟုတ်သူမ၏အသံရရှိရန်လျှောက်လွှာ၊သို့မဟုတ်လျှင်နှစ်သက်၊ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်ပုံနှိပ်အွန်လိုင်းက။ လျှောက်လွှာကိုယ်တိုင်ကအလေးရှည်လျားသောစာမျက်နှာများနှင့်ခြောက်လပိုင်းမပြည့်စုံလိမ့်ရမည်ဟုထွက်သည်။ သောသူတို့အဘို့ ဖြည့်စွက်ပုံစံအွန်လိုင်း၊ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်သို့ဝင်ရန်စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများအပေါ်ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ပုံနှိပ်။ တစ်ချိန်ကပလီကေးရှင်းများအတွက်တရုတ်ဇာပြည့်စုံသည်ထွက်၊ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးလိုအပ်ချက်များကိုမည်သို့ဆုံးဖြတ်ရှိသည်။ ယူရနိုင်တယ်လေးရက်များအတွက်ဗီဇာလုပ်ငန်းများ၌ခံရဖို့သို့သော်၊အမြန်ဝန်ဆောင်မှုရရှိသောရနိုင်ပါလိမ့်မယ်အရာများအတွက်လုပ်ငန်းများ၌နှစ်ခုမှသုံးရက်။ ပါကတူညီ-နေ့အပြောင်းအလဲလိုအပ်နေသည်၊တစ်ဦးကလူတစ်ဦးပေးဆောင်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မည်တစ်ဦးအပိုဆောင်းအခကြေးငွေ။ သည်နိုင်ရန်အတွက်တရုတ်ဗီဇာလုပ်ငန်းများ၌ခံရဖို့ထိုနေ့ရက်တွင်၊ထိုသို့အမည်တင်သွင်းခြင်းအားဖြင့် ၁၂:၀၀ ညနေ။ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုရွေးဖို့တင်သွင်းသူသို့မဟုတ်သူမ၏ဗီဇာေလွ်ာက္လႊာအတွက်လူတစ်ယောက်၊ထိုသို့သတိပြုသင့်ကြောင်းအျပားနီးပါးမလွှဲမရှောင်။ ရှာဖွေရပ္နားရန္ေနရာမဟုတ်ပါဘူးအလွန်ရိုးရှင်းတဲ့။ ဒါဟာလည်းအရေးကြီးကြောင်းစိတ်ကိုစောင့်ရှောက်တရုတ်သံရုံးမည်မဟုတ်ပေးချက်များအတွက်ဆက်စပ်သည့်လျှောက်လွှာရဲ့အဆင့်အတန်း။ ဖြည့်သောအခါအထဲကဗီဇာလျှောက်လွှာပုံစံ၊ထိုသို့အစွမ်းကုန်အရေးပါဖို့ဖြည့်စွက်ထွက်မှန်ကန်စွာတစ်ဦးအဖြစ်အမှားအတွက်ရလဒ်နိုင်ပါတယ်ရှိခြင်းမှစတင်တစ်ခုလုံးကိုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုကျော်ပါ။ အထူးချွန်ဆုံး လမ်းဖို့လျှောက်လွှာတင်သွင်းများအတွက်ဗီဇာကိုတရုတ်နိုင်ငံရှိသည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဇာ သယ်ယူဝန်ဆောင်မှုတင်ပြ။ ထိုကဲ့သို့သော္ရှာတွေ့ရန်လွယ်ကူများမှာ။ သံရုံးအခကြေးငွေရတဲ့အတွက်ဗီဇာများအတွက်တရုတ်နိုင်ငံအခကြေးငွေကပေးဆောင်ရပါမည်မှတရုတ်သံရုံးရနိုင်ဖို့အတွက်ဗီဇာအားဖြင့်ဆုံးဖြတ်ထားသည်၏အရေအတွက်ကိုဘာသာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအလိုသို့ပါစေ၊ထိုအချိန်ကအဆိုပါဗီဇာလိုအပ်ချက်ဖြစ်တရားဝင်အဘို့အ၊နှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့အချိန်အကြောင်းပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုရွေးကောက်။ သင်ရှိသည်လိမ့်မယ်အဘို့အလျှောက်ထားရန်တရုတ်ဇာမှာတရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသံရုံးသို့မဟုတ်ိုင္ငံေရးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတစ်ဝှမ်း။ ဒါဟာအစတတ်နိုင်သမျှအများလျှောက်ထားရန်အဘို့ဗီဇာအသုံးပြုဇာ ကုမ္ပဏီဤကုမၸဏီများသောအားဖြင့်အရမ္ကိုအစီအစဉ်နှင့်အတူတရုတ်သံရုံး၊ိုင္ငံေရးအလျင်သင္၏ဗီဇာေလွ်ာက္လႊာသည္။ အားလုံးတရုတ်ကဗီဇာအသုံးပြုရမည်ဖြစ်သည် ၉၀ လက်ထက်မှအဆိုပါနေ့၏ပြဿနာ။ ဒါဟာအကြံပြုသည်လျှောက်ထားရန်အတွက်တရုတ်ဇာတစ်လကြိုတင်သင့်ရဲ့ခရီးစဉ်။ အသံရုံးအရေအတွက်ရှိပါတယ်ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးအစားရဖို့သင့်ရဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နောက်ကျောအချိန်အပေါ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော န်ဆောင်မှုအမျိုးအစား:အဘယ်သူမျှမ။ အသံမပါဘူးလုပ်ငန်းစဉ်ဗီဇာလျှောက်လွှာအားဖြင့်အၾကိဳက္ဆံုးသင်ရှိသည်လိမ့်မည်အရမိသားစုဝင်တစ်ဦးသို့မဟုတ်တတိယပါတီမှတင်ပြသင္၏ဗီဇာေလွ်ာက္လႊာအပေါ်သင်ပြုမူ။ ။။ ကူးလက္မွတ္အကူအညီလမ်းညွှန်အကြံပြုသည်ရတဲ့၏အကူအညီအဇာ ကုမ္ပဏီအရသင္၏ဗီဇာေလွ်ာက္လႊာလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အတူအဲဒီကုမ္ပဏီသင်နိုင်ပါလိမ့်မည်အၾကိဳက္ဆံုးသင့်ရဲ့စာရွက်စာတမ်းများကုမ္ပဏီလိပ်စာနှင့်သူတို့ကိုရှိသည်လျင်သင္၏ဗီဇာေလွ်ာက္လႊာအသံ။ ဘာသာအပေါ်ဗီဇာဆိုလိုမည်မျှအချိန်သင်ရိုက်ထည့်ပါနှင့်အတူတိုင်းပြည်အဇာ ၉၀ ရက်ပေါင်း။ ဥပမာအားဖြင့်၊သင်ရှိပါကတစ်ဦးကနှစ်ချက်ရးအရာကိုဆိုလိုသည်သင်နိုင်ကြသည်သင်ရိုက်ထည့်ရန်တရုတ်(ပြည်မ)နှစ်ဦးကြိမ်။ သွားလာလျှင်နယူးယောက်မှတရုတ်နိုင်ငံဒီလိုဖြစ်တဦးတည်းလုပ်သင်ဖွင့်ပြောစေတော့ကြည့်ရှုဟောင်ကောင်နှင့်ပြန်ရန်တရုတ်နိုင်ငံအဖြစ်ဒုတိယ။ သင်လျှောက်ထားသင့်ပါတယ်များအတွက်နည်းလမ်းတွေ-၆၄ လျှောက်လွှာပုံစံများပျောက်ဆုံးသို့မဟုတ်ခိုးယူကူးလက်မှတ်တင်ပြ၍အနီး ။။ သာ။ တစ်ချိန်ကရရှိခဲ့ကြပြီသင့်ရဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သင်ထို့နောက်လျှောက်ထားများအတွက်အသစ်အဗီဇာအမြန္သို့မဟုတ်ထွက်ပေါက်ဗီဇာအတွက် တရုတ်နိုင်ငံ။
တရုတ်ဟုခေါ်သည်'ကမ္ဘာ့စက်ရုံ'ဟူသောအခြေခံအားဖြင့်ဆိုလိုတာကအကျိုးအမြတ်များသောခရီးသည်တင်ပို့သောကုန်ပစ္စည်းများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတာ။ တတိကျတဲ့၏အကျိုးကျေးဇူးများအတွက်ကုန်သွယ် သို့မဟုတ်တရုတ်နိုင်ငံအတွက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီသည်ပို့ကုန်အခွန်ပြန်အမ်းငွေမူဝါဒအားပေးတဲ့အသစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတင်ပို့ဖို့။ ရှာကြသည်သောသူတို့အယူ၏အားသာချက်တရုတ်အတြက္သာျအမ်းကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်သင့်ချက်ချင်းရရှိရန်လုပ်ငန်းစဉ်စတင်ခဲ့ပြီးပိုက်ဆံကိုကယ်တင်နေစဉ်စီးပွားရေးလုပ်နေအတွက်တရုတ်နိုင်ငံ။ 'ငါတို့သည် ကျိန်းသေသုံးစွဲစီးပွားရေးတရုတ်နိုင်ငံ၏ဝန်ဆောင်မှု။ မိမိတို့အအဖွဲ့သည်အလွန်ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အတူအလုပ်လုပ်ရန်။ သူတို့ရှိသည်အနက်ဉာဏ်အရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အလုပ်အလွန်ပညာရှင်ပီသစွာ။ အလွန်မြင့်မားအကြံပြုထားသည်။ 'ရှိခြင်းရီးရဲလ်-အချိန်အချက်အလက်ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုထားနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ကိစ္စများကိုချက်ချင်းခင်ဖြစ်လာ။ ကျနော်တို့ကျေနပ်နှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်း။ 'ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတောက်ပနှင့်ပေးထားပြီးအကူအညီဆိုတာကျွန်မတို့သိခဲ့တယ်။ အဘယ်သို့ငါကြိုက်ကြောင်းအများဆုံးစီးပွားရေးတရုတ်နိုင်ငံ၏ဝန်ဆောင်မှုအလှုံ့ဆျောနှင့် ။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်။ မဆိုပေးထားသောအချိန်မှာငါမွငျနိုငျအတိအကျဘာကိုဖွင့်ဖြစ်ပျက်။ 'တရုတ်စီးပွားခွင့်ပြုဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်အစားခံရညိသို့လုပ်ငန်းအဆင့်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း။ 'အလွန်ကြီးစွာသောဖောက်သည်အတွေ့အကြုံ။ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်မြန်နှုန်း၏တုန့်ပြန်မှအကောင့်မန်နေဂျာအဖြစ်အရည်အသွေးအဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကြီးခြွင်းချက်။ 'အရည်အသွေးနှင့်နည်းစနစ်သည်အဘယ်ကြောင့်ရွေးချယ်ဖို့အလုပ်နှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်း တရုတ်နိုင်ငံ။ တရုတ်စီးပွားဖြစ်စနစ်တကျဖွဲ့စည်းရန်အလွန်လွယ်ကူနှင့်အတူအလုပ်လုပ်။ 'စီးပွားရေးကိုတရုတ်ကကူညီပေးတဲ့သူတွေဟာမပေးသူတွေထက်သေချာပေါက်သိဖို့ဘယ်လိုချိတ်ဆက်သင်သည်သင်၏လက်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်အတူတိုးတက်နေတဲ့တရုတ်စျေးကွက်နှင့်အဘယ်သို့ထွက်အိပ်ရလေ၏'တရုတ်အိပ်မက်-ဒီအထူးသဖြင့်။ ဒါဟာအပျော်အပါးနှင့်အတူလုပ်ကိုင်သင့်ရဲ့အံ့သြဖွယ်အဖွဲ့။ 'တရုတ်စီးပွားခဲ့သည်ထိပ်တန်း။ မိမိတို့အဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုသည်ကြီးလှပေ။ ထိုအရပ်၌ယောက်ျားတွေအလွန်လျင်မြန်စွာတုံ့ပြန်သွားရန်နှင့်အထက်ကျော်လွန်သောအကူအညီ။ '
ရှေ့နေရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးတစ်ဦးအလွန်ကောင်းသောဂုဏ်သတင်း။ ကိုဖြည်ပါတီအတွက်မည်သည့်တရားစွဲဆိုမုန်းသူ၏ကိုယ်ပိုင်အကြံပေးဘို့ပျက်ကွက်နှင့်အခြားအခြမ်းရဲ့အနိုင်ရဘို့။ အဆိုပါဆုရှင်ကိုမုန်းသူ၏ရှေ့နေကြောင့်သူ၏အဖိုးနှင့်တော့ပါဘူး။ ရတဲ့အပေါ်၌အနှစ်၊ ၏ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ရောင်းဖို့အချို့ဂုိေဒါင္သူမပိုင္။ သူမသည်စေ့စပ်ရှေ့နေလောတာဝန်ရှိသူတဦးကကိုင်တွယ်ရန်အရောင်းအဝယ်။ အခါသဘောတူညီချက်ပြည့်စုံခဲ့၊တာဝန်ရှိသူတဦးကတင်ပြသူဥပဒေကြမ်းအတွက်ပြန်ဆိုန်ဆောင်မှုဒေါ်လာ ၁၆၅၊၀၀၀ အတြက္ ၇၅ အလုပ်၏နာရီ။ ကြောင်းအကျင့်ကိုကျင့်ထွက်ဖို့ဒေါ်လာ ၂၊နှစ်ရာတစ်နာရီ။ ၉၁ နှစ်အရွယ် ။ တြက္မွာပမာဏနှင့်ပြဿနာနောက်ဆုံးမှာတော့ဆင်းသက်အတွက်သာလွန်တရားရုံးရှေ့မှာတရားမျှတမှုအက်ဒွပ်ဂန်။ သူသည်ရှေ့နေတာဝန်ရှိသူတဦးကအလုပ်တစ်ခုကိုဟု"အဘယ်သူမျှမကိုယ္မိရဲ့ကိန်းဂဏန်းများဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်လောက်သူသိသာထင်ရှားအောင်အားလုံးတက်ဖြစ်တော်မူ၏၊"အမျိုး၏အပြုအမူဆိုတာလှုံ့ဆော်လူရွှင်တော်စတီဗင်ဝီကိုစောင့်ရှောက်သော"၉၉ ရာခိုင်နှုန်း ရှေ့နေများပေးရန်ကျန်တဲ့ဆိုးမည်။"စက်တင်ဘာလအတွက် ၂၀၁၂၊တစ်ဦးကတရားရုံးတွင်ဝဲချီးမြှင့်စရိတ်ကိုရှေ့နေမှဒေါ်လာ ၃၅၊၀၀၀ တစ်နာရီအတွက်အမှုကပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းအဆိုပါကုမ္ပဏီနှစ်ခုမပေါင်း၏နှစ်ခုကုမ္ပဏီကြီးသတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ားသည္။ ကောင်းပြီ၊အခုျပန္လုပ္ေ၊ဒါပေမယ့်အချိန်နာရီ၏လစာစကေးအတွက်ရှေ့နေအထက်သိသိသာသာမြင့်မားကြောင်းအခြားကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ။ ဗြိတိသျှကိုလံဘီယာဌာနခွဲ၏အကူအညီကိုပေးသည်အောက်ပါသတိပေးချက်:"သင်ချဉ်းကပ်တဲ့ရှေ့နေရဲ့ရုံးကဲ့သို့သင်ချဉ်းကပ်တဲ့အသွားဆရာဝန်၏ရုံးခန်း-သင်ယုံကြည်ဖို့သွားရဲ့နာကျင်-မ၌သင်၏နှုတ်၊သင့် ။ သင်မသိဘယ်လောက်ကုန်ကျမယ့်၊သင်တောင်းရန်ကြောက်လန့်။ အားလုံးသိသည်အနိုင်အများကြီးကုန်ကျ။"သိသာထင်ရှားတဲ့၊ကုန်ကျစရိတ်ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးကွဲပြားအဆိုအရအစ၏ရှုပ်ထွေးမှုဥပဒေပါဝင်ပတ်သက်။ သို့သော်၊အပြေးအ-အ-အ-အကြိတ်အလုပ်ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်တမ်းနှင့်ခြံများ၊လူများ၊အိမ်ခြံမြေစတာတွေ။၊ အဲဒီအမျိုး၏နံပါတ်များကိုမျှော်လင့်:သြစတြေးလျအတွက်ကပြောပါတယ်"အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ရှေ့နေများအတွက်သေးငယ်သို့မဟုတ်ကျေးလက်မြို့ရွာနိုင်ပါသည်ပုံမှန်အားဖြင့်တာဝန်ခံမှဒေါ်လာ သိန်းမှနှစ်သိန်း(အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၁-အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၄၂)နာရီလျှင်နေစဉ်သူတို့အတွက်အဓိကမြို့ပြဒေသများတွင်အသုံးမှဒေါ်လာနှစ်သိန်းမှဒေါ်လာလေးသိန်း(အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၄၂-အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၈၄)တစ်နာရီလျှင်။"ဒါပေမဲ့၊လူရှောင်ရှားရန်ကြိုးစားသင့်တရားစွဲဆိုတက္ကဆက်ပြည်နယ်အတွက်အဘယ်အရပ်တန်ဝတ္ျပဳအစီရင်ခံမတ္လ ၂၀၁၇ အကြောင်း"ရမှတ်များတက္ကဆက်ပြည်နယ်၏ရှေ့နေယခုတာဝန်ခံအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၊၀၀၀ သို့မဟုတ်ပိုမိုတစ်နာရီအဘို့မိမိတို့အဥပဒေကြောင်းအရ။"ဤအတောအတွင်းပျမ်းမျှအလုပ်ချိန်နာရီလုပ်အားခအတွက်ကနေဒါသည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၁။ ၁၄၊။ ။ ဒါဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၄။ ၅၄၊သြစတြေးလျအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၂။ ၉၇၊နှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၇။ ၂၄။ အဆိုပါသူဌေးရှေ့နေငှားရမ်းနိုင်နေစဉ်၊ထိုဆင်းရဲသားကိုအရည်အချင်းပြည့်မှီအစိုးရ-ၾကးေဥပဒေရေးရာအကူအညီများအပြားတွင်အလယ်လူတန်းစားသည်လည်းရွေးချယ်စရာရရှိနိုင်အောင်တက်အဆုံးသတ်ကိုယ်စားပြု။ အဆိုအရအသက်"သည်သူတစ်ဦးသည်သူ၏ကိုယ်ပိုင်ရှေ့နေတစ်ဦးအရူးအတွက်လိုင်း။"သေး၍၊လူအတွက်မိမိတို့ကိုယ်ကိုကိုယ်စားပြုသောကြောင့်တရားရုံးရှေ့နေများ'အဖိုးအခဒါကြောင့်မြင့်မားသောသူတို့မတတ်နိုင်မှငှားရမ်း။ ဒီနေသော်လည်း ထင်မြင်ချက်၏အဆုံးဥပဒေရေးရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များသောသရုပ်ဆောင်အဖြစ်သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ရှေ့နေများအတွက်အများဆုံးဖွယ်ရှိဖို့ထွက်လှည့်။ ဒါပေမယ့်၊အများဆုံးများအတွက်အဘယ်သူသည်ဤလမ်းကြောင်းတွင်ရွေးချယ်မယ့်ကိစ္စတစ်ခု၏လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါသည်။ နှင့်ယခင်ကနေဒါ၏တရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးချုပ် မှတ်သားတစ်ဦးအတွက် ၂၀၀၇ ခြန္း"ကံမကောင်းသဖြင့်၊အများအပြားကနေဒါအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးသူတို့ကိုယ်သူတို့ရှာတွေ့နိုင်ခြင်း၊အဓိကအားဖြင့်ဘဏ္ဍာရေးအကြောင်းရင်းများကိုကမ္ဘာ့ဥပဒေစနစ်။ သူတို့ထဲကတချို့ကဆုံးဖြတ်ဖြစ်လာဖို့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရှေ့နေ။ အခြားသူများကိုရိုးရိုးအရှုံးမပေးပါ။"၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာလတြင္တရားရုံးချုပ်တရားအရွယ်ရောက်သဘောတူ။ သူ သောကုန်ကျစရိတ်အလွန်မြင့်မား၏ဥပဒေရေးရာအကူအညီရည်ရွယ်ပြားကနေဒါလက်လှမ်းငြင်းဆန်ထားကြသည်။ သူပြောသည်အဆိုပါကမ္ဘာလုံးနှင့်မေးလ်"အောင်မကြဘူးဆိုရင်သင့်ကိုရှိပါတယ်သေချာသည်တရားမျှတမှုများကိုရရှိရန်၊ဒါကြောင့်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်အလေးအနက်ပြဿနာတွေအတွက်။ အန္တရာယ်ရှိသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။"အများအပြားဝက်ဘ်ဆိုက်များရှိပါတယ်အင်တာနက်ပေါ်မှာအများအကြံဉာဏ်ပေးမှရှေ့နေအပေါ်ဘယ်လိုကိုင်တွယ်လိုင်းတိုင်ကြားအရွယ်အစားလောက်၎င်းတို့၏ဥပဒေကြမ်းများ။ သူတို့ကများသောအားဖြင့်စတင်ဟောပြောသောရှေ့နေများအလေးအနက်သူတို့ကအကုန်အနည်းဆုံးခုနစ်နှစ်မှာတက္ကသိုလ် မီသူတို့ပင်စတင်လေ့ကျင့်ဖို့ကြီးမားတဲ့ပိုက်ဆံအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်လ့က်ဖြစ်လာမှရှေ့နေနှင့်အနောက်ပိုင်းဖရီစီရန်အတွက်ရောင်ပြန်ဟပ်သောအဖိုးဆိုသည္။ အများဆုံးရှေ့နေများဘွဲ့ရနှင့်အတူမြင့်မားတဲ့အကြွေးဝန်။ အ ၂၀၁၈ အစီရင်ခံခြင်းအားဖြင့် ။။ သတင်းနှင့်ကမ္ဘာ့အစီရင်ခံစာရေးသားပျမ်းမျှဘွဲ့ရအကြွေးဝန်မှဒေါ်လာ ၁၉၈၊၉၆၂ မှာသောမတ်စ်ဂျက်ကျောင်း၏၊ယနေ့မှဒေါ်လာ ၇၉၊၈၁၃ တက္ကသိုလ်၏။ ရှေ့နေများကြောင်းထောက်ပြလျှင်သူတို့အားသြင္းဒေါ်လာလေးရာတစ်နာရီပါဘူးအားလုံးသို့သွားမိမိတို့ဘဏ်အကောင့်အသစ်များ၏။ သူတို့ပေးဆောင်ဖို့ရှိသည်အင့္အဥပဒေကြောင်းအရအတြင္းနဲ့အဖုံးသူတို့ရဲ့ရုံးခန်းငှားနှင့်စရိတ်များ၊ဥပဒေလူ့အဖွဲ့အစည်းအခကြေးငွေနှင့်အခြားစရိတ်များ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအပြေး။ ရှေ့နေများအတွက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြီးမားတဲ့ကုမ္ပဏီများအပိုဆောင်းဆိုင္ဖြထိုကဲ့သို့သောကုန်ကျစရိတ်အဖြစ်မျှဝေ၏လစာ၏၊ကြို၊လူ့အရင်းအမြစ်များ၊စာရင်းကိုင်၊စသည်တို့ကို။ ရှေ့နေဒါ့အပြင်သူတို့ရဲ့အလုပ်အကိုင်များကိုအလွန်စိတ်ဖိစီးမှုများမကြာခဏပါဝင်ပတ်သက် ၁၂-၁၄-နာရီတစ်နေ့အလုပ်ချိန်။ သူတို့ကလည်းထောက်ပြကြောင်းသူတို့မတတ်နိုင်အောင်အမှားဖြစ်နိုင်ကြောင်းအလွန်ငွေကုန်ကြေးကျဖို့သူတို့ရဲ့ ဖောက်သည်များ။ ပင်ဒါကြောင့်၊ကြောင်းအဘယ်သူသည်သာလူကပြောရှေ့နေများ'အဖိုးအခအပြစ်လွတ်နေသောရှေ့နေများသူတို့ကိုယ်သူတို့။ အခြားသူများအာရုံစိုက်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်ကိုလူကဲ့သို့သောအဖြစ်အင်ဂျင်နီယာများနှင့်သူနာပြုအားဖြင့်သွားရှည်ရှည်နဲ့ငွေကုန်ကြေးကျ။ သူတို့ကလည်းစိတ်ဖိစီးမှုများအကိုင်များနှင့်အတူအမြင့်မားဒီဂရီ၏တာဝန်များအတွက်အမှား-အခမဲ့လုပ်ကိုင်ဒါပေမဲ့အလုပ်ထက်ဝေးလျော့နည်းရှေ့နေ။ အရအွန်သူနာပြုအသင်းလူတန်းစားစောင့်ရှောက်မှုသူနာပြုလုပ်အကြားဒေါ်လာနှစ်ဆယ်နှစ်နှင့်ဒေါ်လာလေးဆယ်တစ်နာရီ။ ပျမ်းမျှဟာဒေါ်လာသုံးဆယ်-တဦးတည်းတစ်နာရီ။ ဒါကြောင့်၊တစ်ဦးသူနာပြုကနေဒါနိုင်ငံအလုပ်လုပ်ရန်ရှိသည်လိမ့်မည်အကျော်ဆယ်နာရီဝယ်ဖို့တစ်နာရီရှေ့နေများ၏အချိန်ရဲ့။ ကနေဒါနိုင်ငံ၏အမျိုးသားကိုယ်ပိုင်-ကိုယ်စားပြု စီမံကိန္းက ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအတက်ရောက်နေကလူမိသားစုတရားရုံးကအလုပ်မပါဘဲဒီတော့ဥပဒေရေးရာအကြံပေး။ အမှုကိစ္စအရေအတွက်လေးဆယ်ရာခိုင်နှုန်း။ ကနေဒါအသံလွှင့်ကော်ပိုရေးရှင်းကြောင်းအစီရင်ခံများအကြား ၂၀၀၆ နှင့် ၂၀၁၅၏အရေအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကို-ကိုယ်စားပြု သာမိသားစုတရားရုံးထက ၁၂၁။ မိသားစုဥပေဒနည်းပြမြည်ကြောင်းဤအဖစ္ရပ္သည္ပေး တရားမျှတမှု၏:"အတာတစ်ခုကျော်ကာလလေးနှစ်နှင့်သုံးလအဆုံးသတ်ရေးကိုဧပြီလ ၆၊၂၀၁၆၊အွန်သာလွန်တရားရုံးကိစ္စရပ်တစ်ခုမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်တဦးတည်းကိုကိုယ်စားပြုလိုင်း၏၊ထိုကိုယ်စားလှယ်အမည်သာယ့်ထိုအချိန်ကာလ၏ရာခိုင်နှုန်းနှင့်ပျောက်ဆုံး ၇၃ ထိုအချိန်ကာလ၏ရာခိုင်နှုန်း။ ပြေးရလွမ္းဥပဒေရေးရာဝန်ဆောင်မှုအတွက်နေရာပေးသည်သောဥပဒေရေးရာအကြံဥာဏ်။ သူမအလှန်အားဖြင့်သတင္းမ်ားရဲ့မဂ္ဂဇင်းအဖြစ်"ဟုဖြစ်ခြင်းသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရှေ့နေအတူအကျင့်ကိုကျင့်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အသွားဘက်ဆိုင်ရာအလုပ်သို့မဟုတ်နှလုံးခွဲစိတ်မှု။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးကိုအပူတပြင်း။ '"ရှေ့နေလိပ္ပု အချက်များထဲကအချို့အနည်းကြောင်းမုများအတွက်ရှေ့ဆက်လုပ်-အရှေ့နေ။ အရေးအသားအတွက်ကမ္ဘာ့ရှေ့နေသူကရမှတ်ကြောင်းထွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်-ကိုယ်စားပြုနေသောစိတ်လှုပ်ရှားမှုအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်မှုအထို့ကြောင့်မဖြစ်နိုင်ဆက်ကပ်ချနိုင်မှအငြင်းအခုံပြုသည်မှာမှန်နှင့်ယုတ္တိဗေဒ။ ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများမှာလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်အမ-ရှေ့နေနှင့်အလွယ်တကူခရီးစဉ်ကိုဖွင့်ဖို့ကြိုးစားတဲ့သူတွေကိုစတီယာရင်ဖြင့်သူတို့ကိုမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်။ တွေ့ဖြစ်စဉ်မယုံနိုင်လောက်အောင်စိတ်ပျက်။ တရားမကြိုက်ဘူး အခါလူတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်စားပြုစေသည်ကြောင့်သူတို့အလုပ်အများကြီးပိုပြီးခက်ခဲ။ သူတို့နည်းပြပုဂ္ဂိုလ်အရာကိုအပေါ်ဥပဒေနှင့်သက်ဆိုင်သည်၎င်းတို့၏အမှုတွင်တရားရုံးနှင့်အလှူအထောက်အထားတွေ၊အပြင်တစ်ဦးအငြင်းအခုံ။ တချိန်တည်းမှာ၊တရားသူနေရမည်လုံးဝဘက်မလိုက်။ ဒါကခက်ခဲတဲ့အရာ။ ဒီကွီးဗက်သာလွန်တရားရုံးတရားသူကြီးချုပ် ç ေျပာပေါ်သောခေါင်းစဉ်:"ဒါဟာမင့်၏အခန်းကဏ္ဍကိုတရားစီရင်ကူညီရန်တစ်စုံတစ်ဦး၏ပြင်ဆင်မှုအတွက်၎င်းတို့၏အမှုကြောင့်အခြားပါတီစေခြင်းငှါအဘယ်သူသည်ရှေ့နေတစ်ယောက်နဲ့ကိုယ်စားပြုစေခြင်းငှါခံစားရ ။"-အရှေ့နေများမကြာခဏအရပုံသေဆင်းအတွက်သက်ဆိုင်သေးစိတ်ကိုတရားရုံးစနစ်နှင့်ထိရောက်မှုမရှိဘဲနှေးကွေး၏အုပ်ချုပ်တရားမျှတမှုအတွက်ပြီးသားအသက်ကို။ နှင့်အညီ၊သင်တန်း၊ရှေ့နေများမကြိုက်ဘူးသောသူတို့အဖို့ရွေးချယ်သို့သွားတရားရုံးဘဲထုတ္မေျ။ သာမကိုယ့်ကိုယ်ကို-ကိုယ်စားပြုဆိုလိုနည်းပါးလာအခကြေးငွေပေးဆောင်ဖောက်သည်အလွန်စိတ်ပျက်သောအခါသူတို့အားဆန့်ကျင်တစ်ဦးအပျော်တမ်းပါဘူးသူနားလည်သောဥပဒေရေးရာ ။ သို့သော်၊ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်-ကိုယ်စားပြုဒီနေရာမှာပါပဲ၊ဒါကြောင့်လူတိုင်းရဖို့ရန်အသုံးပြုသည်။ အားလုံးအစိုးရအခုရှိသည်ဝက်ဘ်ဆိုက်များပြောပြကြဘူး - ပြင်ဆင်ခြင်းငှါအဘယ်သို့နှင့်အပြင်သူတို့ရဲ့အမှုပေါင်း။ မြောက်မြားစွာဥပဒေရေးရာအရင်းအမြစ်ဆေးခန်းဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီဘယ်မှာဥပဒေကျောင်းသားများနာ့တူလူကိုကူညီဖို့သူတို့ရဲ့ကိစ္စ၏ကြီးကြပ်မှုအောက်ရှေ့နေ။ လည်း၊အများအပြားရှေ့နေအပေါ်ယူမည်အရေအဖၚျကိစ္စများ၊အလုပ်လုပ်ကိုင်များအတွက်အခမဲ့သို့မဟုတ်အလွန်လျှော့ချအခကြေးငွေ။ အသစ္ေသောလူကြိုက်များကြီးထွားလာဟုခေါ်သည်"အမွားတစ္စံုတစ္စံုတစ္ရာ။"ဒီနေရာမှာမည်သို့ရဲ့တက္ကသိုလ်ဆာဥပဒေပါမောက္ခဂျူဉာာဏ္ဖော်ပြတယ်၊"ဒါဟာကြင်နာ၏ယမ်ဳိးလုပ်၊ဒါကြောင့်သင်ပြောတဲ့ပန်းချီဆရာ:အိုကေ၊ကျွန်တော်မတတ်နိုင်ဖို့ငှားရမ်းသင်ခြယ်ဖို့ငါ့အိမ္၊ငါမူကားနေတာကိုမုန်းသောအမျက်နှာကျက်"(တိုရွန်တိုစတား)။ ဒါကြောင့်၊သူလူမတတ်နိုင်သောအပြည့်အဝအထုပ်နိုင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ရှာဖွေအတွက်ပိုက်ဆံနည်းနည်းများ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လက်-ကိုင်မှတဆင့်အပိုခက်သည်။ လူတော်တော်များများဖော်ပြခဲ့ကြရှေ့နေအဖြစ်နိုငျသောသူတို့ကိုရွေးပျံသန်းကြောက်စရာထဲကတစ်ပန်းကန်ငရုတ်ကောင်း၏နေစဉ်ဝတ်ဆင် လက်ဝှေ့လက်အိတ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှေ့နေတဦးအတိုင်းသုံးရာကလူအတွက်ပြင်သစ်ကိုချိုးသည်တဘို့ရှိသမျှ ၁၊၄၀၃။
နောက်ကွယ်မှ၊တစ္ဦးေပူကဘေဂျင်းရှိအတွက်ပိုမိုစိတ်ဝင်စားဖြစ်လာ ၎င်း၏ထိန်းချုပ်မှုကျော်လူတွေရဲ့ဘဝတွေကိုထက်မြှင့်တင်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်း။ လံုၿခံဳေ ၊တရုတ်အိမ်ခြံမြေတည်ဆောက်ရှန်ဟိုင်း၊အားသာခ်က္မ်ားအမော်လ်ပြီးခဲ့သည့်လကအတူအဘယ်သူမျှမအစီအစဉ်ကိုပြန်သွားဖို့ကိုအချိန်မရွေးမကြာ။ လေယာဉ်ဆင်းသက်ပြီးနောက်၊။ ခံဳေ၊ယခင်တရားသူကြီးနှင့်ရှေ့နေအစား၊လူမှုမီဒီယာတစ်ခု ၂၈-စာမျက်နှာဆောင်းပါးတွင်ရှင်းပြကိုယ်တော်တိုင်။"အဘယ်ကြောင့်ငါသည်လက်ဝဲတရုတ်၊"ဖတ်သောခေါင်းစဉ်၊"တစ်ဦးလုပ်ငန်းရှင်င့်နှုတ်ဆက်ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀ။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဟာတူညီတဲ့ဧတင်ပို့ရန်ဦးတည်သောချောက်၊"။ ခံဳေရေးသားခဲ့သည်။"မပါဘဲအခြေခံအကျဆုံးအပြောင်းအလဲ၊ဒါဟာရှောင်လွှဲသောအမည်ဖြစ်ကမ္ဘာနှင့်ခရီးသည်သေလိမ့်မည်။"မသိရသေးကြောင့်ဖြစ်ပါသည်လူဘယ်နှစ်ယောက်မြင်ဆောင်းပါးမီပျောက်ကွယ်သွားကနေတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကြီးအကျယ်အင်တာနက်ဆင်ဆာ။ ဒါပေမဲ့ ။ ခံဳေဆိုရှင်အရာကိုအပြားလုပ်ငန်းရှင်အတွက်တရုတ်စကားကိုပုဂ္ဂလိကပိုင်:တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုရှိ လောကရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးစီးပွားရေး၊တရုတ်နိုင်ငံ၏ရှင်လူတန်းစားသည်ယုံကြည်စိတ်ချမှုဆုံးရှုံးသွားအတွက်တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်။ ထက်ပိုပြီးများအတွက်မျိုးဆက်တစ်၊တရုတ်နိုင်ငံခဲ့လောင်စာအားဖြင့်အကောင်းမြင်ကြောင်းနေသော်လည်း၊ယင်း ပြဿနာများ၊နက်ဖြန်ပိုကောင်းလိမ့်မည်ဟုယနေ့ထက်။ အခုရေပန်းစားနေသောအမြင်ဖြစ်ပါသည်အကောင်းဆုံးဆာင္ရြက္မႈႏွအားဖြင့်အွန်လိုင်း ရေပန်းစားကိုဖန်ဆင်းတော်မူခြင်းအားဖြင့်ဝမ်ဟူသည်၊တည်ထောင်သူနှင့်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်၏ ၊အွန်လိုင်းပေးအပ်ခြင်းနှင့် ကုမ္ပဏီ။ အမ်ဳိးအ ၂၀၁၉၊က ၊အဆိုးဆုံးနှစ်အတွက်ဤဆယ်စုနှစ်အတွင်း၊ဒါပေမယ့်အကောင်းဆုံးအဖြစ်နှစ်အတွက်လာမည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်း။ ဒါပေမယ့်အများအပြားလုပ်ငန်းရှင်များပိုမိုကျယ်ပြန့်စိုးရိမ်ကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံမလိုက်စီးပွားရေးနှင့်နိုင်ငံရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကြောင့်လိုအပ်။ ထိုဆန့်ကျင်တွင်၊အုတ်ကျင်းကြီးချုပ်ကွန်မြူနစ်ပါတီအတွက် ၂၀၁၂၊ပါတီပြည်သူ့စိုးကဏ္ဍတိုင်းတွင်၌အတရုတ်လူ့အဖွဲ့အစည်း။ အနည်းငယ်ခန့်မှန်းကြသည်တစ်ဦးလေယာဉ်ပျက်ကျ၊ဒါပေမယ့်စိုးရိမ်ကျော်ကတရုတ်နိုင်ငံ၏ရေရှည်အလားအလာကြီးထွားလာကြသည်။ အောင်မြင့်၊တကယ်တော့၊အချို့သောလုပ်ငန်းရှင်များကနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံ၏အနာဂတ်အလားအလာမှအခြားနိုင်ငံအစိုးရသည်နယ်စပ်ထိန်းချုပ်ရေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလံများနှင့်မလွယ်လွယ်ကူ:အ ၄၆၅ ချမ်းသာအားဖြင့်တစ်ဦးချင်း ၊တစ်ရှန်ဟိုင်းအခြေစိုက်သုတေသနကုမ္ပဏီ။ လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်နီးပါးသုံးပုံနှစ်ပုံကပြောပါတယ် သူတို့အလွန်စိတ်ချယုံကြည်။ ရှိသည်သောသူတို့မှာယုံကြည်စိတ်ချမှုအားလုံးမှဆယ်ရာခိုင်နှုန်း၊ပိုပြီးနှစ်ဆသောထက်အဆင့် ၂၀၁၈။ နီးပါးတစ်ဝက်သူတို့စဉ်းစားခဲ့ကြပြောင်းရွှေ့ရန်နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်သို့မဟုတ်ပြီးသားစတင်ခဲ့။"တရုတ်နိုင်ငံနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်တွေအများကြီးပြည်တွင်းရေးနှင့်ပြင်ပစိန်ခေါ်မှုများယခု"ဟုဒ်တို့၊၏တည်ထောင်သူအဆိုပါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီနွေဦးမြို့တော်အုပ်စုနှင့်ကိုယ်၏ ရဲ့ကြီးတရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း။"ကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုပါတယ်အားလုံး၏အောင်မြင်မှုများအတိတ်အတွက်အနှစ်လေးဆယ်ခဲ့ကြ ။ တို့၏မှတ်ချက်များများမှာသံတမန်ရေး။ ပုဂ္ဂလိကအတွက်၊အချို့သောလုပ်ငန်းရှင်စကားပြောနေကြသည်သာငတ္မြတ္ပြီးပိုကြောက်။ သူတို့အဘို့တောင်းက္ျ၊ဟုတ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ရဲ့"အရေးပါဆုံးအကြောင်းတရားများသူတို့၏ အဆိုးမူဝါဒနှင့်ခေါင်းဆောင်"ဟု ပါမောက္ခတစ်ဦး၊ ကောလိပ်အတွက်ကယ်လီဖိုးနီးယားသူအတွက်မကြာခဏဆက်သွယ်ရန်နှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်း။"ဒါဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းင်ရန်အတွက်ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်သောအချိန်တွင်အစိုးရမပါဘူးလို့သတ်ခြင်းကဲ့သို့သူတို့ကိုဝက်။ ဒီမ အစိုးရကပိုင္ဆိုင္မႈကိုဥပေဒ။ ဒါကိုပြောင်းလဲနိူင်တဲ့ေစ်းကြက္မွာပါ။"အများအပြားအဖွဲ့ဝင်များ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဆီပျော်သောခေါင်းဆောင်မှုရဲ့စီးပွားရေးမူဝါဒများနှင့်မျက်နှာနိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတောင်မှပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ"အတွက်မျက်စိ၏အချို့အကြီးတန်းအရာရှိ၊ပင်လူကဲ့သို့ပေါက်မနှင့်မြင်းမပဲသေးငယ်တဲ့-အချိန်အရှင်၊"။ ခံဳေပာတာဗျူး၊၏တည်ထောင်သူလီနှင့် ၊နှစ်ဦး၏တရုတ်နိုင်ငံ၏အကြီးမားဆုံးပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ။ ။ တင်ပုံပေါ်ပါတယ်သတိပြုမိ၏အမွားမ်ား။ ဘေဂျင်းရှိဆိုင်းအသစ်စည်းမျဉ်းမြှင့်မည်ဟုစီးပွားရေးအခွန်အခများအတွက်ပေးဆောင်ဖို့လူမှုအကျိုးကျေးဇူးများရှိပြီးအလျှော့၎င်း၏ငွေကြေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေးမူဝါဒများ။ ။ ခံဳေဟုသူဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ရွှေ့ဖို့မော်လ်တာကြောင့်နွေး၊လှသောအဆင်းနှင့်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဥရောပသမဂ္ဂတစ္မ်ဳိးျမိမိအခရီးသွားလာတွင်းတို့ဖြစ်ကြသည်။ ။ ခံဳေဟုသူဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ရွှေ့ဖို့မော်လ်တာကြောင့်နွေး၊လှသောအဆင်းနှင့်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဥရောပသမဂ္ဂတစ္မ်ဳိးျမိမိအခရီးသွားလာတွင်းတို့ဖြစ်ကြသည်။ အထီးက်န္ဆန္ေအနှစ်လေးဆယ်၏တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖွင့်လှစ်၊။ တင်စောဒကသူ့စာရွက် ၏လမ်းညွှန်မှုတိုးတက်မှုအောက်ခိုင်ကွန်မြူနစ်ပါတီထိန်းချုပ်ရမယ်မယိမ်းယိုင်။ အခြားအရေးပါတီရဲ့ထိပ်တန်းအရာရှိနောက်ဆုံးအလုပ္၊။ အုတ်ဖော်ထုတ်ခုနစ်အဓိကအန္တရာယ်များအတွက်အမျိုးသားလုံခြုံရေး၊အတူနိုင်ငံရေးနှင့်အတွေးအခေါ်ခန့်ကိုစာရင်းတိုးမြှင့်၊သူသည်ဟုခေါ်သည်တင်းကျပ်ထိန်းချုပ်မှု၏လူငယ်နှင့်အင်တာနက်။ ပြောကျော်ညစာစားပွဲဟောင်ကောင်ရှိကြောင်းကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲနှင့်အတူနိုင်ငံတော်သမ္မတအပ်က္အဖြစ်နိုင်အတွက်အသွင်စေခြင်းငှါကြောင့်အင်အားပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရန်အဆောက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုရောက်ရန်သဘောတူ။ သာ ။ အပ်က္အကယ်တင်နိုင်သည်၊တရုတ်ဒါဟာမကြာခဏပြောမှာပုဂ္ဂလိကရုံး၊သာတဝက်ကိုစွပ်စွဲ။"ကုန်သွယ်ရေးစစ်ဖြစ်တဲ့မကောင်းတဲ့အရာနဲ့စတင်"ဟု ။ တို့၏နွေဦး။"ဒါပေမယ့်ဆိုရင်နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဦးဆောင်ဖို့ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုတရုတ်နိုင်ငံမှဆောင်ရွက်ကျယ်ပြန့်အဆောက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု၊ဒါကြောင့်တစ်ဦးဦးဝင်း-ဝင်းအခြေအနေများအတွက် ။့၊တရုတ်နိုင်ငံနှင့်ကမ္ဘာ။"ဆက်ဆံရေးအကြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတန်းနှင့်ပါတီမဟုတ်ခဲ့အစဉ်အမြဲဤကဲ့သို့သော။ အချို့သောလုပ်ငန်းရှင်ရှုံး ။ အုတ်ရောက်သောအခါ၊မိမိ ကာက္တယ္ ပြဖို့သူတို့ကိုကြီးအဆောက်အဦတစ်ခုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ-အခြေပြုလူ့အဖွဲ့အစည်း။ သို့သော်စိတ်ပျက်လက်ပျက်အမှုဆောင်အကြောင်းကျွန်မကိုပြောပြတင်းကျပ်စိုးရထိန်းချုပ်ရေးနည်းလမ်းများပို တစ်ဦးဟုပြောဆိုရှိသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အရေးပါပြီး၊လာဘ္စားရိုးရိုးကြာကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများ။ နိုင်ပါသည်ဒါကြောင့်ရပ်တန့်။ အချို့သောလုပ်ငန်းရှင်များမှာအဆိုးမြင်ဝါဒ။ ။ ခံဳေ၊အလုပ္ေ၊ေျပာအဖြေဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးပြောဖို့ဘယ်လိုလူအတော်များများသဘောတူ။ ပင်ရှိသည်သောသူတို့ကျန်ရစ်တရုတ်နိုင်ပါသည်နေဆဲင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှိပါတယ်၊သူတို့ကိုအောင်မှထုတ်ပြောလိုက်ပါ။ အပေါင်း၊အဆဲနိုင်ငံအများအပြားရှိပါတယ် သူဆိုဒီကြမ်းတမ်းဖါကြာရှည်ခံမည်မဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့်အများအပြား၏တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အချမ်းသာခဲ့ကြမဲအတူသူတို့၏ခြေ။ ၏အရေအတွက်တရုတ်ပြည်သူ့ရွေ့လျားဖို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဇာပဲေ။ အတသန်းနိုင်ငံခြားကျောင်းသားများအတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊သုံးပုံတစ်ပုံမှဖြစ်ကြ၏။ ယခု ၅၃၊။ ခံဳေဆုံးဖြတ်ခဲ့စောပိုင်း၌၂၀၁၃ ကပိုကောင်းရှာဖွေနေစတင်ရန်မှာအရပ်အပြင်ဘက်တွင်တရုတ်ပြည်။ ခလုတ်ခဲ့ကျိုးနပ်စေသောသူသည်ပထမဦးဆုံးအမြဲတမ်းလုံခြုံ နေထိုင်သူအဆင့်အတန်းတွင်ေဟာင္ေကာင္အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ၏တရုတ်နိုင်ငံ၊သို့သော်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများအကြောင်း၎င်းငယ္ေစိုက်ပျိုးကြပါပြီကတည်းကနိုင်ငံတော်အထန်ထန်တုန့်ပြန်ဖို့ဒီမိုကရေစီဆန္ဒပြပွဲရှိပါတယ် ၂၀၁၄။ သူကလျှောက်ထားများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဇာကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ဒါပေမယ့်စောင့်ဆိုင်းချိန်ခဲ့သည်။ သူကတော့ဝယ်တဒါဇင်ကျော်တိုက်ခန်းများအတွက်မလေးရှား၊ကွာလာလမ်ပူမြို့၊တိုက်တွန်းသူ၏ဆွေမျိုးများနှင့်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေများအတူတူလုပ်ဖို့။ သူခေါ်ကသူ၏နောဧ၏သင်္ဘောအစီအစဉ်ကို၊များအတွက်ပြင်ဆင်ထားရန်အဖျက်ဘးကတရုတ်တွေ့ကြုံခံစားစေခြင်းငှါ။ ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့မလေးရှားဗီဇာအကြီးတရားဝင်အဘို့အသာတကျိပ်နှစ်။ ။ ခံဳေခဲ့ဟုဆိုသည်နောက်ဆုံးပေါ်အခြေချမော်လ်ကြောင့်နွေး၊လှသောအဆင်းနှင့်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဥရောပသမဂ္ဂအတွက်တော့သူနိုင်၊ခရီးသွားလာရန်အခြားနိုင်ငံများတွင်ပါတီတို့ဖြစ်ကြသည်။ အတွက်လုပ်ငန်းရှင်အတန်းအစား၊သူထွက်ခွာ၊တရုတ်နိုင်ငံဟာအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်ခုခံတွန်းလှန်ရန်ကွန်မြူနစ်အုပ်ချုပ်။ တစ်ချိန်ကလူတွေ၊သူတို့စီမံခန့်ခွဲဖို့အနည်းဆုံးယူအချို့သောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသူတို့နှင့်အတူနေသော်လည်းအတင္းအနှီးထိန်းချုပ်မှုအစိုးရကချမှတ်ထားမှာမကြာသေး အနှစ်။ သူတို့ပြန်လာတဲ့အခါအခြေအနေအပြောင်းအလဲ၊။ ခံဳေပာကြီးများအပြားကဲ့သို့ပင်ပင်လယ်ရပ်ခြားတရုတ်မှာ ၁၉၈၀ ခုနှစ်နှင့် ၉၀။ ။ ခံဳေသည်အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူနှင့်ရှာဖွေစူးစမ်းသူ၏အကျိုးစီးပွားအတွက်။ သူနေဆဲအချို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်တရုတ်နိုင်ငံဒါပေမယ့်မလိုအပ်ပါဘူးဖို့လေ့လူတစ်ဦးအတွက်သူတို့ကိုသွား။သူဆိုခဲ့ဖူးတကယ်စဉ်းစားပြောင်းလဲနေတဲ့သူ၏နိုင်ငံသားအဖြစ်ကြောင့်အသက်ကြီးခက်ခဲတဲ့အတွက်ပထမမျိုးဆက်ရွှေ့။သူသာလိုရှာဖွေဖို့လုံခြုံတဲ့နေရာအတွက်သူ့မိသားစုကေျပာဆန့်ကျင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်အဆိုးဆုံးအခြေအနေအကြောင်းသူယုံကြည်သောရုပ်လုံးပေါ်လာလိမ့်မည်မဟုတ်လျှင်အဲဒီအံ့ဖွယ်အ။"ကျွန်မမျှော်လင့်မထားခဲ့တဲ့ဆောင်းပါးလိုဖြစ်ရကျိုးနပ်တော့ကျယ်ပြန့်၊"ဟုသူကဆိုသည်။.
တရုတ်ဥပဒေမှာရှေ့နေချုပ်ပူဇော်ဥပဒေရေးရာဝန်ဆောင်မှုအတွက်၊တရုတ်ပြည်မနှင့်အတူကျယ်ပြန့် အတွေ့အကြုံအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေးနှင့်ဆက်စပ်အစည်းအရာမ်ားျရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ပူးတွဲလုပ်ဆောင်ခြင်းဝယ်ယူခြင်း၊တည်ထောင်ပြီးနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု။ ။ လုပ္ထံုး။ ဌားရ။ တွင်တည်ရှိ မြို့နှင့်ဆက်ဆံရာတွင်ဆံပင်ထုတ်ကုန်များ၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ရုံများပါဝင်ပါသည်ကြီးစွာသောအရေအတွက်အတွေ့အကြုံနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုထမ်း။ ဆံပင်ထုတ်ကုန်များအပါအဝင်:၊ပိတ်သိမ်းရှေ့ပိုင်း၊အရာလုံးဝအလက်အလုပ်၊အရာ။ ငါ'တရုတ်ကျွမ်းကျင်ရှေ့နေကျင့်၌ပယ္ခ်င္ငံတကာ ဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောအရာတည်နေရာကိုု(ကန်တုံ)။ ငါ့အကိုအဓိကအလေ့အကျင့်ဒေသများပါဝင်သည်နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး၊အသိဉာဏ်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု၊ပူးတွဲလုပ်ဆောင်ခြင်းဝယ်ယူ။ တစ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဥပဒေရေးရာအတိုင်ပင်ခံအတွက်ရှန်ဟိုင်းကပေးဝန်ဆောင်မှုနှင့်ဖောက်သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း။ ဝန်ဆောင်မှုပါဝင်စာချုပ်၊ရင်းနှီးမြှုပ်နှံစာရင်းစစ်၊ဖောက်သည်ကိုကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းစာရင်းစစ်၊ဆိုင်းတရုတ်နိုင်ငံအတွက်။ ပယ္ခ်တိ-ဦးဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီတွင်တည်ရှိပြီးမြို့တော်ရှန်ကျန်းနှင့်အတူဌာနခွဲရုံးပတ္သက္သူ နှင့်အခြားမြို့ကြီးတရုတ်နိုင်ငံ၏။ေဘက်စုံကြီးများဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောနှင့်အတူထက်ပို။၁၀၀။ ပေးနိုင်ပါသည်ဥပဒေရေးရာဝန်ဆောင်မှုဖို့အမျိုးမျိုးသောဖောက်သည်များအိမ်ပြည်ပ။ ကျွန်ုပ်တို့၏။ ဥပဒေရေးရာဝန်ဆောင်မှု၊ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊တရုတ်နိုင်ငံရှေ့နေ၊ခုံ၊တရားစွဲအတွက်တရုတ်နိုင်ငံတရားရုံးများ၊အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊မူပိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်သည်။ အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ရေး၊အမှတ်တံဆိပ်နာမည်ကအကာအကွယ်၊မူပိုင်ခွင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၊ဒိုမိန်းအမည်အကွယ်၊မူပိုင်ခွင့်ပလီကေးရှင်း၊ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်၊ရှေ့နေ၊ဥပဒေရေးရာဝန်ဆောင်မှုဌက်ာ္လြန္ရ ရုံးခဲ့သည်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အတွေ့အကြုံရှိကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကနေဘွဲ့ရပြီးလူသိများတဲ့ဥပဒေကျောင်း၊အဘယ်သူကိုအချို့ရှိသည်ပညာရေးဆိုင်ရာနောက်ခံနှင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်အတွေ့အကြုံအတွက်ဟောင်ကောင်နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်။ အကြိမ်နှီးဖော်ရွေပတ်ဝန်းကျင်၊ အနီးကပ်။
' လုပ်ငန်းဒေဝါပညတ်တရားအားဖြင့်အမြဲတမ်းကော်မတီ၏ေဒသအမျိုးသားပြည်သူ့ကွန်ဂရက်၏အ အပေါ်နှစ်ဆယ်-တတိယအစည်းအဝေးနှစ်ဆယ်ခုနစ်သြဂုတ်လ ၂၀၀၆၊မွေးကိုထိန်းညှိနိုင်ဖို့အတွက်ဒေလုပ်ငန်းစဉ်၊တရားမျှတမှုရှင်းလင်းကြွေး၊ကွယ်သောတရားဝင်အခွင့်အရေးနှင့်အကျိုးစီးပွားအကြွေးနှင့်ကိုက်၊အကာအမတ်စျေးကွက်စီးပွားရေးအလို့ငှာ၊ဒါကြောင့်ဒီဥပဒေ။ အကောင်အထည်ဖော်အပေါ်ဇွန်လ ၁၊၂၀၀၇။ ၏အရေးပါမှုကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ဤဥပဒေသစ်အောင်မြင်သောအစားထိုးအသက်ဒေဥပဒေကြောင်းအဆိုပါဌာနအနေဖြင့်လိုင်းပေါ်မှာ။ အဆိုပါဥပဒေရဲ့အစမှာတရုတ်ရဲ့စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုပြဋ္ဌာန်းနှစ်ဆယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းအားလုံးအတွက်ဒေဝါလီတရားစွဲဆိုလိမ့်မည်ထားရှိအစိုးရအပေါ်လွှမ်းမိုးမှု။ ပိတ်မှုကြောင့်ဒေကြောက်ရွံ့ခြင်းကြောင့်အလုပ်လက်မဲ့အလုပ်သမားများအတွက်နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်လူမှုရေးမငြိမ်သက်အရွယ်၊ဒေဥပဒေဖြစ်ဖို့အတွက်စဉ်းစား နိုင်ငံရေးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရန်ထက်စီးပွားရေးအကြောင်းအချက်များ။ ဤဥပဒေကိုမည်ဒေအကျိုးထမ်းများ၏အထက်ထားရှိ၊အကျိုးစီးပွားအကြွေး။ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအတွက်ဤဥပဒေသို့မဟုတ်ရိုးရိုးဖော်ပြခဲ့တဲ့မဟုတ်ဘူး၊ဒါကြောင့်ဒေဝါ၏ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအထားကိုရှင်းလင်းဥပဒေနှင့်သက်ဆိုင်ထိန်းညှိဖို့။ ။ အသစ်ဒေဥပေဒ၏တရုတ်အကောင်အထည်ဖော်မှုအသစ်ဒေဥပေဒရန်အဘို့အခွင့်ပြုထားဒေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအတွက်ဘေဂျင်းအတွက်ပထမဦးဆုံးအခွင့်အလမ်းမိတ်ဆက်ဖို့ဒီအယူအဆ၏။ ပုဒ်မ ၇၃ ဥပေဒအပေါ်အခြေခံပြီးကုမ္ပဏီမှအလုပ်တွဲများအတွက်ဒေသမီးတစ်ဦးနှင့်ပြီးနောက်၊ဘဝရှိခြင်းအပေါ်သို့အနည်ထိုင်ဖို့အပိတ်လမ်း၊ဒေတရားရုံးအဆင့်ဆင့်အတည်ပြုရန်လုပ်ငန်း၏ကြီးကြပ်မှုအောက်မန်နေဂျာကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့သူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်စီးပွားရေးရာ။ ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးအသစ်ဒေဥပဒေပြုအစဉ်အဆက်ပြီးပြည့်စုံသော။ အချို့သောအားနည်းချက်များဖြစ်စေနိုင်သောနိုင်ငံရေးသမားများဆက်လက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ဖို့အတွက်ကော်ပိုရိတ်ဒေ။ ဥပမာအားဖြင့်၊အဆိုပါဒေကြီးအစိုးရတာဝန်ခံ ကုမ္ပဏီ၏မန်နေဂျာဖြစ်မည်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၊ဒါပေမယ့်သူတို့မှာအခွင့်အရေးအရာရှိချုပ်တရားသူကြီးကြသူမညာ။ အဖြစ်ဝင်ငွေအဆင့်မန်နေဂျာများပိုများအပြင်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ခံရဖို့တရားရုံးကယင်းအစားထက်ထိုအကြွေးရှင်၊ဒါကြောင့်တရားသူကြီးများနှင့်၎င်းတို့၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတွက်ဒေသဆိုင်ရာအစိုးရအပို ဒေကိစ္စရပ်များအဆင်ပြေ။ ဒါပေမယ့်အသစ်ဒေဥပေဒအဆဲအရေးပါသောခြေလှမ်းလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်အတွက်၊အထူးသဖြင့်နှင့်ပတ်သက်ပြန်လည်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဘဏ္ဍာရေးစနစ်စိုးရိမ်ပူပန်ဖြစ်ပါသည်။ တရုတ်နိုင်ငံဖန္တီးဘဏ္ဍာရေးစနစ်သည်နေဆဲအားဖြင့်အနှောငျ့အများအပြားမကောင်းတဲ့အကြွေးကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဒေ။ အဆိုအရအမေရိကန်တက္ကသိုလ်များအတွက်နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်တွင်(တက္ကသိုလ်များအတွက်နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်)မကြာသေးမီကခန့်မှန်းအမ်ိဳးမ်ိဳးမွလာျပီးမစစ္ေစုစုပေါင်းမကောင်းတဲ့အကြွေးမျှ ၁၆၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအျပီးဂျီ။ အကယ္တရုတ်ဘဏ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍနိုင်ရန်အတွက်အတားအဆီးဂေးရီး၌စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်းစမ်းသပ်မှုအတွက်၊ကျနော်တို့ကပြဿနာကိုဖြေရှင်းရမယ်မကောင်းတဲ့အကြွေး။ ။ အဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအထိ၊ကော်ပိုရိတ် ဒေဝါလီတရားစွဲဆိုခဲ့ကြဒါကြောင့်ရေကတရုတ်လေးနိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များနှင့်အချို့သေးငယ်တဲ့ရှယ်ယာလုပ်တဲ့သူ သိမ်းဒေပတ်သက်လက်လှမ်း။ ပေမယ့်တရုတ်ဘဏ်များမှရယူရှယ်ယာကိုထိန်းချုပ်အတွက်ကုမ္ပဏီအများအားဖြင့်ကြွေးမြီ-ရှယ်ယာလဲလှယ်အရောင်းအဝယ်၊ဘဏ်အဖို့ရည်ရွယ်ထားလာရှေ့၌တိုက်ရိုက်စီမံခန့်ခွဲမှုအဲဒီကုမ္ပဏီတွေရဲ့။ အဲဒီဘဏ်ရန်ပြင်ဆင်ထားကြသည်မဟုတ်ရင်အကြွေးအန္တရာယ်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအမှုများစွာအတွက်သူတို့နေဆဲအလေ့ထောက်ပံ့ဖို့ဒေသခံအစိုးရနှင့်ပြည်နယ်ပိုင်ဆိုင်သည့်သို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလိကငွေချေး။ ဒါကြောင့်အသစ်ဒေဥပေဒအထူးသဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စည်းကမ်းချက်များများအတွက်ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအေဂျင်စီလျှောက်ထားရန်တရားရုံးများအတွက်ဒေသမီးတစ်ဦးနှင့်သို့မဟုတ်သိမ်း၏ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်း။ တိကျတဲ့ဒေလုပ်ငန်းစဉ်များအဖြစ်ဒီးယား ၁၊၂၊၃၊၄။ အခါဝင်ကုမ္ပဏီဒေဝါလီတရားစွဲဆိုမှု၊ဖျက်သိမ်းနိုင်ရန်၊ဘယ်လိုအများစုကအကြွေးအစီအစဉ်' လုပ်ငန်းဒေဥပေဒစာမျက်နှာ ၁၁၃ ထိုကဲ့သို့သောလိုအပ်ချက်:(အ)အ။ အမေရိကန်အတွက်ရှိပါတယ်နှစ်ဦးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်:ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အကြွေးပေးခြင်းအားဖြင့် သူတို့ကိုလတ်ဆတ်သောစတင်ရန်အခမဲ့မှရှင်ရဲ့တောင်းဆိုမှုများနှင့်သေချာစေရန်တန်းတူကုသရန်အကြွေးနေသောယှဉ်ပြိုင်များအတွက်မြီစား၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို။ ကယ်ဆယ်ရေးအခန်းကြီးခုနစ်ခုအတွက်ထောက်ပံ့သိမ်းတရားစွဲဆို-ရောင်းအားလုံး၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်အမြတ်အစွန်းမှအကြွေးတင်ရဲ့အကြွေး။ အခန်းတကျိပ်တပါးသောအုပ်ချုပ် ။ အခန်းတကျိပ်နှစ်နှင့်ဆယ်သုံးအတွက်ထောက်ပံ့ညှိနှိုင်းမှု၏အကြွေးကြောင့်ပါတီနှင့်အတူပုံမှန်အဆက်ထိုကဲ့သို့သောမိသားစုအဖြစ်လယ်သမားများနှင့်မိသားစုငါးဖမ်းအောက်ခန်းကြီးတကျိပ်နှစ်နှင့်လူတစ်ဦးချင်းစီအောက်ခန်းကြီး ၁၃။ ဝေဖန်ဆန်းစစ်ၿဖစ္ပါတယ္၊ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနှင့်တီထွင်ဆင်ရန်တစ်ဦးချင်းစီ ဖြစ်ငးအတွက်ကင်ညာ ဥပဒေကြမ်း ၂၀၁၂ အဖြစ်နှိုင်းယှဉ်နှင့်အတူဆင်ရန် ၏သဘာဝနှင့်ပေါင်းစပ်နှင့်အဆင်အလောင်းများကိုအခြားရွေးချယ်စရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအမည်ကြောင်းဖွင့်ရေးရာ၏အကွှေးသဘာဝလူပုဂ္ဂိုလ်များကိုစီမံခန့်ခွဲအကျိုးအတွက်၎င်းတို့၏အကြွေးအတွက်ပေးသိမ်း၏ပေါင်းစပ်လောင်း(အပါအဝင် အရည်ပျော်ပစ္စည်း)များကိုတစ်ဦးကအခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ်မှဖျက်သိမ်းကြောင်းလုပျထုံးလုပျတြအရေးရာထိုကဲ့သို့သောသူများ၏အလောင်းကောင်အဖြစ်ဖြစ်လာကွှေးအုပ်ချုပ်ခွင့်ခံရဖို့အကျိုးအတွက်၎င်းတို့၏အကြွေးပေးများအတွက်ဆက်စပ်ဖြစ်ပွားကိစ္စရပ်များအားတစ်ဦးချင်း ရည်ညွှန်းရန်စွမ်းနိုင်ခြင်း၏အကြွေးဆပ်ဖို့မိမိအအကြွေးအဖြစ်နှင့်သောအခါသူတို့ကျမှုကြောင့်။ တစ်ဦးချင်းအဆင့်အတန်းကိုရည်ညွှန်းသည်သဘာဝလူပုဂ္ဂိုလ်များသာမဟုတ်ကော်ပိုရေးရှင်း။ နောက်ခံဥပဒေကြမ်းကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သောခဲ့သည်လုပ္ရေစည်းမျဉ်းနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှု၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကင်ညာသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်အပေါ်ကော်ပိုရိတ်အချိန်ကြာမြင့်စွာသမိုင်းနှင့်သာအကျဉ်းများ၏အဓိကတိုးတက်မှုစေခြင်းငှါမောင်းထိုးကျဉ်းချုပ်။ ၁၅၄၂-အဓိကရည်ရွယ်မှာသီေက်ာင္း၏ပိုင်ဆိုင်မှုအကြွေးများအတွက်မိမိအအကြွေး။ ၁၈၃၄-တိုးချဲ့အုပ်ချုပ်ကွဲကွာခြင်းတရားနှင့်အုပ်ချုပ်သည်။ အနယ္စပ္မွာလုပ်ငန်းဆောင်ကျန်ရစ်ပ်ဳိအတွက်အမြင့်ဆုံးတရားရုံးနှင့်ခရိုင်တရားရုံးစဉ်အမျက်၍ပြောင်းရွှေ့ဖို့တစ်ဘုတ်အဖွဲ့၏ကုန်သွယ်မှု။ ဒါဟာအ ပစ္စုပ္ပန်နေ့က။ တစ်ခုမှာတာဝန်အဖြစ်တစ်ဦး အသုတေသနပြုရန်။ ရှိပါတယ်စာရင်းတစ်ခု၏အခြေခံအကျဆုံးနှင့်အသုံးဝင်သောအရင်းအမြစ်များအတွက်ပညာရှင်နှင့်ပြဿနာ။ သတိထားစာဖတ်ခြင်း၊ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်အနက်အရေးကြီးဆုံးတူရိယာထွက်သယ်ဆောင်ရန်ထိရောက်သော။ အဆုံးမှာအသီးအသီး၏ကုဒ်အပိုင်းရှိ"သမိုင်းနှင့်မှတ်စုများတည်းဖြတ်မူ"အထောက်အကူဖြစ်စေဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြအတွက်အဓိပ္ပါယ်ကို၏တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ပြဋ္ဌာန်းပြီးလည်းအလယ်တန်းအရင်းအမြစ်ကိုအဖြေများကိုအလွဲသုံးစားမှုကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအက်ဥပဒေ၏၂၀၀၅ အားဖြင့်ဝီလျံ ။ နှင့် ။ မှ ၁၊၊၊ကူး၊ နှင့် ၊။ ။ ၏မိသားစုပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုအစားအကြွေးရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်သတိပြုမိရန်အားလုံးအကြွေးနှင့်အခွင့်အလမ်းများအကြား။ အမှု၏အမအမြတ်အစွန်း(အနေနဲ့)၊အကြွေးရောင်းဖို့၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအတွက်အားဖြင့်သမ္မတဘုရ်ှအပေါ်ဧပြီလ ၂၀၊၂၀၀၅၊ရှိသည်လိမ့်မယ်တစ်ဦးကိုချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်အရောင်းအ မြီပိုင်ဆိုင်မှုများကို။ စဉ်၏အများဆုံး မကြာသေးမီပြင်ဆင်ရန်ကုဒ်မည်မဟုတ်ထိရောက်သောဖြစ်လာသည့်တိုင်အောက်တိုဘာလ ၁၇၊၂၀၀၅ ပြင်ဆင်ဆွေးနွေးနေရာဖြစ်လာခဲ့သည်ထိရောက်မှုအပေါ်ဧပြီလ ၂၀၊၂၀၀၅ နှစ်ခုလုံးအတွက်အသစ်နှင့်ဆိုင်းငံ့များအမြဲတမ်းရှိပါတယ်ဥတု၏လုံခြုံအကြွေးတွေ၊သောအရာကိုဆိုလိုနေသမျှကာလပတ်လုံးမရှိဂုဏ်သတ္တိများမှမှပူးတွဲထားသည်အကြွေးအားလုံးအကြွေးတွေဖြစ်လိမ့်မည်ထဲကသုတ်။ အလျှောက်နေဖို့အမိန့်အကွယ်မှတရားရုံးကရပ်တန့်မည်အားလုံးအကြွေးမှဆက်သွယ်။ သူတို့ကတားမြစ်ထားမှအားလုံး ၊တရားစွဲ၊ဖုန်းကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှု၊တရား၊၊။ စောင့်ကင်းလွတ်ခံေျမအခါလူစောင့်သူတို့၏အိမ်ခြံမြေအတွက်။ ဥပမာအားဖြင့်ဆိုရင်အသင်အိမ်ေထာင်စုအတွက်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ပရိဘောဂများ၏ပျမ်းမျှတန်ဖိုးကို၊ဖွယ်ရှိသည်သင်စောင့်ရှောက်ဖို့သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု။ သင့်အိမ်နှင့်ကားအနိုင်ကြသည်အခါသင်ဆဲဖြစ်စေငွေပေးချေမှုအပေါ်သင့်ရဲ့အပေါင်ခံသို့မဟုတ်ကားတစ်စီးချေးငွေနှင့်စောင့်ရှောက်နိုင်အောင်သင့်ရဲ့အိမ်သို့မဟုတ်ကားတစ်စီးထဲမှာအခန်းကြီးခုနစ်။ အမိန့်အတွက်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့၊သင်ရှိသည်မယ်လို့လက်မှတ်ထိုးရန်အ ။ ဒါဟာဖို့အကြံပြုသည်မဟုတ်အဘို့အဖိုင်ကို သေ၊သင်ဆဲမှဆက်လက်အောင်သင့်ရဲ့လစဉ်ငွေပေးချေမှု။ အ သဘောတူစားထိုးသင့်ရဲ့မူရင်းသဘောတူစေသည်ဖြစ်သော်လည်းဘဲဖိုင်အဘို့အပေါ်သင့်ရဲ့အပေါင်ခံသို့မဟုတ်ကားတစ်စီးချေးငွေ။ အမ်ိဳးသင်သည်မစောင့်သောအားဖြင့်မဟုတ်-ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့်အသုံးပြုခံရနိုင်ဆပ်ရန်ကြွေးရှင်တစ်ဦးသောအဘို့ကိုအဆိုကြသည်။ မဟုတ်-ကင်းလွတ်ခွင့်ခံေျမသည်ငွေသားနဲ့၊ရှယ်ယာအတွက်ဒုတိယအိမ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ၊အဖိုးတန်ကောက်ခံထိုသို့သောအဖြစ်တံဆိပ်ခေါင်း၊ပန်းချီ၊ဒင်္ဂါးပြား၊စသည်တို့ကို။ ၂။ ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲ၏။ ကြွေးမည်အပြည့်အဝပေးဆောင်သို့မဟုတ်တစ်ရာခိုင်နှုန်းအပေါ်အခြေခံပိုင်ဆိုင်မှုများကိုရရှိနိုင်ခဲ့ကြသည်။ အဲအခန်းတကျိပ်တပါးသောအဘို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု။ အခန်းတကျိပ်တပါးသောခွင့်ပြုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမှရေသင်္ချိုင်းကြီးကို၎င်း၏စစ်ဆင်ရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဒါကြောင့်ပေးဆောင်နိုင်၊၎င်း၏အကြွေး။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်အတွက်အခန်းတကျိပ်တပါးသောအခြားထာင္ေယူစေခြင်းငှါအနှံ့မူရင်းထာင္ေသာသမီးတစ်ဦးနှင့်။ ကြွေးဖို့ပြောပေးပါအကိုအချိန်သင်္ချိုင်းနှင့်ဆပ်အကြွေး။ ထိုအခါ၊အခန်းကြီးဆယ်သောတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးချင်းစီအဘို့။ အခန်းကြီးဆယ်ပေးတော်မူတစ်ဦးချင်းတစ်ဦး အခွင့်အဆပ်ဖို့အကြွေးကျော်သုံးမှငါးနှစ်မှတဆင့်ဂေါ။ အများဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုရှိနိုင်ပါသည်ထားပေါ်မူတည်၏အဘယျရာခိုင်နှုန်းအအကြွေးတွေပေးဆောင်လိမ့်မည်။ လျှင်ထိုအကြွေးကိုပေးသောအကြွေးများအတွက်အပြည့်အဝထို့နောက်သူတို့နိုင်မည်အပေါင်းတို့သည်စောင့်ရှောက်ဖို့သူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှု။ ဤသည်သာရရှိနိုင်ပါသည်ကိုက်နှင့်အတူဖယ်ျပဳ။ နောက်ဆုံးအမျိုးအစားသည်အခန်းကြီးတကျိပ်နှစ်ပါးသောအတွက်လယ်သမားများနှင့်ငါးဖမ်းသမား(ဥပဒေရေးရာသတင်းအချက်အၸံ)။ နောက်ပြီးဘယ်အခန်းကိုအသုံးပြု၊အကြွေးရှင်တစ်ဦး"လတ်ဆတ်သောစတင်ရန်"။ အဖြူကော်လာရာဇဝတ်မှုအဘယ်ကြောင့်ဤစဉ်းစားဖြူကော်လာ။ အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိကတည်းကအောက်တိုဘာလ ၁၊၁၉၇၉။ ၄။ ဖွဲ့စည်းမှုသဘောတူ-အကြားအကြွေးနှင့်အမျိုးစုံအကြွေးများအတွက်အကြွေးပြန်ဆပ်၏။ အမျိုးမျိုးသောတစ်ဦးနှင့်အ(။ ၉၊၁၁၊တကျိပ်နှစ်နှင့် ၁၃)ရှုတည်ပြုဖွဲ့စည်းမှုက္ရမည္။ ၅။ အကြွေး-အထာင္ေနှင့်အတူတစ်ပြောဆိုချက်ကိုဝမီအတွဲတစ်တွဲ၌မြီရှာကြံအတည်ပြုအစီအစဉ်၏သောလိမ့်မည်ဆပ်ကြွေးစဉ် အမြီဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသို့မဟုတ်ဆက်လက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်။ အဆိုပါဥပဒေအရခွင့်ပြုထားသည့်အခန်း ၉၊၁၁၊တကျိပ်နှစ်နှင့်ဆယ်အ
များစွာသောဗြိတိသျှကျွမ်းကျင်သူများကြောင်းကျွန်ုပ်တို့နားလည်သဘောပေါက်ကြဘူးကြောင်းသူတို့နိုင်ကြသည်ကွာရှင်းခြင်းဗြိတိန်တွင်အသုံးပြုဗမာအရံုးမ်ား၊အပင်ခံပြီးနေထိုင်ခဲ့။ အအများစုအတွက် ကိစ္စ၊ဗြိတိသျှကျွမ်းကျင်သူများကွာရှင်းမှတဆင့်အဂၤတရားရုံးမရမလိုအပ်ဖြစ်စေအိမ်ထောင်ဖက်ကိုခရီးသွားပြန်လန်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ရှေ့နေလိမ့်မည်ထွက်သယ်ကိုကွာရှင်းအတွက်ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ကိုယ်စားပြုခြင်း၊အကြံပေးသင်အဆင့်တခုစီတိုင်းမှာ၊သင်တို့ကိုသေချာစေရန်သင့်အိမ်ထောင်ဖက်အပေါ်ရွှေ့နိုင်တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးသကဲ့သို့။ အ ကျွမ်းကျင်သူများကွာရှင်းဗြိတိန်နိုင်ငံအတွက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်တွင်းငါးလ(တူညီခဲ့ကြလျှင်သကဲ့သို့သင်တို့နေထိုင်အတွက်အင်္ဂလန်)။ ကျနော်တို့အကွာအဝေးကိုဆက်ကပ်ကွာရှင်းခြင်းန်ဆောင်မှုမှတစ်ဦး ကွာရှင်းထုပ်(£၂၇၀ ဒေါ်လာ ၄၁၀၁၆၀၀)၊အခ်ိန္ပိုင္းအခကြေးငွေ-အပြည့်အဝဝန်ဆောင်မှုကွာရှင်း(£၁၇၅၀ ဒၚလာ ၂၆၀၀၁၀၊၀၀၀)၊တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်မဟာဗျူဟာညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ဖို့ကိုယ်စားပြုအတွင်းကာကွယ်တရားစွဲဆိုတစ်ခုသို့မဟုတ်အငြင်းပွား။ အရင်ပိုင်ခွင့်အတွက်ကွာရှင်းခြင်းနှင့်ကွာရှင်းခြင်းဥပဒေမတူညီသောအတွင်းဤသုံးပါးဗြိတိန်ဥပဒေစနစ်များ၊ဒါကြောင့်အဘယ်သူမျှမရှေ့နေအမည်မှာ'ရန်ဥပဒေ'။ မှတ်ချက်:သင်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်နံပါတ်ခုနစ်ထက္အဖြစ်သင့်ရဲ့တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အတွက်ရွေးကွာရှင်းပြတ်စဲလန်အတွက်ရှိစေခြင်းငှါ၊အဖြစ်အပေါ်ကန့်သတ်သင့်ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးပဲ။ အောက်ပါဆွေးနွေးချက် က ကိုဖော်ပြထားဗမာမိသားစုဥပဒေနှင့်အဓိပ္ပါယ်များအတွက်လိုအပ်သောထည့်သွင်းစဉ်းစား၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်။ နှုတ်ကပတ်တော်ကို' သည်ကွဲပြားခြားနားသောအဓိပ္ပါယ်များ၌အခြားအခင္းအက်င္း။ ၏မူလအ လူတိုင်းရရှိမှာမွေးဖွား။ မွေးဖွားချိန်တွင်သင်အ ၏ဖခင်၊သို့မဟုတ်မိခင်လျှင်သင့်ရဲ့မိဘတွေကွဲကွာခဲ့ကြ၏ထိုအချိန်ကသင်သည်သင်၏။ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည်အစဉ်အမြဲရှိသည် နိုင်မှသာမိမိတို့ တည်းတိုင်းပြည်အတွက်။ ပြီးနောက်အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ်၊တစ်ဦးလူတစ်ဦးရယူနိုင်အသစ်တစ်ခုကို မှရွေ့လျားခြင်းအားဖြင့်အခြားတိုင်းပြည်ရည်ရွယ်နေအမြဲတမ်းရှိပါတယ်။ ကြောင့်အကုန်၏သဘောသဘာဝကျွမ်းကျင်သူများအသက်တာဖြစ်ပါတယ်၊ဒါကြောင့်ပုံမှန်အတိုင်းများအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများအဆို အတွက်သူတို့ရဲ့အိမ်ကိုနိုင်ငံ(ထို့ကြောင့်ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော၊ဗိကျွမ်းကျင်သူများမကြာခဏအချိန်မှာကွာရှင်းမှတဆင့်အဂၤတရားရုံး)။ တခါတလေနေထိုင်ရာအရပ်တည်ထောင်အပေါ်အခြေခံသည်၊သင့်ရဲ့အမြဲတမ်း'၏ဗဟိုအကျိုး'။ အဘယ်သူမျှမအချိန်ကာလအတွင်းလိုအပ်သည်ရယူဖို့တခါတလေနေအိမ်သို့အတွက်တစ်ခရိုင်။ ဒါဟာအဓိကအားဖြင့်ဆုံးဖြတ်ထားသည်။ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအခြေအနေဖြစ်စေသောနေရာသင့်အိမ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော၊သင်ချည်းအတွက်နေထိုင်ရာနိုင်ငံနှင့်တိုက်ရိုက်အလုပ်လုပ်။ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ဖြစ်ပါသည်၊နှင့်အမှားအကြံဥာဏ်ငွေကုန်ကြေးကျဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်အငြင်းပွားမှုများနှင့်ဆိုင်း။ ရတဲ့တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အချိန်မှာသေချာအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့ဘဏ္ဍာရေးရလဒ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတစ်ခုကကမ်းလှမ်းဗိကျွမ်းကျင်သူများအခမဲ့ကနဦးအကျဉ်းချုပ်သူတို့ရဲ့တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်။ ပါကကျေးဇူးပြုပြီးဒီဆောင်းပါးကိုတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အတွက်ကွာရှင်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးပဲ။ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အတွက်သားသမီးအငြင်းကွဲပြားခြားနားသည်။ ပြီးဆက်သွယ်အကြံဉာဏ်ကိုအဘို့ဤအမှု၌။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ရှေ့နေလိမ့်မည်ထွက်သယ်ဆောင်ကွာရှင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်သင်တို့၏ကိုယ်၊ပည္တိုင္းဆင့်တခုစီတိုင်းမှာ၊သင်တို့ကိုသေချာစေရန်သင့်အိမ်ထောင်ဖက်အပေါ်ရွှေ့နိုင်တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးသကဲ့သို့။ အဆင်သင့်ရှာခြင်းငှါဥပဒေကြောင်းအရအကြံဉာဏ်။ ဟောပြောရန်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏ပြည်ပရှိဥပဒေယနေ့လက်ခံရရှိရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှင့်လျှို့ဝှက်အကြံဉာဏ်။
အပြည့်အဝဝန်ဆောင်မှု၊အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောနှင့်အတူ၊၎င်း၏ဌာနချုပ်တွင်တည်ရှိသည်။ တည်ထောင်အတွက် ၂၀၀၁၊ ဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောလုံးအဂုဏ်သတင်း၌တရုတ်ဥပဒေဝန်ဆောင်မှုများကိုစျေးကွက်။ ထက်ပိုပြီးနှင့်အတူ ၂၀၀၀ ရှေ့နေများ၊ကျနော်တို့အခု၏အကြီးဆုံးဥပဒေကိုကုမ္ပဏီများအတွက်အာရှနှင့်။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီရဲ့ အုပ်စုဦးဆောင်အဖွဲ့၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရှေ့နေနှင့်အတိုင်ပင်ခံ။ အရှေ့ပိုင်းအလေ့အကျင့်အကူညီအများအပြားလောကရဲ့ကြီးမြတ်သည့်ကုမ္ပဏီ၊စီးပွားရေးလုပ်ဖို့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံ နှင့်သြစတြေးလျ။ ရဲ့ရှေ့နေများနှင့်တိုင်ပင်အလုပ်အတွက်အဆိုပါဒေသများနှင့်မူပိုင်၏၊ ပြီး၊အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ်ရေးဆောင်းပါးများတည်ထောင်ပြီး ၁၉၉၃ ခုနှစ်၊ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံတော်အရုံးမှအရေးပါအစိတ်အပိုင်းကိုစတင် ၏ကျော်ကြားသောတရုတ်အလေ့အကျင့်။ ထက်ပိုပြီးနှင့်အတူ ၁၂၀ ရှေ့နေများနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်န်ထမ်းများ၊ကျနော်တို့အကြံပြုပါသည်တရုတ်နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်တရုတ်နိုင်ငံ၏ပွင့်နှင့်လာမယ့်ကံဇာရာကုမ္ပဏီပေါ်အချို့သောအမှု၏အထင်ရှားဆုံး။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ်ထည့္ပါအေပၚဘေဂျင်းအတွက်ရုံးအစောပိုင်း ၂၀၁၄ များကိုဥပဒေကြောင်းအဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုဖောက်သည်များလည်ပတ်သို့မဟုတ်တည်ရှိပြီးတရုတ်နိုင်ငံနှင့်အရှေ့အာရှ။ နိုင်ငံတော်အဆင့်ရုံးနိတ်နီးနီးကပ်ကပ်အတူကုမ္ပဏီ၏အခြားရုံး၌အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ဥရောပနိုင်ငံများ၊လက်တင်အမေရိက၊အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသနှင့်အလယ်ပိုင်း။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ်ရုပ္ထြက္ေ ရုံးတွေရှိတယ်အတွက်ဟောင်ကောင်နဲ့ဘေဂျင်းနှင့်အတူခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ငါးဆယ်နေထိုင်သူရှေ့နေ။ ဟောင်ကောင်ရုံး၊စစ်ဆင်ရေးအတွက်ကတည်းက ၁၉၈၀၊ေ နေရာ၊တစ်မူထူးခြားသောအဆောက်အဦသစ်ဖွင့်လှစ် ၂၀၁၂ တွင်ဟောင်ကောင်ကျွန်းသည်။ေဘေဂျင်း၊၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္တည္ေထာင္သည္၊တည်ရှိပါသည်။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ်တည်ထောင်ခဲ့သည်အစောပိုင်းတွင်အတွက် ၂၀၁၃၊ဖရိဘိဓါန္မ်ားရဲ့ဘေဂျင်းရုံးမှအပ်နှံသည်ဝန်ဆောင်မှု၏လိုအပ်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းဖောက်သည်များစီးပွားရေးလုပ်နေအတွက်တရုတ်တို့၏တရုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များအတွက်သူတို့ရဲ့နိုင်ငံတကာငွေကြေးလွှဲပြောင်း။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ် ရှေ့နေများအတွက်ဘေဂျင်းအကူအညီကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကော်ပိုရေးရှင်းများ၊ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းနှင့်ပုဂ္ဂလိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံနှင့်တွေ့ဆုံရန်မိမိတို့ဥပဒေနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းလိုအပ်သည့်အခါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတာတရုတ်အတွက်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ကအကူအညီအများဆုံးမြတ်သောတရားဝင်ကိန်းဂဏန်းများတရုတ်စျေးကွက်အတွက်၊သူချောမွေ့ဖောက်သည်များ'ချဲ့ထွင်။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ် သည်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအကြားနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုကုမ္ပဏီများ၊စီးပွားရေးဥပဒေအကြံဉာဏ်၏အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးတစ်လျှောက်လုံးဥရောပ၊အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊အာရှနှင့်အမေရိကန်။ ကျော်နှင့်အတူ ၂၊ငါးရာရှေ့နေများအတွက်နှစ်ဆယ်ခုနစ်ဓိကစီးပွားရေးစင်တာများကမ္ဘာအဝှမ်းများကိုပြည့်စုံ။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ်ဝမ်၊၊ ၊။ ၊အတွေ့အကြုံဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောအခြေခံတွင် ကမ်းခြေမှာ၊ကယ်လီဖိုးနီးယား။ ကျနော်တို့နောက်ထပ်ရုံးတွင်ထိုင်ဝမ်၊ဘေဂျင်း၊ေတာင္တန္း၊ကယ်လီဖိုးနီးယား။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်များကိုလက်တွေ့ကျတဲ့နှင့်ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောဖြေရှင်းနည်းများအံဝင်ခွင်ကျဖို့ဥပဒေကြောင်းအရလိုအပ်ချက်များကိုနှစ်ဦးစလုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ်ဟေ ဟုတ္ သည္နှိုင်းဥပဒေရေးရာအကြံဥာဏ်နှင့်ကိုယ်စားပြုမှုအပေါ်အချို့၏အကြီးဆုံးနှင့်အရှုပ်ထွေးဆုံးနှင့်တရားစွဲဆိုခြင်းအတွက်အရေးပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုိင္မ်ားရုံးတွင်နယူးယောက်မြို့အတွက်အလုပ်တာ္ထဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နှင့်အတူရုံးအတွက်ဘေဂျင်း၊ဟောင်ကောင်၊လန်ဒန်၊လော့စ်။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ် ကြွေးဟာသူ့ရဲ့ဂုဏ်သတင်းနှင့်ဇာတ်ကောင်၊သိက္ခာ၊စွမ်းရည်များ၊နှင့်ရှင်စိတ်ဓါတ်ကို၎င်း၏ရှေ့နေနှင့်ဝန်ထမ်းများ၊နှင့်အတူစတင်တည်ထောင်သူ ၊၊၊၊နှင့်ဆက်လက်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုအများပြည်သူအတွက်ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ကော်ပိုရိတ်ဥပဒေကိုအဓိက ။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ် ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီအဖြစ်အပြည့်အဝဝန်ဆောင်မှုတရုတ်ကော်ပိုရိတ်နှင့်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောနှင့်အတူဆယ်ရုံးပတ်ပတ်လည်တရုတ်၊နေရာများအတွက်အဓိက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစင်တာ၏ဘေဂျင်း၊ရှန်ဟိုင်း၊ရှန်ကျန်း၊ကိုလူကိုု၊တိုုင္းမေဖြစ်ပါက၊၊ နှင့် ၊အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ်ႏ ယံ-အပြည့်အဝဝန်ဆောင်မှုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ။ ဖောက်သည်များအကျိုးအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပေါင်းစပ်အလေ့အကျင့်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကတိကဝတ်ကိုအရည်အသွေးနှင့်အတူပေါင်းစပ်တစ်မူထူးခြားသောကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်။ ကျနော်တို့အလုပ်လုပ်အတူပြည်တွင်းဥပဒေကုမ္ပဏီပြည်ပရာပူဇော်သက္ကာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ထိပ်တန်းဖြေရှင်းနည်းများကိုရှုပ်ထွေးတဲ့နိုင်ငံတကာအရေးပါပါတယ်။ မှာ။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ် ကိုယ်စားပြုဖောက်သည်များအတွက်ဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်းနည်းပညာကို၊တရားစွဲဆိုခြင်း၊အဖြူကော်လာကာကွယ်ရေး၊၊အစိုးရဌာန၊အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ၊အသက်သိပ္ပံနှင့်အခြားကိစ္စရပ်များ။ အတွက်တုံ့ပြန်ရန်အလိုအပ်ချက်နှင့်စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏၊ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေကိုအပေါ်သို့ဆွဲခြင်းကုမ္ပဏီရဲ့။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ်အန်တို သည့်နိုင်ငံတကာဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီတည်ထောင်အတွက် ၁၈၈၅။ ရှည်ထူထောင်၌အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊အန်အန်ရဲ့ရှေ့နေများစတင်အလုပ်အတွက်အာရှတွင် ၁၉၆၃။ ပာရှေ့နေများပထမဦးဆုံးတည်ထောင်ရုံးတွင်အာရှ ၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင်အခါ၊၎င်း၏ ရှေ့နေဖြစ်လာပထမဦးဆုံးအမေရိကန်ရှေ့နေ။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ်မှာရိဒ်မစ်ကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်ယုံကြည်ကြောင်း'မဖြောင့်ဖွင့်။ ဒါဟာရဲ့ကိုယ်ပိုင်။ ငါတို့သည်သင်တို့တစ်ထိပ်တန်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီအလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီအနီးတွင်မိတ်ဖက်နှင့်အတူ၎င်း၏ဖောက်သည်တလျှောက်လုံးအောင်မြင်သော ၁၂၅ နှစ်နည်းကိုစိုက်ပျိုးခံရမှသင်ဦးဆောင်အမျိုးသားဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီတစ်ခုအ ဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသော။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ်အဖြူအမှု၊ထောင်အတွက်နယူးယောက်မှာ ၁၉၀၁၊ရှေ့နေများသာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊လက်တင်အမေရိက၊ဥရောပ၊အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊အာဖရိကနှင့်အာရှရှိ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များမှာအများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကပိုင်စီးပွားဖြစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းအဖြစ်အစိုးရနှင့်ပြည်နယ်ပိုင်ဆိုင်သည့်အဖွဲ့အစည်းများ၊ပါဝင်ပတ်သက်။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ် ။ ။ ။ သည်တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောလေ့ကျင့်ပါးအားလုံးဒေသများတွင်ပြည်တွင်းဥပဒေနှင့်အချို့သောဒေသများရှိအဖြူကော်လာရာဇဝတ်မှုဥပဒေကို။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ်ဇွန်သူကဥပေဒရုံးကိုကျယ်ပြန့်အသိအမှတ်ပြုတစ်ဦးအဖြစ်ဦးဆောင်ပြည့်အဝဝန်ဆောင်မှုဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၊တရုတ်အတွက်ပေါ့များကိုသာလွန်ဥပဒေရေးရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းနှင့် ထင္လား။ ၏တစ်ဦးအဖြစ်ပထမဦးဆုံးပုဂ္ဂလိက ဥပဒေကိုကုမ္ပဏီ၊ကျွန်တော်အထင်ပေါ်ကျော်ကြားများမှာဖြစ်တဲ့ရှေ့ဆောင်အတွက်ပြန်လည်ထူထောင်နှင့်။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ်န့ သည့်နိုင်ငံတကာဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီအသိအမှတ်ပြုအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖန်တီးမှုချဉ်းကပ်မှုအရည်အသွေးနှင့်စီးပွားရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုရင်ဆိုင်နေရကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်။ အဆိုပါအလုပ်ကျွန်တော်တို့မကြာခဏအုတ်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အတူ ၇၅၀ ရှေ့နေနှင့်တကမ္ဘာလုံးအဝှမ်းကွန်ယက်များ၏ရုံးများ၊မုန့်ဖုတ် အကျင့်ကိုကျင့်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်အပေါ်။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ် သည်ထိပ်တန်းလွတ်လပ်သောဂျာမန်ဥပဒေကိုကုမ္ပဏီများထောက်ပံ့ပေးကြောင်းပြည့်စုံကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေအကြံဉာဏ်မှအလတ်စားကုမ္ပဏီများ၊ဗိုလ်မှူးကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်စက်မှုအုပ်စုများအဖြစ်ပြည်သူ့ကဏ္ဍ။ တိုင်းသိမ်းယူမှု၊တိုင်းစာချုပ်နှင့်အများဆုံး အငြင်းပွားမှုများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ပို။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ် တက္ကတစ်ဦးဖြစ်သည်ကမ္ဘာ့အပထမတန်းစားဥပဒေကိုကုမ္ပဏီ။ အတွက်လူသိများကျွန်တော်တို့ရဲ့လိမ္မာအလုပ်အတွက်အလွန်ရှုပ်ထွေးပြီးအရေးပါကြောင်းအရေးပါသည့်အပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်၊အကျွန်ုပ်တို့သည်ပူဇော်အမြင့်ဆုံးအဆင့်ဆင့်၏ထူးချွန်နှင့်အနံနှံ့အားလုံးကျွန်ုပ်တို့၏အလေ့အကျင့်နှင့်အထူး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်အများအပြားစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်သည်။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ်မူလေနရာ အ ပေါ်သို့တစ်ဦးကတိကဝတ်မှကယ်နှုတ်သံတရားစီရင်ဖို့ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်အပေါ်သူတို့ရဲ့အခက်ခဲဆုံးနှင့်အရေးကြီးအရေးပါပါတယ်။ ဖောက်သည်များဖွင့်ဖို့ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းအသင်း၏ရှေ့နေများကြောင့်ကျနော်တို့ဂရုတစိုက်နားထောင်ပြီးသူတို့ကိုပေးရန်နှင့်အတူရိုးရှင်းတဲ့အဖြေ-မဟုတ်ပါဘူးရုံပါ။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ်ပေါလု၊၊၊ကစ္စတပ် တဲ့ကုမ္ပဏီအပိုပြီးထက်ခြောက်လအရာရှေ့နေနှင့်အတူ၊ကွဲပြားနောက်ခံ၊ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၊အတွေးအခေါ်နှင့်အကျိုးစီးပွား၊သူပူးပေါင်းအတူဖောက်သည်ကူညီဖို့၊သူတို့ကိုအောင်နိုင်သူတို့၏အရေးအကြီးဆုံးဥပဒေရေးရာစိန်ခေါ်မှုများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ကြာမြင့်စွာရပ်တည်မှုဖောက်သည်င္သည္။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ်ယပ် ထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်ကမ္ဘာ၏အကြီးဆုံးဥပဒေကိုကုမ္ပဏီ။ ကျနော်တို့ပိုပြီးထက်ရှစ်ရာရှေ့နေများအတွက်ယ့်။ မှာ ၁၉၄၅ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်နှင့်အတူလမ်းပြသောရူပါရုံအကြောင်းကတိကဝတ်များ၊ထူးချွန်နှင့်ဓိမောင်းအောင်မြင်မှု၊ကုမ္ပဏီအပေါ်အလေးပေးအဆောက်တည်မြဲပြီးနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးရှိ။ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ်.
အခုတော့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုထွက်တွက်ဆဖို့ပြန်သွားဖို့ ၁၃ ကိုဝယ်ယူ၏။ ဒီအခွင့်အလမ်းများဆွဲဆောင်များအပြားအိမ်ပိုင်ရှင်။ အပေါင်းတို့၊ပြီးနောက်တဆယ်၏ပမာဏကိုသုံးစွဲသည်အလွန်ကောင်းလျော်ကြေး။ ဒါဟာထွက်လှည့်ကြောင်းရုရှားအတွက်သင်သာကိုပေးပြည်နယ်၊ဒါပေမယ့်လည်းတစ်ခုခုရရှိရန်ပြန်လာအတွက်။ ရွေးချယ်စရာများသကဲ့သို့အတူတူပုံမှန် အရောင်းအဝယ်၊နှင့်အပေါင်ခံဘို့အ။ သို့သော်မည်သည့်ကိစ္စများတွင်၊သင်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများသင်တို့ထံမှ။ ဘယ်လိုပြန်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကိုဝယ်ယူထံမှ။ အရာကိုလိုအပ်သည်? အဘယ်ကြောင့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြင်ဆင်ပါ။ ဒါဟာသတိပြုသင့်မှာတစ်ချိန်ကထိုကဲ့သို့သောအခွင့်အလမ်းကိုစိုးရိမ်ပူပန်မဟုတ်။ ပြား၊ဒါပေမယ့်လုံးဝကိုကၽြန္ေတာ္တို။ ဖြတ်တောက်များအတွက်အတုိက္ခန္း(သူတို့ဟုခေါ်ကြသည်ခံေျမ)လက်ခံရရှိနိုင်ပါတယ်အားဖြင့်ခပ်သိမ်းသောအခွန်ထမ်းခဲ့သူ။ ဒါကဖြစ်ပါသည်၊သူငွေပေးချေဝင်ငွေအခွန်။ ဒီအယူအဆ၊ဓလေ့ထုံးတမ်းနားလည်ရန်၊တစ်ဦးအုပ်ချုပ်အဖြစ်၊တစ်ဦးတရားဝင်အလုပ်သမားနိုင်ငံသား။ ဒါပေမယ့်မလုပ်ခဲ့ဘူးသောသူတို့မည်သည့်ဝင်ငွေကြေငြာ၊အခွင့်အရေးရှိဖို့လက်ခံဖြတ်။ ထို့အပြင်ကြီးမားတဲ့ဝယ်ယူမှု၏ပုံစံအတွက်အိမ်ခြံမြေလိမ့်မည်အာရုံကိုဆွဲဆောင်၏အခွန်သည္။ နှင့်ဤအစဉ်အမြဲမကောင်း။ စင်လည်းအမှန်ပြန်သွားဖို့ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းသည်။ သာသူတို့အဘို့စာရင်းကိုအရာအားလုံးအတွက်လိုအပ်သောစစ်ဆင်ရေးအတန်ငယ်တိုးချဲ့။ ဒါပေမယ့်ပြဿနာတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ အဘယ်ကာလအချိန်သင်အကြံပေးဖို့သဘောတူ ဤမေးခွန်းနှင့်အတူ။ အရခေတ်ဥပဒေများ၊သင်အဘို့အမေးနိုငျအရာဝတ္တုများအတွက်တိုက်ခန်းတစ်ခန်းသုံးနှစ်အတွင်းအရက်စွဲအရောင်းအဝယ်၊ဒါပေမယ့်မအကြာတွင်။ သာထိုသို့သောဓလေ့များမှာအားဖြင့်သာတည်သည့်အခွန်ဥပဒေများတွင်ရုရှားနိုင်ငံ။ ဒါပေမယ့်အလေ့အကျင့်အတွက်၊အရာအားလုံးအတန်ငယ်ကွဲပြားခြားနားသည်။ ကၽြန္ေတာ္ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ႏိုင္ပါဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကအတွက်အိမ်ခြံမြေအရောင်းအဝယ်။ လွယ်ကူပါတယ်။ ရုံအလုပ်တစ်ခုကိုတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးသကဲ့သို့။ ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်နိုင်ငံသားများအကြံပြုအစည်းအဝေး၏အဆုံးအခွန်အစီရင်ခံကာလအတွင်း။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့၊တချို့ကိုအချိန်ကြာမြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်သင့်အမှု၊အဖြစ်လွှဲပြောင်းရန်ငွေ။ အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးထိုဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်စေကြောင်းတောင်းဆိုရန်သို့မဟုတ်ငြင်းဆန်။ ခန့်မှန်းခြေ ၁၊၅-၂ လ။ နှင့်ထို့အပြင်၊အဲဒီအကြောင်းကြာခြောက်ဆယ်ဖို့ပိုပြီးရက်ပေါင်းလွှဲပြောင်းထုတ်ယူဆင်ခြင်ခြင်း။ အဆိုပါရလဒ်-အရာအားလုံး၊သင်သည်မကျင့်လျှင်၊အကောင့်သို့ယူအဘိတ်၏စာရွက်စာတမ်းများ၊ဒါကြောင့်အကြောင်းလေးလ။ ဒါကြောင့်၊သင်ဘယ်လိုအကြောင်းစဉ်းစားနိုင်ပြန်လာပြီးကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေအခွန်ကနေဝယ်ယူတိုက်ခန်းတစ်ခန်း၊သင်စတင်သင့်ဖြေရှင်းသည်ဤအလုပ်တခုကိုအနှေးနဲ့အမြန်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ပထမဦးဆုံးနှင့်အများဆုံးအရေးကြီးစာရွက်စာတမ်း၊ အရာအတွက်အသုံးဝင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေး-ဒါဟာအထောက်အထားကဒ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်၊တစုံတယောက်သောသူသည်အမှုကိုပြုလိမ့်မည်၊ဒါပေမယ့်အခွန်အာဏာပိုင်များအပြင်းအထန်တောင်းဆိုကြောင်းတင်ပြရမယ်သင့်ရဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မရှိဘဲပျက်ကွက်။ ပိုပြီးအတိအကျ၊ပုံမှန်အစည်းအဝေးကော်ပီကူး။ စာမျက်နှာအားလုံးဖြစ်ရမည် နှင့်တွဲရန်အဓိကစာရင်းများစာရွက်စာတမ်းများ။ မရှိရင်အထောက်အထားကဒ်၊သင်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေအဖြေကိုဘယ်လိုပြန်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကိုဝယ်ယူ၏။ သင်ရိုးရှင်းစွာအဖြစ်ငြင်းဤကိစ္စတွင်အတွက်။ အဆိုပါနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၏အပြည်၊ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်၊အဘယ်သို့လိုအပ်သည်များအတွက်မည်သည့်အရောင်းနှင့်စစ်ဆင်ရေးအတွက်ရုရှားနိုင်ငံ။ အာရုံစိုက်ဖို့နောက်ထပ်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့တကယ်တော့တစ်ဦးကကြေညာချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဖြစ်ရမည်မဖြစ်မနေရေးသားပြုစုတင်ပြရန်၊အခွန်အာဏာပိုင်များ။ သင်ပြောနိုင်အတွက်အခမဲ့။ အရခေတ်ဥပဒေများ၊သင်ပြန်လာအတြက္သာျမှဝယ်ယူ၏အခန္း(၁၃ ထုတ်ယူ)ကိုသာလျှင်အဝယ်တာင္း။ ဒါကြောင့်မဖြစ်မနေသတ်မှတ်ပေးဖို့အတွက်၎င်း၏သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုထပ္မံယခင်အရှင်၊အဖြစ်ကောင်းစွာသင့်ရဲ့အချက်အလက်၊အချက်အလက်အကြောင်းအတုိက္ခန္းနှင့်၎င်း၏ကုန်ကျစရိတ်။ ဖို့မေ့လျော့မနေပါနဲ့ချိတ် အသေးစိတ်အချက်၏အကောင့်ကိုအရာဖြစ်အောင်လုပ်ထိုက်တန်တစ်ဦးပြန်အမ်း။ လျှင်ဤသည်မဖြစ်၊ထိုအခါသင်ရှိသည်လိမ့်မည်အခွေပျောက်ဆုံးစာတမ်းများ၊သို့မဟုတ်၊အဖြစ်မကြာခဏဖြစ်ပျက်၊သင်ငြင်းဆန်တစ်ထုတ်ယူဆင်ခြင်ခြင်း-သင်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မည်ဖိုင်ကိုနှင့်အတူလျှောက်လွှာစာရွက်စာတမ်းများမှအခွန်မှအလွန်အစအဦး။ လာမယ့်ဘာကိုဖွင့်။ ဘယ်လိုပြန်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကိုဝယ်ယူထံမှ။ အမိန့်မှအခွန်အာဏာပိုင်ဒါခေါ်ခွန်ကြေညာ။ ကဟုခေါ်သည် ၃-။ သင်ရှိသည်ကိုသာ၎င်း၏မူရင်း၊အမှတ်မိတ္တူ။ အဘယ်သည်ဤအစီရင်ခံ။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုထပ္မံသင့်ဝင်ငွေ။ လျှင်သင်ကိုယ်အဘို့အလုပ်မလုပ်၊သင်ရှိသည်လိမ့်မည်အစေပါင္းမ်ားစြာ။။။။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်၊သင်ဆက်သွယ်နိုင်အလုပ်ရှင်များအတွက်ကူညီ။ ဒါပေမယ့်အလေ့အကျင့်ပဲ၃-ပြည့်စုံသည်အားဖြင့်အသီးအသီးအခွန်ထမ်း။ တကယ်တော့၊ဒါကြောင့်ကဲ့သို့ခက်ခဲသည်မဟုတ်ဒါကြောင့်ပထမတစ်ချက်မှာထင်ရ။ အဘယ်သူမျှမနေပါစေအဘယ်သို့ပုံစံအရေး၏ဝယ်ယူရရှိမှုအိမ္ရာခဲ့ရာအရပ်ဖြစ်ရန်(ပေါင်နှံသို့မဟုတ်ရိုးရှင်းပြီးဝယ်ယူရောင်းချခြင်း)၊သင်လိုအပ်ကိုအတည်ပြုရန်သင့်ဝင်ငွေ။ ဒီနေရာမှာလိုအပ်သည်ပစ္စုပ္ပန်အဆိုပါလက်မှတ် ပုံစံ ၂-။ အဖြစ်အတိတ်အတွက်အမှု၊သာမူရင်းစာတမ်းလိုအပ်နေပါသည်။ လျှင်သင်ကိုယ်အဘို့အလုပ်မလုပ်၊သင်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်လွတ်လပ်စွာဖြည့်စွက်ဤအချက်အလက်။ ရှိတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးအလုပ်ရှင်? အခါအဆိုပါစာရင္းဦးစီးဌာန၏ကုမ္ပဏီ၊သင်ပေးလိမ့်မည် ၂-။ နှင့်အတူဤစာရွက်စာတမ်းရှိပါတယ်၊အဘယ်သူမျှမပြဿနာတွေအတွက်၊နိယာမ။ ကြောင်း၏ထုတ်လုပ်မှုအဆိုပါလက်မှတ်နိုင်ပါတယ်အချို့ကိစ္စများတွင်အချို့သောအချိန်ယူနိုင်ပါသည်? ပြီးပြည့်စုံစာရင်းများအားလုံးအမျိုးမျိုးအတွက်အလှူငွေအကုန်နီးပါးဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့၊မှတစ်ခုဖြစ်သောအကြောင်းကိုမေ့လျော့တော်မသင့်သည်အရေးကြီးဆုံးအရာ-အကြောင်းသတင်းအချက်ကောက်ချက်ချအရောင်းအဝယ်။ တချို့မပါဘဲရြက္စာတမ္းမရတဲ့အရာဝတ္တုများအတွက်ဝယ်ယူ၏။ ဒါကြောင့်၊အဘယျသို့နေရာလေးကိုအတွက်လာ။ အပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံး၊ဤစာခ်ဳပ္၏ရာင္းရန္ရွိသည္။ ဒါဟာအကြံပြုလိုလက်မှတ်ထိုးရန်တစ်ဦးအပိုဆောင်းမူရင်းမိတ္တူအဘို့အထုတ်ယူ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်၊အလုံလုံလောက် မိတ္တူ။ ထိုအခါသင်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်လက်မှတ်တစ်ခု၏ပိုင်ဆိုင်မှု၏အခန္း။ ဒါကြောင့်မပါဘဲ၊ဒါကြောင့်အဘယ်သူမျှမသဘာဝကျပါတယ်လျှောက်ထားရန်အဘို့အထုတ်ယူ။ ထို့ကြောင့်၊သငျသညျ ရန်စောင့်ဆိုင်းဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်နေစဉ်များအတွက်အမှီတိုင်အောင်သင်သည်ဤလက်ခံရရှိစာရွက်စာတမ်း။ ပုံမှန်အတိုင်းမိတ္တူများ၏လက်မှတ်၊အမှတ်ပြုမခံ၊ပြုလိမ့်မည်။ ပေမဲ့၊အဖြစ်အလေ့အကျင့်ရှိုး၊နိုင်ငံသားအများဆုံးမကြာခဏ နှင့်အလုပ်တစ်အာမခံချက်သည်။ လက်ခံဖြတ်ပိုင်းများအတွက်ငွေပေးချေမှု၊ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းပေါ်လက်ခံရရှိရန်ပုံငွေ၏ယခင်ပိုင်ရှင်များ-ဤအမှုအလုံးစုံလည်းဖြစ်မှပူးတွဲကြေငြာနှင့်အပလီကေးရှင်း။ သင်နိုင်အောင်မိတ္တူ။ အဓိကအရာတစုံတခု-သေချာအောင်အားလုံးစာရွက်စာတမ်းများရှိသည် ။ ဆိုရင်သင်ဝယ်ထားတဲ့တိုက်ခန်းများအတွက်၊တစ်စုံတစ်ဦးမှသက်သေပြ၏လက်ျာဘက်တစ်ဦးမှထုတ်ယူဆင်ခြင်ခြင်းသည်နီးပါးမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ရုရှားနိုင်ငံ။ အားလုံးသတင်းအချက်အသင့်ကြောင်းညွှန်ပြနေတယ်ဝယ်။ ယခုအတော်လေးမကြာခဏရှိအပေါင်ခံ။ ဘယ်လိုပြန်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကအတွက်ဤကိစ္စတွင်အတွက်ဝယ်ယူ။ ဒါဟာမခက်ခဲလွန်းဒီလိုလုပ်ဖို့။ အားလုံးပြီးနောက်၊သင်ရုံအထက်စာရင်းအချို့မှစာရွက်စာတမ်းများ။ ရှိပါတယ်နှစ်ဦးသာ၏။ ပထမဦးဆုံးအပေါင်ခံ။ ဖြစ်၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ဝယ်ယူခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းဖြစ်ပါတယ်၊ဒါကြောင့်လုံလောက်တဲ့သို့မဟုတ်မူရင်း၊သို့မဟုတ်လက်မှတ်မိတ္တူ။ မပါဘဲဒီအပြန်အမ်းငွေထုတ်ယူဆင်ခြင်ခြင်း မည်မဟုတ်။ ဒုတိယအဖြတ်များအတွက်ငွေပေးချေအကျိုးစီးပွားအပေါ်အပေါင်ခံ။ အတူကျန်ပြန်လာအတွက်၊တဆယ်လိမ့်မည်ငြင်းရင့်ကျက်သည်အထိ။ အကောင့်သို့ယူကိုအသာပုတ္ပါ။ အဘယ်သူမျှမ ကိုက်။ မူအရ၊ရှိသမျှသောင့်။ မပိုစာရွက်စာတမ်းများလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ပေမယ့်ချွင်းချက်ရှိပါတယ်။ ဘယ်လိုပြန်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကိုဝယ်ယူထံမှ။ အချို့ကိစ္စများတွင်၊သင်တောင်းဆိုချက်ကိုအောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများ၊ဒါပေမဲ့သူတို့မသင္မေနရ(အကြံပြုလိုတယ်ဖို့ပြင်ဆင်တော်မူနှင့်ပစ္စုပ္ပန်အတွက်သူတို့ကိုတိုးသည်):အားလုံးနှင့်အတူအထက်ပါစာရွက်စာတမ်းများ၊သင်လျှောက်ထားရန်အခွန်အာဏာပိုင်မှာသင့်၏နေထိုင်ရာအရပ်။ သင်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်တစ်ခုထုတ်ယူဆင်ခြင်ခြင်း။ ပါကစနစ်တကျပြင်ဆင်၊နောက်ပြဿနာများရှိလိမ့်မည်နှင့်မျှမပျက်ကွက်။.
လူနေမှုဧရိယာ၌အစီအပိုင်ရှင်များအသင်း('ထည့္ပါ')ထင်ရစေခြင်းငှါငှဖို့အလားအလာသဘောအသိုင်းအဝိုင်း၊သို့သော်လည်းအတွက်မည်သည့်အသိုင်းအမြဲရှိပါတယ်၊အလားအလာခဲ့ကြသည်။ ကိုးကားအ:ရှင်ရဲ့အသင်းထုတ်ပေးလမ်းညွှန်လက်စွဲစာအုပ်များအကြောင်း၊အားလုံးစေ့စေ့ဘို့နှင့်ရည်ရွယ်ချက်၊အစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတွက်နေထိုင်ကြောင်းရပ်ရွာ။ တစ်စုံတစ်ဦးလျှင်သတို့ချိုးဖောက်ကြည်၊ထိုအခါထောက်အ ၏ဘာသာစကားတွင်အတိအ နိုင်၏ထိရောက်သောပုံစံ။ ပြပွဲ၏သက်သေအထောက်အထား:ဖျောင်းဖျသည်လွယ်ကူသည့်အခါသင်သက်သေပြပေး။ ဥပမာအားဖြင့်၊ကိစ္စပါဝင်ပတ်သက်နေလည်းလွဲချော် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအခကြေးငွေ၊ထိုအခါထည့်သွင်းကူးငြမ်ားကိုသတိထားမိထိုစာနှင့်အတူ။ ထိုနည်းတူ၊အခါသင်၏ထည့္ပါတိုင်ကြားစာများ၊သင်စဉ်းစားရန်လိုပေမည်ပေးပို့ခြင်းကနေတဆင့်မှတ်ပုံတင်အၾကိဳက္ဆံုး၊အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်သိမ်းထားအတွက်မိတ္တူ၏မှတ်တမ်းများ။ ဒီတော့အကျင့်ကို၊သင်အကြာတွင်ပြပွဲကြောင်းအဆိုပါအိမ်ပိုင်ရှင်သင္းမွပြဿနာကိုသတိပြုမိ။ စည်းရုံးသိမ်းသွင်း၊အလွဲသုံးစားမနေပါနဲ့:လူ့ပဋိပက္ခနှင့်ပါဝင်ပတ်သက်နိုင်ပါအားကြီးသောစိတ်ခံစားမှု၊နှင့်အငြင်းပွားမှု၌တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူတစ်အိမ်ပိုင်ရှင်များအသင်းအသိုင်းအဘယ်သူမျှမခြားနားသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်မှု၏အမွီပေးစေခြင်းငှါအချို့ပုံစံ လွှတ်ပေး၊ဒါပေမယ့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာသှေးဆောငျ၏အဓိပ္ပါယ်အနိုင်ရတစ်စုံတစ်ဦးကကျော်သောနီးပါးမဖြစ်နိုင်တိုတ္ဆက္ၾသို့မဟုတ်စိတ်ပျက်။ ပိုဆိုးဆဲ၊ခြိမ်းခြောက်ဘာသာစကားမဆိုစာဖြစ်နိုင်သည်တစ်ဦးဆိုးရွားသောတုံ့ပြန်မှုထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အတွဲ၏ရာဇဝတ်သားတစ်ဦးတိုင်ကြားချက်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊မမေ့မလြော့အပေးအတွက်အဖြေတစ်ခုထည့္ပါစာပြောပြပါသည်အိမ်ပိုင်ရှင်များအသင်းသင်လိုချင်သည့်အရာကိုအဲဒီလိုလုပ်ဖို့သူတို့ကိုသင့်အဘို့အ။ အများအားဖြင့်၊ အငြင်းပါဝင်တဲ့အိမ်ပိုင်ရှင်အသင္းကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်အားဖြင့်အရွင္ဥ။ သို့သော်၊လျှင်အသင်းပိုင်ရှင်သရုပ်ဆောင်ကြောင့်လူသိများအတွက်မျှသို့မဟုတ်နိုင်လိုမင်းလမ်း၊ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုပေမည်ရတဲ့၏ဖြစ်နိုင်ချေရှေ့နေ။ (ညီ၊သတင်းအချက်အလက်နေရာမဖြစ်သင့်ဆိုသကဲ့သို့အမှန်တကယ်ဥပဒေကြောင်းအရအကြံဉာဏ်)။ ဆိုတဲ့အချက်ကိုအရှင်သည်ရှေ့နေကကိုယ်စားပြုစေခြင်းငှါ။က်န္တဲ့တိုင်ကြားရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်ဖြစ်နိုင်သည်ကာကွယ် တုံ့ပြန်မှုအကြောင်းဆီလျော်ပြီးတရားမျှတတိုင်ကြားစာ။ သင်တန်း၏၊လျှင်တရားစွဲဆိုလိုအပ်သည်ဖြေရှင်းရန်ကိစ္စ၊နောက်ရှေ့နေနိုင်ရေးဆွဲအမှုနှင့်ထောက်ခံသူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှရလဒ်။ အဖြစ်နှင့်အတူမည်သည့်အငြင်းပွား၊များအတွက်အခွင့်တုံသုတ်မဖြစ်သင့်ထွက်အုပ်ချုပ်သည်။ ဆွေးနွေးပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းတက်ကြွစွာနားထောင်နိုင်ဖော်ထုတ်နောက်ကွယ်ကတွန်းအားပြဿနာ၊နှင့်အတူတကွ၊တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ပါတီများပြောင်းလဲနိုင်သည်၊သူတို့ရဲ့အပြုအမူ။ ကံမကောင်းစွာ၊အချို့သောလူတွေကရိုးရိုးမဟုတ်ပါဘူးနားထောင်ရန်။ ထိုသို့ဖြစ်လာသည့်အခါ၊ထို့နောက်ရေးသားခြင်းထည့္ပါ တိုင်ကြားစာစေခြင်းငှါလုံလောက်။
င္ငံျခားတရုတ်နိုင်ငံအတွက်ဆုံးဖြတ်စေခြင်းငှါလက်ထပ်ဖို့တရုတ်။ အများစုဟာနိုင်ငံခြားတန်ချိန်ရင်ဆိုင်ရအခက်အခဲမီတစ်ထောင်လက်မှတ်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ ဒီမှာငါတို့ကိုဆောင်ခဲ့လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများကိုလုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ပင်စည်းမျဉ်းအပေါ်လက်ထပ်ပြီးရတဲ့အတွက်တရုတ်၊ဒါကြောင့်သင်နဲ့သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်နိုင်လိမ့်မည်လက်ထပ်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံအတွက်နိမ့်ဆုံးနှင့်အတူလုပ်ရတဲ့။ လျှောက်ထားခြင်းအဘို့လက်မှတ်၏ တရုတ်နိုင်ငံအတွက်၊ကအရေးကိုရောက်စေဖို့အောက်ပါပစ္စည်းများလျှောက်ထားခြင်းတဲ့အခါမှာသင့်ရဲ့အသံရုံးလီႏုိင္ငံ:ဒါကြောင့်ကိုယ့်လိုပဲမဖြစ်နိုင်ကျွန်တော့်အတွက်ငါ့တြီးယားနိုင်ငံကူးလက်မှတ်။ ဆိုေသာစာရွက်စာတမ်းပျောက်ဆုံးနေမှငါ့အပလီကေးရှင်းခဲ့သည်ရဲရှင်းလင်းလက်မှတ်တရုတ်ထံမှ။
အပေါ်နှစ်ဆယ်ကိုးဇွန်လ ၂၀၁၈၊တရုတ်အမျိုးသားပြည်သူ့ ကြန္ဂရက္(ျမွာက္သည္)ထုတ်ဝေတဲ့မူကြမ်းရေးတစ်ဦးချင်းစီ၏ဝင်ငွေအခွန်ဥပဒေ(မှာရှိတဲ့)။ ၏အသေးစိတ်အချက်မူကြမ်းပြင်ဆင်ခဲ့သည်ဖုံးလွှမ်း ရဲ့အချက်ပေးအတွက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အပေါ်သုံးဆယ်တသဂုတ္လ ၂၀၁၈၊အမွာက္သည္အတည်ပြုမူကြမ်းရေးကိုတရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဥပဒေ၊နှင့်အတူကိုပြင်ဆင်ထိရောက်သောဖြစ်လာမှ ၂၀၁၉ ဇန္န။ အသစ်မှာရှိတဲ့ဥပဒေကိုမိတ်ဆက်သည်၏"ဌာနေ"နှင့်"မသူ"။ အောက်ဥပဒေသစ်၊ဘယ်သူတစ်ဦးချင်းစီဖြစ်ကြောင်းအတည်အတွက်၊တရုတ်ပြည်မတည်နှင့် သာတရုတ်ပြည်သည် ၁၈၃ ရက်သို့မဟုတ်ပိုပြီးပြက္ခဒိန်နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း၊အဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနေကြတယ်တရုတ်နိုင်ငံအခွန်ခံများမှဘာသာရပ်ဖြစ်ကြမှာရှိတဲ့အပေါ်သူတို့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဝင်ငွေ။ လက်ရှိမှာရှိတဲ့ဥပဒေဟုတ္ဘူးလားအမ-အတည်တကျစီ(အများအားဖြင့်အဖြစ်ရည်ညွှန်း"ႏိုင္ငံျခားေဟာင္ေကာင္၊မကာအိုနှင့်ဝမ်ဒေသခံများ")ရှိ အတွက်တရုတ်ပြည်မကြီးအဆုံးဖြတ်ရန်နိုင်ရန်အတွက်တစ်ဦးချင်းစီရဲ့နေထိုင်ခွင့်အဆင့်အတန်း။ အသစ်သတ်မှတ်ချက်များများအတွက်ကျေနပ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအထံတော်စမ်းသပ်ခြင်း၏၁၈၃ရက်အတွက်ပြက္ခဒိန်နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ပါသည်ပိုပြီးတင်းကြပ်ထက်လက်ရှိဥပဒေ။ ဤပြောင်းလဲပစ်ရန်မျှော်လင့်နေသည်သိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်မှုင္ငံျခားေဟာင္ေကာင္၊မကာအိုနှင့်ဝမ်ဒေသခံများ၏စည်းကမ်းချက်များ၌သူတို့အခွန်အနေအထားနှင့်အလုပ်အကိုင်အစီအတွက်တရုတ်ပြည်မ။ ဤရွေ့တစ်ဦးချင်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိမရှိသူတို့ဖြစ်ပေါ်စေမည်တရုတ်နိုင်ငံအခွန်အတွဲတာဝန်ဝတ္တရားများအပေါ်သူတို့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဝင်ငွေဆိုရင်သူတို့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအထံ၌တရုတ်ပြည်ရောက်ရှိသို့မဟုတ်ကျော်လွန် ၁၈၃ ရက်အတွက်ပြက္ခဒိန်နှစ်တစ်နှစ်။ ဒါဟာသတိပြုဖို့အရေးကြီးကြောင်း၊လက်ရှိတရုတ်နိုင်ငံအခွန်အကောင်အထည်ဖော်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းရှိပါတယ်"ငါးနှစ်အုပ်စိုး"ႏိုင္ငံျခားေဟာင္ေကာင္၊မကာအိုနှင့်ဝမ်။ ဒီအုပ်ချုပ်ထောက်ပံ့မ-တရုတ်ရရှိဝင်ငွေ(အီး။ ဂရမ်။ အလယ်မှဆင်းသက်လာပြည်ပအဖွဲ့အစည်းနှင့်ဝင်ငွေမှလွှဲပြောင်းရေခြားမြေခြားအိမ်ခြံမြေ)စေခြင်းငှါကင်းလွတ်တရုတ်ထံမှအခွန်ကောက်ခံမယ်ဆိုရင်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်နေထိုင်တရုတ်ပြည်မကြီးအဘို့အပိုထက်ငါးနှစ်ဆက်တိုက်အပြည့်အဝနှစ်မဟုတ်လျှင်၊ထိုကဲ့သို့သောဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်ခြင်းအားဖြင့်တရုတ်ကုမ္ပဏီများသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်း။ ဆိုရင်အသစ်မှာရှိတဲ့အကောင်အထည်ဖော်နည်းဥပဒေအဖြစ်ထုတ်ပြန်လားတူအ"ငါးနှစ်အုပ်ချုပ်"ေ င္ငံျခားေဟာင္ေကာင္၊မကာအိုနှင့်ဝမ်နေထိုင်သူအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနေကြတယ်တရုတ်နိုင်ငံအခွန်နေထိုင်ပေမယ့်တရုတ်နိုင်ငံအခွန်နေထိုင်သူများအဘို့အပိုထက်ငါးအပြည့်အဝနှစ်ဆက်တိုက်နှစ်၊သူတို့နေဆဲအခွန်မှကင်းလွတ်ခွင့်အတွက်တရုတ်အပေါ်သူတို့မ-တရုတ်ရရှိလာသောဝင်ငွေ။ သို့သော်၊ဤသို့အားဖြင့်ရှင်းလင်းအသစ်အကောင်အထည်ဖော်။ သို့ရာတွင်၊အဆိုပါနှင့်နှိုင်းယှဉ်ရိွေငါးနှစ်အုပ်ချုပ်၊ဒါကြောင့်အများကြီးပိုခက်ခဲများအတွက်မ-တရုတ်အမျိုးသားအနေထက်လျော့နည်းသည် ၁၈၃ ရက်တွင်တရုတ်ပြည်မကြီးအတွင်းငါးပြက္ခဒိန်နှစ်အထက်ဆက်နေရန်အတွက်တရုတ်ပြည်မကြီးထက်လျော့နည်းများအတွက်အပြည့်အဝနှစ်အောက်ရှိအုပ်ချုပ်မှု(ဆိုလိုသည်မှာနေ၏အပြင်ဘက်တွင်တရုတ်ပြည်မထက်ပိုပြီးများအတွက်ရက်သုံးဆယ်ပတ်လုံးအတွက်ခရီးတစ်ခုတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုထက် ၉၀ တိုးလာကာလ၏တဦးတည်းအတွက်ငါးပြက္ခဒိန်နှစ်)။ အသစ်မှာရှိတဲ့ဥပဒေည့္ရႈႏိုင္မလေးမျိုးအလုပ်သမားများ၏ဝင်ငွေအပါအဝင်လုပ်အားခနှင့်လစာ၊အခေၾကးေေကိုယ္ေရးကိုယ္တာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊စာရေးသူ၏လုပ်ခနှင့်မင်းမျိုးမင်းနွယ်၊တဦးတည်းသို့အမျိုးအစား(မျာအဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်"စည်းဝင်ငွေခွန်")။ တွက်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာန်ဆောင်မှုများ နှင့်မင်းမျိုးမင်းနွယ်နိုင်နုတ်အားဖြင့်နှစ်ဆယ်တွက်ချက်ရန်အရိတ္မ်ားျဝင်ငွေ။ အထူးသဖြင့်၊စာရေးသူ၏နိုင်နုတ်အားဖြင့်လေးဆယ်လေးမှာရောက်ရှိလာဖို့အရိတ္မ်ားျဝင်ငွေ။ ဤအတောအတွင်း၊ဝင်ငွေမှဆင်းသက်လာတစ်ဦးချင်းစီစက်မှု၊စီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်လည်ပတ်မှုလှုပ်ရှားမှုများကို၊နှင့်ဝင်ငွေမှဆင်းသက်လာစာချုပ်ချုပ်သို့မဟုတ်ငှားရမ်းစစ်ဆင်ရေးအားဖြင့်မည်သည့်လုပ်ငန်းသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းများမှာသွေးစည်းဝင်ငွေခွန်မှဆင်းသက်လာ။ အခွန်နှုန်းဇယားအစည်းဝင်ငွေနှင့်ဝင်ငွေမှဆင်းသက်လာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစစ်ဆင်ရေးဆက်လက်ရှိနေသူများအဖြစ်အတူတူပင်တွင်ဖော်ပြထားသောကျွန်ုပ်တို့၏အခွန်အချက်ပေးဇူလိုင်လ၏၂၀၁၈။ ယင္းအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်အတွက်စည်းဝင်ငွေခွန်ယန္တရား၊တိုးမြှင့်ခွန်ကင်းလွတ်ခုံပမာဏနှင့်မိတ်ဆက်ပေးတိကျတဲ့အပိုဆောင်းအခွန်ရှောင်ဖြတ်တောက်ခြင်းအတိုင်း၊အဆင့်အတန်းများနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအမည်ဖြင့်စည်းအဆိုပါပြည်နယ်ကောင်စီနှင့်ကမ်းလှမ်းမှုနှင့်အတူမွာက္သည္မြဲတမ်းကော်မတီအတွက်စံချိန်တင်။ အသေးစိတ်ကိုအောက်မှာ"ဆိုျပြန်လည်အချို့သောအခွန်အတွဲသတ်မှတ်"၊"ချက်ကိုထည့်သွင်းဖို့အချို့အပိုဒ်အခွန်ရှောင်ရှားခြင်း"နှင့်"တိုးတက် တို့တွင်ပူးပေါင်းသက်ဆိုင်ရာပါတီ"ကျန်ကြွင်းသူများအဖြစ်အတူတူပင်တွင်ဖော်ပြထားသောကျွန်ုပ်တို့၏အခွန်အချက်ပေးဇူလိုင်လ၏၂၀၁၈။ ထိရောက်သောနေ့စွဲအသစ်မှာရှိတဲ့ဥပဒေတစ်ခုဖြစ်သည်ဇန္နဝါ ၂၀၁၉။ တတိုဘာလ ၂၀၁၈ သုံးဆယ်-တဇင်ဘာ ၂၀၁၈၊လစာနှင့်လစာဝင်ငွေခွန်နုတ်ယူနိုင်ပါတယ်အားဖြင့်လစဉ်ကင်းလွတ်ပမာဏကို ၅၊၀၀၀ အတူအခြားသီးခြားဖြတ်ပြီးစရိတ်လျှော့ချခြင်းအားဖြင့်။ နှစ်ခုစလုံးအလုပ်ရှင်နှင့်ဝန်ထမ်းများကြိုတင်ပြင်ဆင်သင့်သည်များအတွက်စိန်ခေါ်မှုများနှင့်အဆောင်အသစ်မှာရှိတဲ့ဥပဒေနှင့်အနီးကပ်အာရုံစိုက်မယ့်အသစ်အကောင်အထည်ဖော်အုပ်ချုပ်နှင့်အလှန်နှင့်အခြားအခွန်စည်းမျဉ်း။ ဆက်လက်ပေးချက်များအတွက်ကြောင့်ပါ။ လိုအပ်မယ်ဆိုရင်အကူအညီမှဆက်စပ်။၊ဤကျေးဇူးပြုပြီးဆက်သွယ်သင့်ဒေသခံ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်တဦးတည်းရဲ့အဆက်အသွယ်။.
တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီအသင့်ညှိုးနွမ်းသို့သမိုင်းငြိမ်းချမ်းစွာရှောင်ရှား၊အကြမ်းဖက်မှုနှင့်လူမှုရေးမငြိမ်သေးအဖွဲ"အခုအချိန်အချလိုက်ရှင်းလင်းသော:မရူးပါတီသို့စတင်ဒီခရီးကိုမသင်ခွင့်ပြုေင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲကင်းမဲ့ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းနောက်ဆုံးရည်မှန်းချက်ထုံ၏စိတ်ထဲတွင်လူ။"၁၉၇၀ နှောင်းပိုင်း၊တရုတ်နိုင်ငံက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္အပဳျပင္ေျပာင္းလဲအဓိကဒြပ်စင်တွေဟာပြန်လည်အအိမ်ေထာင်စုထုတ်လုပ်မှုစနစ်တွင်ကျေးလက်တရုတ်ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်းတစ်ဦးချင်းစီမိသားစုများ၏ထိန်းချုပ်မှုကိုယူခြင်းငှါသူတို့၏လယ်ယာစိုက်ပျိုးဖွင့်လှစ်ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေး၊စိုက်ပျိုးသို့သွားကြဖို့အမြို့မြို့အလုပ်ရှာ။ ၁၉၉၀ ခုနှစ်အစောပိုင်း၌၊အမြင်ကြောင်း။ အဖွဲ့ဝင်များ၏အဆိုပါတရုတ်လူ့အခွင့်အရေး ရှေ့နေအုပ်စု၊မတ် ၈၊၂၀၁၉ လူ သည်ရှေ့နေတစ်ဦးအခြေစိုက် ၊ိုင္ငံ ။ ၊ဇန္နဝါရီ ၃၀၊၂၀၁၉ အပေါ်ဒီဇင်ဘာလ ၁၀၊၂၀၁၈၊၏အခါသမယအပေါ် ၇၀ နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်၏အရေးကြေညာလူ့အခွင့်အရေးနှင့် ၂၀ နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်။ သားေ ၊ဇန္နဝါရီ ၁၃၊၂၀၁၉ ရဲ့အစမ်းဖွင့်လှစ်ယနေ့(ဇန်နဝါရီ ၁၄၊ဘေဂျင်းအချိန်ကာလ)မှာ ခံတရားရုံး၊ပြည်နယ် ။ -အရေး ။ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁၊၂၀၁၈ တရုတ်နိုင်ငံသည်လမ်းဆုံလမ်းခွမှာ။ သမိုင်းကမှတ်မိနေလိမ့်မည် ၂၀၁၈။ မတ်လအတွက်၊အုတ်ကျင်းပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းပုံအဖို့လူတိုင်းရဲ့ ၊အလမ်း။ ၊မတ်လ ၁၂၊၂၀၁၉ အဖြစ်ကွန်မြူနစ်ပါတီပြဲဒီနှစ်"နှစ်ခုအစည်းအဝေး"၊ဘေဂျင်းတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတို့စိတ္ခဲ့သည်ထားထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်အားဖြင့်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်၊မတ်လ ၁၁၊၂၀၁၉"အဖြစ်ဝေးအဖြစ်လူ့အခြင့္အေရးတက္ႂကြစိုးရိမ်၊ပြင်ပကမ္ဘာအလေ့အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရေတိုရေရှည်ပမာဏအခါ။ ၊ဘာသာပြန်ထားသောအားဖြင့်မိုက်ကယ်မာတင်နေ့၊မတ် ၄၊၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာလ ၉၊၂၀၁၈၊၏အကြိုအပေါ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးနေ့အတွက်၊ကျွန်တော့်ဇာတိမြို့ပါ။ ဝမ် ဒန်၊ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၅၊၂၀၁၉ အပေါ်ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၊သောင်းချီထောင်ပေါင်းများစွာ၏အထူးသတင်းယူအလမ်းဖန်မှု၊တောင်းဆို။ ဤဆောင်းပါးအားဖြင့် ၁၉၈၉ နိင်။ သောငှါ ၊မတ်လ ၂၆၊၂၀၁၉ ဒီဆယ်နှစ်ကတည်းကအဖွဲ့ချုပ်မှထွက်ခွာ။ အခုထိမှတ်မိခဲ့သည့်အချိန် ။ တရုတ်ပြောင်း၊အောက်တိုဘာလ ၃၁၊၂၀၁၈ ဒီအစိတ်အပိုင်းတရုတ်နိုင်ငံ၏ပြောင်းလဲမှုရဲ့အသစ်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းစီးရီးသဘောကိုနားလည်ဖို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုအရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်ဆောင်ခဲ့။ ၊စက်တင်ဘာလ ၁၆၊၂၀၁၈ ခဲ့ကျဉ်းထောင်ကနေပြန်လွတ်လာအပေါ်ဇူလိုင်လ ၁၆၊၂၀၁၇၊ထမ်းဆောင်ပြီးနောက်လေးနှစ်အတွက်သူ၏အခန်းကဏ္ဍအတွက်။ ၊ဇူလိုင်လ ၈၊၂၀၁၈ငါ့နာမကို။ ကျွန်တော်နေခဲ့ဖူးတဲ့ရှေ့နေများအတွက်ခုနစ်နှစ်အ။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင်ကျွန်မအဖို့ပထမဦးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး။.
အောက်ပါမြေပုံကိုပြသတစ်ဦးခြုံငုံအမြင်တရုတ်နိုင်ငံ၏မြေဧရိယာ၏၃။ ခုနစ်သန်းစတုရန်းမိုင်(၉။ ခြောက်သန်းစတုရန်းကီလိုမီတာ)၁:၉၊၀၀၀၊၀၀၀။ အဂျွန်ဘာ့တ်နှင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများကိုလည်းထည့်သွင်းထားပါသည်။ နိုင်ငံ၏ပြည်နယ်၊မြို့ကြီးများ၊အတူတကွအတူရေပန်းစားခရီးသွားဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ကြောင်းမှတ်သားလွယ်ကူချောမွေ့ရန်၏ဧည့်သည်များတရုတ်နိုင်ငံ။ တရုတ်နိုင်ငံရှိယ့်လေးပြည်နယ်အဆင့်အုပ်ချုပ်ရေးယူနစ်:နှစ်ဆယ်သုံး၊လေးမိႈ(ဘေဂျင်း၊အကျဉ်းချုပ်လိုလျှင်တည်းဖြတ်ခြင်း၊ရှန်ဟိုင်း၊)၊ငါးအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသများ(ဂွမ်၊အတွင်းမွန်ဂိုလီးယား၊တိဘက်၊၊င့္ခ်က္မဲ့)နှင့်အထူးအုပ်ချုပ်ရေးဒေသ(ဟောင်ကောင်၊မကာအို)။
အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ် သည်တရုတ်၌မတ်လ ၂၀၁၉
© 2021 ရှေ့နေ၏။ အားလုံးတရုတ်ရှေ့နေကြီးဆုံးအွန်လိုင်း။